တရားသူကြီးမှတ်စာ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / ဓမ်မဟောငျးကမျြး / တရားသူကြီးမှတ်စာ
1:1 ယောရှု၏အသေခံပြီးနောက်, ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်သခင်ဘုရားနှင့်တိုင်ပင်, ဟုဆို, "ငါတို့ရှေ့မှာအဘယ်သူသည်တက်မည်, ခါနနိဆန့်ကျင်, သူစစ်ပွဲများ၏တပ်မှူးဖြစ်လိမ့်မည်?"
1:2 ထိုအခါထာဝရဘုရားမိနျ့တျောမူ: "ယုဒအမျိုးကိုတက်ရမည်. အကယ်, ငါသည်သူ၏လက်သို့ပြည်မှကယ်နှုတ်တော်မူ၏ပြီ။ "
1:3 နှင့်ယုဒအမျိုးသည်မိမိအစ်ကိုရှိမောင်အားဆို၏, "ငါ့တွေအများကြီးငါနှင့်အတူအတက်, နှင့်ခါနာန်ဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်, ငါသည်လည်း။ သင်၏အမွေမှသင်နှင့်အတူထွက်သွားပါလေစေ "ထိုအရှိမောင်ယျတျောနှငျ့အတူသှားသောဒါ.
1:4 နှင့်ယုဒအမျိုးတက်သွားလေ၏, နှင့်သခင်ခါနနိကယ်နှုတ်တော်မူ၏, အဖြစ်ဖေရဇိ, ၎င်းတို့၏လက်သို့. ထိုသူတို့က Bezek မှာယောက်ျားတသောင်းဒဏ်ခတ်.
1:5 ထိုသူတို့က Bezek မှာ Adonibezek တွေ့ရှိခဲ့, သူတို့ကသူ့ကိုဆန့်ကျင်တိုက်သော်လည်း, သူတို့သည်ဖရေဇိလူဒဏ်ခတ်.
1:6 ထိုအခါ Adonibezek ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်. ထိုသူတို့ကသူ့ကိုလိုက်နဲ့သူ့ကိုဖမ်းမိ, သူတို့ကသူ့လက်ခြေစွန်းကိုပယ်ဖြတ်လ.
1:7 ထိုအ Adonibezek ကပြောပါတယ်: "ခုနစ်ရှငျဘုရငျတို့, မိမိတို့လက်ခြေစွန်းတစ်ဖက်ဖြတ်တောက်လိုက်ရအတူ, ငါ့စားပွဲအောက်၌စားရသောအစာအကြွင်းအကျန်စုဆောင်းခဲ့ကြ. ငါပြုသကဲ့သို့, ဒါကြောင့်ဘုရားသခငျသညျ။ အကြှနျုပျကိုဆပ် "ထိုသူတို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ, သူအဲဒီမှာကွယ်လွန်သွား.
1:8 ယုဒအမျိုးသားဖြစ်လျှင်သားမူကား, ဂျေရုဆလင်ကိုဝိုငျးထား, ကသိမ်းဆည်းရမိ. ထိုသူတို့ကထားအစွန်းနှင့်အတူကလှုပ်ခတ်, မီးရှို့ရမည်တစ်ခုလုံးကိုမြို့ပို့ဆောင်.
1:9 ထိုနောကျမှ, ဆင်း, သူတို့တောင်ပေါ်မှာနေသောခါနနိလူတို့ကိုစစ် တိုက်., နှင့်တောင်ဘက်တွင်, နှင့်လွင်ပြင်၌.
1:10 နှင့်ယုဒအမျိုး, ဟေဗြုန်မြို့မှာအသကျရှငျနကွေသောခါနနိလူတို့တဘက်၌ထွက်, (ရှေးထံမှရသော၏အမည်ကိရယအာဗခဲ့သည်) ရှေဒဏ်ခတ်, နှင့်ဟိမန်, နှင့်တာလမဲ.
1:11 ထိုအရပ်၌ထံမှအပေါ်ဆက်လက်, သူဒေဗိရမြို့သားတို့ထံသို့ သွား., ရာဟောင်းနာမကိုအမှီကိရယ Sepher ခဲ့သည်, ကြောင်း, ပေးစာ၏စီးတီး.
1:12 ထိုအကာလက်ကဆိုပါတယ်, "အကြင်သူသည်ကိရယ Sepher ဒဏ်ခတ်လိမ့်မယ်, ထိုသို့မှစွန့်ပစ် တင်. ပါလိမ့်မယ်, ငါဇနီးအဖြစ်ငါ့သမီးအာခအထံတော်သို့ငါအပ်မည်။ "
1:13 အခါသြသံယေလ, ကေနတ်၏သား, ကာလက်၏ညီဖြစ်သူ, ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်, သူကလက်ထပ်ထိမ်းမြား၌သူ၏သမီးအာခပေးခဲ့တယ်.
1:14 ထိုမိန်းမသည်တစ်ဦးခရီးအပေါ်ခရီးသွားလာခဲ့ပါတယ်အဖြစ်, သူမ၏ခင်ပွန်းကသူမကိုသတိပေးဆုံး, သူမကသူမ၏ဖခင်ထံမှလယ်ကိုတောင်းဆိုမယ်လို့ဒါ. နှင့်သူမ၏မြည်းပေါ်မှာထိုင်နေစဉ်သူမသက်ပြင်းချလိုက်ခဲ့ကတည်းက, ကာလက်ကလည်း, "အဲ့ဒါဘာလဲ?"
1:15 သို့သော်သူမတုန့်ပြန်: "ငါ့ကိုမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာ Give. သငျသညျအကြှနျုပျကိုခြောက်သွေ့ပြည်ကိုငါပေးပြီပြီ. ဒါ့အပြင်တစ်ဦးရေလောင်းသောမြေယာပေးပါ။ "ထို့ကြောင့်, ကာလကျသူမ၏ဖို့အထက်ရေလောင်းမြေနှင့်အောက်ပိုင်းရေလောင်းသောပွညျကိုပေး.
1:16 ကေနိ၏ Now ကိုအမြိုးသားတို့, မောရှေ၏ဆွေမျိုး, စွံပလွံပင်များ၏စီးတီးကနေတက်ပြီ, ယုဒအမျိုးသားတို့နှငျ့အတူ, မိမိအတွေအများကြီး၏တောသို့, အာရဒ်၏တောင်ဘက်ဆီသို့ပေးသောဖြစ်ပါသည်. ထိုသူတို့ကကိုယ်တော်နှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့သည်.
1:17 ထိုအခါယုဒသည်မိမိအစ်ကိုရှိမောင်နှင့်အတူထွက်သွားလေ၏, အတူတူသူတို့ Zephath မှာနေသောခါနနိလူတို့ကိုဒဏ်ခတ်, သူတို့အသေခံစေခြင်းငှါထား. ထိုမြို့သူမြို့သား၏နာမတော်ကိုဟောမာဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်, ကြောင်း, ကျိန်ဆဲနိုင်သည်.
1:18 နှင့်ယုဒအမျိုးဂါဇာသိမ်းဆည်းရမိ, ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းနှင့်အတူ, နှင့်အာရှကေလုန်မြို့အဖြစ်ဧကြုန်မြို့, ၎င်းတို့၏နယ်နိမိတ်နှင့်အတူ.
1:19 ထိုအခါထာဝရအရှင်သည်ယုဒပြည်နှင့်အတူရှိ၏, သူသည်တောင်များသိမ်းယူ. ဒါပေမယ့်သူကချိုင့်မြို့သားတို့အထဲကသုတ်မတတျနိုငျ. သူတို့သည်မ Scythe နှင့်အတူလက်နက်ပါရထားများနှင့်အတူတိုးပွါးစေ.
1:20 ထိုအခါမောရှေကဆိုပါတယ်ခဲ့သကဲ့သို့, သူတို့ကာလကျဖို့ဟေဗြုန်, ဘယ်သူမှထွက်အာနကသားသုံးယောက်တို့ကိုဖကျြဆီး.
1:21 သို့သော်ဗင်္ယာမိန်အမျိုး၏သားယေရုရှလင်မြို့သားယေဗုသိလူသူမြို့သားထဲကအသုတ်ဘူး. ထိုအခါယေဗုသိလူယေရုရှလင်မြို့၌ဗင်္ယာမိန်အမျိုး၏သားနှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့ထားပါတယ်, ပင်ပစ္စုပ္ပန်နေ့.
1:22 ယောသပ်အမျိုးကိုလည်းဗေသလဆန့်ကျင်တက်ပြီ, နှင့်သခင်သူတို့နှင့်အတူခဲ့.
1:23 သူတို့သည်မြို့ကိုမဝိုင်းခဲ့ကြသောအခါ, ယခင်ကလုဇမြို့တည်းဟူသောဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည့်,
1:24 သူတို့တစ်တွေလူကိုတမြို့လုံးကနေထွက်ခွာမွငျလြှငျ, သူတို့သညျမဟုမိနျ့, "ကျွန်တော်တို့ကိုမြို့တံခါးနားသို့ဖော်ပြ, နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့ဆီသို့မသနားတျောမူနှင့်အတူပြုမူပါလိမ့်မယ်။ "
1:25 ထိုမင်းသည်ထိုသူတို့အားဘော်ပြပြီးမှ, သူတို့သည်ထားဘေးအစွန်းနှင့်အတူမြို့လှုပ်ခတ်. သို့သော်လူသည်, လူအပေါင်းတို့ကသူ၏ဆွေမျိုးသားချင်းများ, သူတို့ဖြန့်ချိ.
1:26 နှင့်လွှတ်လိုက်ခဲ့ဘဲလျက်, သူသည်ဟိတ္တိပြည်သို့ထွက်သွားကြ၏, သူအဲဒီမှာတစ်မြို့ built, သူလုဇမြို့တည်းဟူသောခေါ်. ဒါကြောင့်ဟုခေါ်သည်, ပင်ပစ္စုပ္ပန်နေ့.
1:27 အလားတူပဲ, မနာရှေအမျိုး Bethshean နှင့်တာနက်မြို့မဖျက်ဆီးဘဲ, ရွာနှင့်တကွ, ဒေါနှင့် Ibleam နှင့်မေဂိဒ္ဒေါ၏မဟုတ်သလိုမြို့သား, ရွာနှင့်တကွ. ထိုအခါခါနာန်သူတို့နှင့်အတူအသက်ရှင်စေခြင်းငှါစတင်ခဲ့သည်.
1:28 ထိုအခါ, ဣသရေလအမျိုးသည်ရဲစိုက်ပျိုးပြီးမှ, သူကသူတို့ကိုမြစ်လက်တက်ကိုဖန်ဆင်း, ဒါပေမဲ့သူကသူတို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ဆန္ဒရှိမဟုတ်ခဲ့.
1:29 ယခုမှာဧဖရိမ်သည်အသေသတ်ခြင်းကိုခါနနိကိုမထားခဲ့ဘူး, ဂေဇာမှာနထေိုငျသူ; အစား, သူကသူနှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့သည်.
1:30 ဇာဗုလုန်ခရိုင် Kitron နှင့် Nahalal ၏မြို့သားထွက်သုတ်ဘူး. အဲဒီအစား, ခါနနိလူ, သူတို့အလယ်၌နထေိုငျနှင့်၎င်းတို့၏မြစ်လက်တက်ဖြစ်လာပြီး.
1:31 အလားတူပဲ, အာရှာ Acco နှင့်ဇိဒုန်မြို့၏မြို့သားမဖျက်ဆီးဘဲ, Ahlab နှင့်တောလဒ်, နှင့် Helbah, နှင့် Aphik, နှင့်ရဟောဘမြို့.
1:32 သူသည်ထိုအခါနနိလူတို့အလယ်၌နထေိုငျ, ထိုပြည်မြို့သား, သူသည်သေစေခြင်းငှါမထားခဲ့ပါဘူးများအတွက်.
1:33 နဿလိခရိုင်ဗက်ရှေမက်မြို့၌နှင့် Bethanath ၏မြို့သားထွက်သုတ်ဘူး. ထိုမင်းသည်ပြည်မှခါနာန်သူမြို့သားတို့တွင် နေ.. ထိုအခါဗေ shemeshites နှင့် Bethanathites အထံတော်သို့မြစ်လက်တက်ခဲ့ကြ.
1:34 ထိုအခါအာမောရိလူတောင်တော်ပေါ်မှာဒန်၏သားအတွက် hemmed, သူတို့ကိုနေရာတစ်နေရာမပေးခဲ့ပါဘူး, သူတို့က flatlands မှဆင်းစေခြင်းငှါဒါ.
1:35 ထိုမင်းသည် har-မထွက်မှာတောငျပျေါမှာနထေိုငျခဲ့, '' ပုံနဲ့တူတဲ့အုတ်အဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသောသော,'နှင့်အာဇလုန်နှင့် Sha-alabbin မှာ. သို့သော်ယောသပ်အမျိုး၏လက်ကအရမ်းလေးလံခဲ့, သူကသူ့ကိုရန်မြစ်လက်တက်ဖြစ်လာပြီး.
1:36 အခုတော့အာမောရိလူများ၏အပိုင်းအခြား Scorpion ၏အထိပ်ကနေခဲ့, ကျောက်နှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောအရပ်တို့ကိုမဖို့.
2:1 ထိုအခါထာဝရအရှင်၏အိန်ဂျယ်ငိုကြွေးခြင်း၏နေရာဂိလဂါလမြို့မှတက်သွားလေ၏, နှင့်ဟုသူကဆိုသည်: "ငါသည်ကွာအဲဂုတ်တုပွညျမှသင်တို့ကိုဦးဆောင်, ငါပြည်သို့ပို့ဆောင်ပြီ, ငါသည်သင်တို့၏ဘိုးဘေးတို့အားကျိန်ဆိုတော်မူပြီးသောအကြောင်းကို. ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူရှိငါ၏ပဋိညာဉ်ကိုပယ်မည်မဟုတ်ကြောင်းကတိထားတော်, ပင်ကိုအစဉ်အမြဲ:
2:2 ဒါပေမယ့်သင်ဤပြည်သားတို့နှင့်အတူတစ်စာချုပ်ဖွဲ့စည်းရန်မဟုတ်ဘူးသာလြှငျ. အဲဒီအစား, သငျသညျသူတို့ယဇ်ပလ္လင်တို့ကိုမှောက်လှန်သင့်တယ်. သို့သျောလညျးသငျသညျငါ့စကားသံကိုနားထောငျဖို့ဆန္ဒရှိကြဘူး. သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဤအမှုကိုပြုသော?
2:3 ဒီအတွက်ကြောင့်, ငါသည်သင်တို့၏မကျြနှာကိုရှေ့တော်၌ဖျက်ဆီးဖို့ဆန္ဒရှိမဟုတ်, သငျသညျရနျသူတို့ကိုရှိစေခြင်းငှါဒါ, ဒါကြောင့်သူတို့ဘုရားသည်သင်၏ပျက်စီးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ "
2:4 ထိုအခါထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အားဤစကားများပြောသောအခါ, သူတို့အသံကို, သူတို့ငိုကွှေးလကျြ.
2:5 ထိုအရပျ၏နာမတော်ကိုခေါ်ခဲ့သည်, ငိုကြွေးခြင်း၏နေရာကို, သို့မဟုတ်မျက်ရည်များ၏နေရာ. ထိုအရပျ၌ထာဝရဘုရားအားသားကောင်များ immolated.
2:6 ထိုအခါယောရှုသည်လူများကိုပယ်ချ, အမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုး၏သားသညျသှား, မိမိပိုင်သောမြေအသီးအသီး, သူတို့ကရယူအံ့သောငှါဒါ.
2:7 ထိုသူတို့ကသခင်ဘုရားသည်တာဝန်ထမ်းဆောင်, အားလုံးလက်ထက်တော်ကာလအတှငျး, နှင့်အသက်ကြီးသူတို့လက်ထက်ကာလပတ်လုံးနေစဉ်အတွင်း, အဘယ်သူသည်သူ့ကိုအပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာနေထိုင်ခဲ့, သူသည်သခင်ဘုရား၏အမှုရှိသမျှကိုသိ, အရာသူသည်ဣသရေလအမျိုးအဘို့ပြု.
2:8 ထိုအခါယောရှုသည်, နုန်၏သား, သခင်ဘုရား၏ကျွန်, သေဆုံး, တရာတဆယ်နှစ်ရှိပြီဖြစ်ခြင်း.
2:9 ထိုသူတို့ကတိမနေဿ-ကားမှာမိမိပိုင်သောစိတျအပိုငျး၌သင်္ဂြိုဟ်ကြ၏, တောင်ပေါ်မှာဧဖရိမ်အမျိုးပေါ်, တောင်ပေါ်က Gaash ၏မြောက်ပိုင်းဘက်မရောက်မီ.
2:10 နှင့်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးသူတို့ဘိုးဘေးတို့ကိုစုဝေးစေခဲ့. ထိုအရပ်၌အခြားသူတွေသည်ထ, သခင်ဘုရားကိုလူသိများသူသည်ဣသရေလအမျိုးအဘို့ပြုဘူးသောအကျင့်ကိုမခဲ့သော.
2:11 ဣသရလေအမြိုးသားတို့သခင်၏ရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြု၏, သူတို့သည်ဗာလဘုရားတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်.
2:12 ထိုသူတို့ကသခင်ဘုရားသည်စွန့်ပစ်, သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင်, သူကိုအဲဂုတ္တုပြည်မှသူတို့ကိုပယ်ဦးဆောင်ခဲ့သည်. ထိုသူတို့ကနိုင်ငံခြားတပါးသောဘုရားတို့ကိုလှည့်ပတ်နေသောလူမျိုးတို့၏ဘုရားနောက်တော်သို့လိုက်, သူတို့ adored. ထိုသူတို့ကအမျက်တော်မှ, သခင်ဘုရားကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုကြပါသည်,
2:13 သူ့ကိုစွန်, ဗာလဘုရား, အာရှတရက်ဘုရားအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်.
2:14 ထိုအခါထာဝရအရှင်, ဣသရေလအမျိုးတဘက်၌အမျက်ထွက်သောဖြစ်လာဘဲလျက်, လုယက်နိုင်ငံသားတို့၏လက်သို့အပ်တော်မူ၏, သူတို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိအပေါင်းတို့နှင့်နှစ်ဖက်အပေါ်အသကျရှငျသောရန်သူသည်သူတို့ကိုမရောင်းတဲ့သူ. သူတို့ရန်သူကိုဆီးတားနိုင်ခဲ့ကြတယ်လညျးမ.
2:15 အဲဒီအစား, သူတို့သွားရချင်ခဲ့တယ်နေရာတိုင်းမှာ, သခင်ဘုရား၏လက်တော်၌သူတို့အပေါ်မှာခဲ့, ဟုသူကပြောသည်, သူကသူတို့ကိုဘေးတို့အားကျိန်ဆိုတော်နည်းတူနည်းတူ. ထိုသူတို့သညျအလှနျကိုညှဉ်းဆဲခံခဲ့ရ.
2:16 ထိုအခါထာဝရအရှင်တရားသူကြီးတွေထမြောက်စေ, သူကိုညှဉ်းဆဲတတ်သောသူတို့သည်လက်မှသူတို့ကိုလွတ်မြောက်မယ်လို့. ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့ကိုနားထောငျဖို့ဆန္ဒရှိကြဘူး.
2:17 နိုင်ငံခြားတပါးသောဘုရားတို့နှင့်အတူ Fornicating သူတို့ကို adoring, သူတို့လျင်မြန်စွာသူတို့ဘိုးဘေးချီတက်ခဲ့သောလျှောက်လမ်းစွန့်ပစ်. ထိုအခါထာဝရဘုရား၏ပညတ်တော်တို့ကိုကြားပြီးလျှင်, သူတို့ကဆန့်ကျင်ဖို့ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုပြုလေ၏.
2:18 ထိုအခါထာဝရအရှင်တရားသူကြီးတက်ပြုစုပျိုးထောင်နေစဉ်, သူတို့နေ့ရက်ကာလအတွက်, သူမသနားတျောမူသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်, သူသည်ဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်သော၏ညျညညျးတှားစကားကိုနားထောငျ, သူကသူတို့ညှဉ်းဆဲတတ်သောလုပ်ကြံရာမှသူတို့ကိုလွှတ်ပေး.
2:19 သို့သော်တရားသူကြီးတစ်ဦးသေဆုံးပြီးနောက်, သူတို့နောက်သို့လှည့်, သူတို့ဘိုးဘေးပြုသမျှထက်အများကြီးပိုဆိုးသောအရာတို့ကိုလုပ်နေခဲ့ကြ, အခြားတပါးသောဘုရားကိုအောက်ပါ, သူတို့ကိုအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်, သူတို့ကို adoring. သူတို့ကသူတို့ရဲ့ရေးရာစွန့်လွှတ်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏အလွန်ကြမ်းတမ်းသောလမ်းကိုမပြုခဲ့, သူတို့လမ်းလျှောက်ဖို့လေ့ခဲ့ကြသည်သော.
2:20 ထိုအခါထာဝရဘုရား၏ဒေါသအမျက်ကိုဣသရေလအမျိုးတဘက်၌စိတ်ပူပန်ခဲ့သည်, နှင့်ဟုသူကဆိုသည်: "ဒီကလူများအတွက်ငါ၏ပဋိညာဉ်ကိုပျက်ပြယ်စေတော်မူပြီ, အရာငါသည်သူတို့၏ဘိုးဘေးတို့နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့သော, သူတို့သည်လည်းငါ၏အသံကိုနားထောင်ခြင်းမထီမဲ့မွငျပွုပါပွီ.
2:21 ဆိုတော့, ငါသူယောရှုသေသောနောက်ကျန်သောပြည်သားအမျိုးမျိုးတို့ကိုဖျက်ဆီးမည်မဟုတ်,
2:22 သောကြောင့်, သူတို့ကိုအားဖြင့်, ငါသည်ဣသရေလအမျိုးကိုစမ်းသပ်စေခြင်းငှါ, ထိုသူတို့သည်သခင်ဘုရား၏လမ်းစောင့်ရှောက်မည်လောသို့မဟုတ်မအဖြစ်, ထိုသို့၌ကျင်လည်, သူတို့ဘိုးဘေးကြောင့်ထားရှိမည်နည်းတူ။ "
2:23 ထို့ကြောင့်, သခင်ဘုရားသည်တို့အတွက်ဤလူမျိုးအပေါင်းတို့ left, သူလျင်မြန်စွာသူတို့ကိုဖြုတ်ချဖို့ဆန္ဒရှိမဟုတ်ခဲ့, မဟုတ်သူယောရှု၏လက်သို့အပ်ခဲ့ပါ.
3:1 ဤရွေ့ကားထာဝရဘုရားသည် left သောလူမျိုးဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုအားဖြင့်သူသည်ဣသရေလအမျိုးတို့ကိုသွန်သင်ခြင်းနှင့်ခါနနိလူများ၏စစ်ပွဲများမသိခဲ့သောသူအပေါင်းတို့သည်အံ့သောငှါ,
3:2 နောက်မှသူတို့သားသူတို့ရန်သူများနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ရန်သင်ယူစေခြင်းငှါဒါ, နှင့်စစ်တိုက်လုပ်ဖို့စိတ်အားထက်သန်ရှိသည်:
3:3 ဖိလိတ္တိလူငါးမင်းညီမင်းသားတွေ, လူအပေါင်းတို့သည်ခါနနိလူ, နှင့်ဇိဒုန်, တောင်ပေါ်မှာလေဗနုန်တောင်ပေါ်ပေါ်နေသောနှင့်ဟိဝိလူ, တောင်ပေါ်ကဗာလဟေရမုန်ထံမှအဖြစ်ဝေးဟာမတ်ဖို့ဝင်ပေါက်အဖြစ်.
3:4 ထိုမင်းသည်သူတို့ကို left, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုအားဖြင့်သူသည်ဣသရေလအမျိုးကိုစမ်းသပ်အံ့သောငှါ, ထိုသူတို့သည်သခင်ဘုရား၏ပညတျတျောကိုနားထောငျမယ်လို့ဖြစ်စေမအဖြစ်, ပေးသောသူမောရှေ၏လက်ဖြင့်မိမိတို့၏ဘိုးဘေးတို့အားညွှန်ကြား.
3:5 ဆိုတော့, ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ခါနနိလူတို့အလယ်၌နထေိုငျ, နှင့်ဟိတ္တိ, နှင့်အာမောရိလူ, နှင့်ဖေရဇိ, နှင့်ဒိန, နှင့်ယေဗုသိလူ.
3:6 ထိုသူတို့ကမယားများအဖြစ်သူတို့သမီးကိုယူ, သူတို့သားတို့အားမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်သမီးတို့ပေးခဲ့တယ်, သူတို့ဘုရားများကိုဝတ်ပြု.
3:7 ထိုသူတို့က, သခင်ဘုရား၏ရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြု၏, သူတို့သညျဘုရားသခငျကိုမေ့, ဗာလဘုရားတို့နှင့်အာရှတရက်ဘုရားအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နေစဉ်.
3:8 ထိုအခါထာဝရအရှင်, ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအမျက် ထွက်. ဖြစ်လာဘဲလျက်, Cushan-Rishathaim ၏လက်သို့အပ်တော်မူ၏, ပိုတေးမီးယားရှင်ဘုရင်၏, သူတို့ရှစ်နှစ်ဘို့သူ့ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်.
3:9 ထိုသူတို့သညျကိုထာဝရဘုရားအားဟစ်ကြော်, အဘယ်သူသည်ထိုသူတို့အဘို့ကယ်တင်သောသခင်ထမြောက်စေ, သူကသူတို့ကိုလွတ်မြောက်, အမည်ရ, သြသံယေလ, ကေနတ်၏သား, ကာလက်၏ညီဖြစ်သူ.
3:10 ထိုအခါထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်သူ့၌ရှိ၏, သူသည်ဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်စိုး၏. ထိုမင်းသည်ရန်ပွဲမှထွက် သွား., နှင့်သခင် Cushan-Rishathaim ကိုအပ်, ရှုရိရှင်ဘုရင်, သူကသူ့ကိုလွှမ်းမိုး.
3:11 ထိုအခါနှစ်လေးဆယ်တိုင်တိုင်တပြည်လုံးများအတွက်တိတ်ဆိတ်ခဲ့. နှင့်သြသံယေလ, ကေနတ်၏သား, သေဆုံး.
3:12 ထိုအခါဣသရေလ၏သားတို့သည်ထိုသခင်၏ရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်လုပ်နေတာပြန်လည်စတင်, ဧဂလုန်ကိုခိုင်ခံ့စေတဲ့သူ, မောဘရှင်ဘုရင်, သူတို့တဘက်၌သူတို့ရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြု၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့.
3:13 ထိုမင်းသည်အထံတော်သို့အမ္မုန်အာမလက်၏သားအမြိုးသားတို့ပူးပေါင်း. ထိုမင်းသည်ထွက် သွား. အမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုးကိုဒဏ်ခတ်, သူစွံပလွံပင်များ၏စီးတီးသိမ်းယူ.
3:14 ဣသရလေအမြိုးသားတို့ဧဂလုန်တာဝန်ထမ်းဆောင်, မောဘရှင်ဘုရင်, တဆယ်ရှစ်နှစ်ပတ်လုံးများအတွက်.
3:15 ထိုနောကျမှ, ထိုသူတို့သည်သခင်ဘုရားအားအော်ဟစ်, အဘယ်သူသည်ထိုသူတို့အဘို့ကယ်တင်သောသခင်ထမြောက်စေ, ဧဟုဒကိုခေါ်, ဂေရ၏သား, ဗင်္ယာမိန်အမျိုး၏သား, သူကိုလက်အဖြစ်လက်ျာလက်၌ဖြစ်စေအသုံးပြုသော. ဣသရလေအမြိုးသားတို့ဧဂလုန်ထံသို့လက်ဆောင်များကိုစလှေတျတျော, မောဘရှင်ဘုရင်, သူ့ကိုအားဖြင့်.
3:16 ထိုမင်းသည်မိမိကိုမိမိအဘို့အနှစ်သန်လုပ်, တစ်လက်ကိုင်ရှိခြင်း, အလယ်မှာမှရောက်ရှိ, တစ်ဦးလက်ဖဝါး၏အရှည်. မိမိရင်ခွင်အောက်မှာစည်းလျက်ခဲ့သည်, လက်ျာပခုံးပေါ်မှာ.
3:17 ထိုမင်းသည်ဧဂလုန်ထံသို့လက်ဆောင်ကိုကမ်းလှမ်း, မောဘရှင်ဘုရင်. အခုတော့ဧဂလုန်သည်အလွန်အဆီခဲ့သည်.
3:18 ထိုမင်းသည်အထံတော်သို့၎င်းအမှတ်တရလက်ဆောင်များပေးအပ်ခဲ့သည့်အခါ, သူသည်မိမိအပေါင်းအဘော်ထုတ်နောက်တော်သို့လိုက်, သူနှင့်အတူရောက်ရှိလာခဲ့ကြသော.
3:19 ပြီးနောက်, ရုပ်တုဆင်းတုခဲ့ကြသည်ရှိရာဂိလဂါလမှပြန်လာသော, သူသည်ရှင်ဘုရင်ထံတော်ကဆိုပါတယ်, "ငါသည်သင်တို့အဘို့လျှို့ဝှက်စကားလုံးတို, အိုမင်းကြီး။ "ထိုအခါသူကငြိမ်ဝပ်စွာနေအမိန့်ထုတ်. သူ့ကိုလှည့်ပတ်ရကြ၏သောသူအပေါင်းတို့ထွက်သွားကြပြီးမှ,
3:20 ဧဟုဒသည်အထံတော်သို့ဝင်ကြ၏. ယခုသူတစ်ဦးနွေရာသီအထက်ခန်း၌တစ်ဦးတည်းထိုင်နေစဉ်. နှင့်ဟုသူကဆိုသည်, "ငါသည်။ ဘုရားသခင်ထံမှသင်တို့ဆီသို့စကားလုံးတစ်လုံးရှိတယ်" ထိုခဏရာဇပလ္လင်တော်ထ.
3:21 ဧဟုဒသည်သူ၏လက်ဝဲလက်တိုးချဲ့, သူသည်မိမိလက်ျာပခုံးကနေဓားမြှောင်ကိုယူ. မိမိဝမ်းဗိုက်ထဲသို့ထိုး
3:22 ဒါကြောင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လက်ကိုင်အနာထဲသို့ဓါးနောက်တော်သို့လိုက်ကြောင်း, နှင့်အဆီ၏ကြီးမြတ်သောငွေပမာဏအားဖြင့်ပူးတွဲခဲ့သည်. သူသည်ထားဘေးရုပ်သိမ်းပေးရန်ကိုမရ. အဲဒီအစား, သူကလုပ်ကြံခဲ့သကဲ့သို့ခန္ဓာကိုယ်၌ left. ထိုခဏ, သဘာဝတရား၏ပုဂ္ဂလိကအစိတ်အပိုင်းများအားဖြင့်, ဝမ်း၏တို့၏အညစ်အကြေးထွက် သွား..
3:23 ထိုအခါဧဟုဒဂရုတစိုက်အထက်အခန်း၏တံခါးများပိတ်ထား. ထိုအခါဘားလုံခြုံရေး,
3:24 သူကတစ်ဦးကိုပြန်လည်ထွက်ပေါက်များကထွက်သွားကြ. ထိုအခါရှင်ဘုရင်၏ကျွန်, ဝင်ရောက်, အထက်အခန်း၏တံခါးများပိတ်ထားသည်ကိုသိမြင်ကြ၏, ထိုသူတို့ကပြောပါတယ်, "ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သူနွေရာသီအခန်းတစ်ခန်း၌သူ၏ဝမ်း emptying ဖြစ်ပါတယ်။ "
3:25 နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းပြီးနောက်, သူတို့ရှက်ခဲ့ကြသည်သည်အထိ, အဘယ်သူမျှမတံခါးကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်ကိုသိမြင်လျှင်, သူတို့ကသော့ကို ယူ., ထိုသို့ဖွင့်လှစ်, သူတို့အရှင်သည်မြေပြင်ပေါ်တွင်အသေကောင်ကိုလဲလျောင်းတွေ့ရှိခဲ့.
3:26 သို့သော်ဧဟုဒသည်, သူတို့စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများရှိကြ၏စဉ်, ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နှင့်ရုပ်တုများအရပျကအတည်ပြု, သူပြန်လာသောခဲ့သောထံမှ. ထိုမင်းသည် Seirath မှာရောက်ရှိ.
3:27 ထိုသူသည်လည်းချက်ခြင်းတောင်ပေါ်မှာဧဖရိမ်အမျိုးပေါ်တံပိုးမှုတ်. ဣသရလေအမြိုးသားတို့သခင်ဘုရားနှင့်အတူဆင်းသက်, သူကမိမိကိုမိမိရှေ့မှာတိုးတက်.
3:28 ထိုသူတို့အားဆို၏: "ကိုယ့်နောက်လိုက်ခဲ့ပါ. သခင်ဘုရားသည်ငါတို့ရန်သူလက်သို့အပ်တော်မူပြီ, မောဘလူ, ။ ကိုငါတို့လက်သို့ "ထိုသူတို့ကသူ့နောက်မှာဆင်း သက်., သူတို့ယော်ဒန်မြစ်ကူးရာသိမ်းပိုက်, အရာမောဘပြည်သို့ကူး. ထိုသူတို့ကဖြတ်ကူးရန်မည်သူမဆိုခွင့်မပြုခဲ့.
3:29 ဆိုတော့, သူတို့ထိုအချိန်ကမောဘလူတို့ကိုဒဏ်ခတ်, အကြောင်းကိုတသောင်း, အားလုံးခိုင်မာတဲ့နှင့်ကြံ့ခိုင်ယောက်ျား. သူတို့ကိုအဘယ်သူအားမျှမှလွတ်မြောက်ရန်နိုငျခဲ့ကွ.
3:30 မောဘအမျိုးသည်ဣသရေလအမျိုးလက်တော်အောက်၌ထိုနေ့ရက်နှိမျ့ခခဲ့. ထိုပြည်နှစ်ရှစ်ဆယ်တိတ်ဆိတ်ခဲ့.
3:31 သူ့နော, ရှန်ဂါရှိခဲ့, အာနတ်၏သား, သူတစ်ဦး plowshare နှင့်ဖိလိတ္တိ၏လူခြောက်ရာဒဏ်ခတ်. ထိုမင်းသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုကာကွယ်.
4:1 သို့သော်ဧဟုဒ၏သေသောနောက်,, ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ထာဝရဘုရား၏ရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်လုပ်နေတာပြန်လည်စတင်.
4:2 ထိုအခါထာဝရအရှင်ယာဘိန်၏လက်သို့အပ်တော်မူ၏, ခါနာန်ပြည်၌ရှင်ဘုရင်၏, အဘယ်သူသည်ဟာဇော်မှာစိုးစံလေ၏. ထိုမင်းသည်သိသရအမည်ရှိသောသူ၏တပ်တစ်တပ်မှူးခဲ့, ဒါပေမဲ့ဒီလူကိုတပါးအမျိုးသားတို့ဂေါမှာနေထိုင်ခဲ့.
4:3 ဣသရလေအမြိုးသားတို့သခင်ဘုရားအားအော်ဟစ်. သူ Scythe နှင့်အတူရထားကိုးရာများအတွက်, သူပြင်းထန်စွာအနှစ်နှစ်ဆယ်အဘို့ထိုသူတို့ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရသော.
4:4 အခုတော့တစ်ဦးပရောဖကျမရှိ၏, ဒေဗောရ, Lappidoth ၏ဇနီး, သူအချိန်ရှိလူစစ်ကြောစီရင်.
4:5 ထိုမိန်းမသည်စွန်ပလွံပင်အောက်မှာထိုင်လျက်ခဲ့သည်, သူမ၏နာမဖြင့်သမုတ်သောခဲ့သော, ရာမမြို့၌ဗေသလအရပ်အကြား, တောင်ပေါ်မှာဧဖရိမ်အမျိုးပေါ်. ဣသရလေအမြိုးသားတို့တိုင်းတရားသဖြင့်စီရင်များအတွက်သူမ၏သို့တက်.
4:6 ထိုမိနျးမကိုစေလွှတ်ခြင်းနှင့်ဗာရက်ကိုခေါ်, အဘိနောင်၏သား, နဿလိကေဒေရှမြို့ကနေ. ထိုမိနျးမကလညျး: "ဘုရားသခင်, ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်, သငျသညျညှနျကွား: '' တာဗော်တောင်ပေါ်တစ်ခုစစ်တပ်သွားပြီးဦးဆောင်လမ်းပြ, သင်နှင့်အတူနဿလိ၏သားတို့သည်ထံမှဇာဗုလုန်၏သားထံမှတသောင်းတိုက်ပွဲများယောက်ျားယူရမည်.
4:7 ထိုအခါငါသည်သင်တို့ဆီသို့ဦးတည်ပါလိမ့်မယ်, ခြောငျးကိရှုန်၏အရပျမှာ, သိသရ, ယာဘိန်၏ဗိုလ်ခြေ၏ခေါင်းဆောင်, သူ၏ရထားများနှင့်တစ်ခုလုံးကိုလူအစုအဝေးနှင့်အတူ. ငါသည်လည်းသင်တို့၏လက်သို့သူတို့ကိုငါအပ်မည်။ ' "
4:8 ဗာရကလည်း: "သင်သည်ငါနှင့်အတူလာကြလိမ့်မည်ဆိုပါက, ကျွန်တော်သွားမည်. သငျသညျငါနှင့်အတူ လာ. ရန်ဆန္ဒရှိနေကြသည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, ငါမသွားဘူး။"
4:9 သူမသည်သူ့ကိုပြောဆို၏: "တကယ်ပါပဲ, ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူသွားပါမည်. သို့သော်ကြောင့်ဒီပြောင်းလဲမှုကိုမှ, အောင်ပွဲသည်သင်မှတ်လိမ့်မည်မဟုတ်. ဒါသိသရအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏လက်သို့အပ်ပါလိမ့်မည်။ "ထို့ကြောင့်, ဒေဗောရသည်ထ, သူမကေဒေရှမြို့မှဗာရက်နှင့်အတူခရီးထွက်.
4:10 ထိုမင်းသည်, ဇာဗုလုန်ခရိုင်နှင့်နဿလိဆင့်ခေါ်, တသောင်းတိုက်ပွဲများယောက်ျားနှင့်အတူတက်ပြီ, သူ့ကုမ္ပဏီအတွက်ဒေဗောရရှိခြင်း.
4:11 အခုတော့ဟေဗာ, ကေနိ, ယခင်ကကေနိ၏ကျန်ကနေဆုတ်ခွာခဲ့, သူ့အစ်ကိုတွေ, Hobab ၏သား, မောရှေ၏ဆွေမျိုး. ထိုမင်းသည်အဖြစ်ဝေး Zaanannim ဟုခေါ်ဝေါ်သောချိုင့်ကဲ့သို့မိမိရွက်ဖျင်တဲကိုဆောက်ခဲ့ကြ, အရာကေဒေရှမြို့အနီးခဲ့သည်.
4:12 ထိုအကဗာရက်သည်သိသရမှသတင်းပို့ခဲ့သည်, အဘိနောင်၏သား, တာဗော်တောင်ပေါ်သို့တက်ကြွခဲ့.
4:13 ထိုမင်းသည် Scythe နှင့်အတူရထားကိုးရာမှာစုဝေး, နှင့်တစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်, တပါးအမျိုးသားတို့၏ဂေါကနေ torrent ကိရှုန်မှ.
4:14 နှင့်ဒေဗောဗာရက်ကလည်း,: "ထလော့. ဒီထာဝရဘုရားသည်သင်၏လက်သို့သိသရကိုကယ်တင်သောနေ့. ။ သူသည်သင်၏တပ်မှူးသည် "ဒါ, ဗာရက်သည်တာဗော်တောင်ပေါ်မှဆင်း, ကိုယျတျောနှငျ့နှင့်တသောင်းတိုက်ပွဲများယောက်ျား.
4:15 ထိုအခါထာဝရအရှင်အလွန်ကြောက်လန့အတူသိသရကိုရိုက်လေ၏, လူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ရထားများနှင့်ထားအစွန်းနှင့်အတူသူ့အလုံးအရင်းရှိသမျှတို့သည်, ဗာရက်သည်လူတို့မျက်မှောက်၌, သိသရနိုင်အောင်အများကြီး, မိမိရထားကနေခုန်, ခြေဖြင့်ပြေး.
4:16 ဗာရပြေးရထားများကို လိုက်., နှင့်တပ်မတော်, အဖြစ်ဝေးတပါးအမျိုးသားတို့၏ဂေါအဖြစ်. ထိုအခါရန်သူ၏တစျခုလုံးကိုလူအစုအဝေးတို့ကိုခုတ်လှဲခံခဲ့ရ, ပြင်ဖကျြဆီးခွငျးဆီသို့.
4:17 ဒါပေမယ့်သိသရ, ထွက်ပြေးလာသောစဉ်, ယေ၏တဲမှာရောက်ရှိ, ဟေဗာ၏မယား, ကေနိ. ယာဘိန်အကြားငြိမ်းချမ်းရေးရှိခဲ့သည်များအတွက်, ဟာဇော်ရှင်ဘုရင်၏, နှင့်ဟေဗာ၏အိမ်တော်, ကေနိ.
4:18 ထို့ကြောင့်, ယေသိသရကိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်းငှာထွက်သွား, သူကလညျး: "ငါ့ကိုမှ Enter, ငါ့သခင်. Enter, သငျသညျ။ ကြောက်လန့်မဖြစ်သင့် "ထိုအခါသူကသူမ၏နေရာတဲထဲသို့ ဝင်., နှင့်ရင်ခွင်နှင့်အတူသူမ၏ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းခံတော်မူပြီးမှ,
4:19 သူမကလည်း,: "ငါ့ကိုပေး, တောင်းပန်ပါတယ်, ရေအနည်းငယ်. ။ ငါကအရမ်းရေငတ်ဖြစ်၏ "ထိုမိန်းမနို့တစ်ပုလင်းဖွင့်လှစ်, သူမသောက်ရန်ပေး၏. ထိုမိန်းမသည်သူ့ကိုဖုံးလွှမ်း.
4:20 သိသရသသူမ၏အားဆို၏: "တဲတံခါးရှေ့၌ရပ်. နှင့်မည်သူမဆိုရောက်ရှိလျှင်, သငျသညျမေးမြန်းလျက်, '' ဤအရပ်၌မဆိုတယောက်ဖြစ်နိုင်?'' သငျသညျကိုတုံ့ပြန်ကြမည်, '' အဘယ်သူမျှမရှိတယ်။ ' "
4:21 ဒါယေ, ဟေဗာ၏မယား, တဲတော်ထဲကဆူး ယူ. ,, နှင့်လည်းဆောက်ပုတ်ယူ. ထိုအမွငျနဲ့တိတ်ဆိတ်နှင့်အတူဝင်ရောက်, သူမသည်သူ၏ဦးခေါင်းတို့သည်ဗိမာန်တော်အုပ်ဆူးထားရှိ. ထိုအခါဆောက်ပုတ်နှင့်အတူကြောင့်သပိတ်မှောက်, သူမကသူ့ဦးနှောက်ကနေတဆင့်မောင်း, အဖြစ်ဝေးမြေပြင်အဖြစ်. ဆိုတော့, အသေသတ်ခြင်းကိုနက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်းလာရောက်ပူးပေါင်း, သူကသတိလစ်လဲကျသေ.
4:22 ထိုအခါ, ဗာရက်သည်ရောက်ရှိလာခဲ့, သိသရကိုလိုက်ရှာ. ထိုအယေ, သူ့ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ထွက်, သူ့ကိုကပြောပါတယ်, "လာ, ငါ။ သင်ရှာကြသည်တော်မူသောလူကိုပြပါလိမ့်မယ် "ထိုမိန်းမသည်တဲထဲသို့ဝင်ပြီးမှ, သူသိသရသေလွန်သောသူတို့သည်မုသာစကားကိုကိုမြင်လျှင်, ယင်းဆူးကသူ့ဗိမာန်၌ fixed နှင့်အတူ.
4:23 ထို့ကြောင့်ဘုရားသခငျသညျယာဘိန်နှိမ့်ချခဲ့ဘူး, ခါနာန်ပြည်၌ရှင်ဘုရင်၏, ထိုနေ့, ဣသရေလအမျိုး၏သားတို့ရှေ့မှာ.
4:24 ထိုသူတို့ကနေ့တိုင်းတိုးလာ. နှင့်အားကြီးသောလက်နှင့်အတူသူတို့ယာဘိန်နိုင်, ခါနာန်ပြည်၌ရှင်ဘုရင်၏, သူတို့ကသူ့ကိုထွက်သုတ်သည်အထိ.
5:1 ထိုနေ့ခြင်းတွင်, ဒေဗောရနှင့်ဗာရ, အဘိနောင်၏သား, ထွက်သီဆိုခဲ့, ဟုဆို:
5:2 လိုလိုလားလားအန္တရာယ်ရန်သင့်အသက်တာကိုပူဇျောပါပွီသောဣသရေလ၏ "အားလုံးသင်, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ!
5:3 နားထောင်, အိုရှငျဘုရငျတို့! အာရုံစိုက်, အိုမင်းညီမင်းသားတွေ! ဒါဟာငါဖြစ်ပါသည်, ငါဖြစ်ပါသည်, ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ရွှင်လန်းစွာသီချင်းဆိုလတံ့သော. ငါသည်ထာဝရဘုရား၏ရန်ဆာလံမနာသီချင်းဆိုပါမည်, ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်!
5:4 အိုထာဝရဘုရား, သငျသညျစိရကနေထွက်သွားသောအခါ, သငျတို့သဧဒုံဒေသများမှတစ်ဆင့်ကူး, မြေကြီးနှင့်မိုဃ်းကောင်းကင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်, မိုဃ်းတိမ်ကိုရေချရွာစေ.
5:5 တောင်ကြီးတို့သည်ထာဝရဘုရား၏မျက်နှာတော်ရှေ့မှာပယ်ရှားစီး, သိနာ, ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏မျက်နှာတော်ရှေ့မှာ.
5:6 ရှန်ဂါများလက်ထက်၌, အာနတ်၏သား, ယေတို့လက်ထက်၌, လမ်းခရီးတိတ်ဆိတ်ခဲ့ကြ. အကြင်သူသည်ထိုသူတို့အားဖြင့်ထဲသို့ဝင်, ကြမ်းတမ်း byways တလျှောက်လမ်းလျှောက်.
5:7 လွတ်ငြိမ်းခိုင်ခံ့သောယောက်ျား, သူတို့သည်ဣသရေလအမျိုး၌ငြိမ်ဝပ်စွာနေ, ဒေဗောရသည်ထသည်အထိ, မိခင်တစ်ဦးသည်ဣသရေလအမျိုး၌ထလျက်သည်အထိ.
5:8 သခင်ဘုရားကိုအသစ်သောစစ်ပွဲများကို ရွေးချယ်., သူကိုယျတိုငျသညျရနျသူတို့ကိုတံခါးမှောက်. လှံနှငျ့တစ်ဦးကဒိုင်းလွှားကိုဣသရေလအမျိုး၏လေးဆယ်တထောင်တို့တွင်မသိမမြင်ရခဲ့သည်.
5:9 အကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးသဣသရေလအမျိုး၏ခေါင်းဆောင်များချစ်သောသူ. အားလုံးသငျသညျသူမြား, သင့်ကိုယ်ပိုင်အခမဲ့အလိုတော်, တစ်ဦးအကျပ်အတည်းကာလအတွင်းကိုယ်ကိုကိုယ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ.
5:10 အလုပျလုပျမြည်းတျောပျေါမှာစီးတဲ့သူကိုသင်, တရားသဖြင့်စီရင်၌ထိုင်သောသူနှငျ့သငျ, လမ်းတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်တဲ့သူနှငျ့သငျ, ထုတ်ပြော.
5:11 ရထားအတူတကွလုပ်ကြံခံခဲ့ရဘယ်မှာ, နှင့်ရန်သူစစ်တပ်ကဆို့ခဲ့သည်, ထိုအရပျ၌အ, ထာဝရဘုရား၏တရားသူကြီးဖော်ပြထားပါစေ, နှင့်သူ၏ clemency ဣသရေလအမျိုး၏သတ္တိအဘို့ဖြစ်ပါစေ. ထိုအခါထာဝရဘုရား၏လူတို့သည်မြို့တံခါးမှဆင်းခဲ့ပါ, နှင့်ခေါင်းဆောင်မှုရယူ.
5:12 ထလော့, ထ, ဒေဗောရ! ထလော့, ထ, နှင့် canticle စကားပြောဖို့! ထလော့, ဗာရ, နှင့်သင့်သုံ့သိမ်းယူ, အဘိနောအိုသား.
5:13 လူအများ၏အကြွင်းအကျန်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ကြသည်. ထာဝရဘုရားသည်အားကြီးသောနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်.
5:14 ဧဖရိမ်အမျိုးထဲက, သူကအာမလက်နှင့်အတူသူတို့အားဖျက်ဆီးခံရ, သူ့ကိုအပြီး, ဗင်္ယာမိန်ခရိုင်ထဲက, ကိုယ်တော်၏လူမြား, အဆိုပါအာမလက်. မာခိရအနေဖြင့်, ခေါင်းဆောင်များရှိဆင်းသက်, ဇာဗုလုန်အနေဖြင့်, စစ်တပ်ကိုဦးဆောင်တဲ့သူတွေကို.
5:15 ဣသခါတပ်မှူးများဒေဗောရနှင့်အတူရှိ, သူတို့ဗာရက်၏ခြေလှမ်းများနောက်တော်သို့လိုက်, အဘယ်သူသည်သူ့ကိုယ်သူအန္တရာယ်, တဦးတည်းတစ်တွင်းနက်သို့ချည်းနှီးဖြစ်စေတော်မူ၏အပြေးအလွှားနဲ့တူ. ရုဗင်သည်ကိုယ်တော်တိုင်ဆန့်ကျင်ဝေဖန်လျက်နေကြသည်ခဲ့သည်. ရန်တွေ့ခြင်းကြီးစွာအသက်ဝိညာဉ်ကိုအကြားအတွေ့ခံ.
5:16 သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်နှစ်ခုနယ်နိမိတ်အကြားအသက်ရှင်နေထိုင်ကြပါ, သငျသညျသိုးများ၏ bleating နားမထောင်သောကြောင့်,? ရုဗင်သည်ကိုယ်တော်တိုင်ဆန့်ကျင်ဝေဖန်လျက်နေကြသည်ခဲ့သည်. ရန်တွေ့ခြင်းကြီးစွာအသက်ဝိညာဉ်ကိုအကြားအတွေ့ခံ.
5:17 ဂိလဒ်ပြည်သားတို့သည်ယော်ဒန်မြစ်ငြိမ်ဝပ်စွာနေ, ဒန်သင်္ဘောများနှင့်အတူသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်. အာရှာအမျိုးသည်လည်းပင်လယ်၏ကမ်းပေါ်နေထိုင်နေခဲ့ပါသည်, နှင့်ဆိပ်ကမ်းများထဲ၌နေသောနေ.
5:18 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, ဇာဗုလုန်ခရိုင်နှင့်နဿလိ Merom ၏ဒေသတွင်း၌အသေသတ်ခြင်းကိုသူတို့ဘဝကမ်းလှမ်းခဲ့သည်.
5:19 ရှင်ဘုရင်တို့သည် လာ. စစ်တိုက်; ခါနာန်အမျိုးသမီးတို့ကိုရှငျဘုရငျတို့တာနက်မြို့မှာစစ်တိုက်ကြ၏, မေဂိဒ္ဒေါရာရေအနားမှာ. သို့သော်လည်းသူတို့သည်နောက်ဥစ္စာကိုယူ.
5:20 သူတို့တဘက်၌ပဋိပက္ခကောင်းကင်ကနေခဲ့. ကြယ်များ, သူတို့ရဲ့အမိန့်များနှင့်သင်တန်းများအတွက်ကျန်ရှိနေသော, သိသရကိုစစ်တိုက်.
5:21 ကိရှုန်၏ခြောငျးသူတို့၏အသေကောင်ကွာဆွဲငင်, အဆိုပါ onrushing torrent, ကိရှုန်၏ torrent. အိုငါ့ဝိညာဉ်, ယင်းမှခှနျအားနင်း!
5:22 အဆိုပါမြင်းခွာကျိုးပဲ့ခဲ့ကြ, ရန်သူများ၏အပြင်းထန်ဆုံးဒေါသအမျက်နှင့်ပွေးစဉ်, နှင့်ပျက်စီးခြင်းမှအပေါ်တဟုန်တည်းပြေး.
5:23 '' မင်္ဂလာရှိ Meroz ရာပြည်ဖြစ်!'' သခင်ဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်ကဆိုသည်. '' မင်္ဂလာရှိ၎င်း၏မြို့သားတို့ဖြစ်! ထိုသူတို့သည်သခင်ဘုရား၏အကူအညီမှမလာဘဲအဘို့, မိမိအပါဆုံးသူရဲ၏အကူအညီဖြစ်ပါတယ်။ ''
5:24 မိန်းမတကာတို့ထက်မင်္ဂလာရှိ၏ယေဖြစ်ပါသည်, ဟေဗာ၏မယားနေိ. ထိုအမင်္ဂလာရှိသူမ၏တဲ၌သူမကဖြစ်ပါသည်.
5:25 ထိုသူသည်ရေကိုသူမ၏တောင်းပန်, သူသညျနို့ကိုပေး၏, သူသည်မင်းသားအဘို့တစ်ပန်းကန်မထိုက်မတန်အတွက်သူ့ကိုထောပတ်ကိုကမ်းလှမ်း.
5:26 သူမသည်လက်သည်းမှသူမ၏ဘယ်ဖက်လက်ကိုသွင်း, နှင့်သူမ၏အဆိုပါဆရာသမားလုပျရဲ့အဆောက်ပုတ်ဖို့လက်လက်ျာဘက်. ထိုမိန်းမသည်သိသရကိုရိုက်လေ၏, သူ၏ခေါင်းကိုအတွက်ဒဏ်ရာရာအရပ်ရှာကြံ, နှင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်သည်သူ၏ဘုံဗိမာန်ဖောက်.
5:27 ခြေရင်းများအကြား, သူကပျက်စီးခဲ့သည်. သူဝေးမိန်းမောတွေဝေခြင်းနှင့်အပေါ်လွန်. သူကသူမ၏ခြေရင်း၌ထကောက်, သူကျမဲ့နဲ့စိတ်ဆင်းရဲရှိ lay.
5:28 မယ်တော်ပြတင်းပေါက်မှတစ်ဆင့်စူးစိုက်ကြည့်နှင့် wailed. ထိုမိနျးမထကျခနျးကနေပြောသော: '' အဘယ်ကြောင့်ပြန်လာ၌ရထားနှောင့်နှေးမ? အဘယ်ကြောင့်မြင်းသူ့အဖွဲ့၏ခြေရင်းဒါနှေးကွေးများမှာ?''
5:29 သူ့မိဖုရား၏ကျန်ဒီနှင့်အတူသူမ၏မိခင်-In-တရားတုံ့ပြန်ပညာထက် သာ. ပညာသူတစ်ဦးက:
5:30 '' ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သူအခုဥစ္စာခွဲဝေဖြစ်ပါတယ်, နှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလှဆုံးကိုသူ့အဘို့ကိုရှေးခယျြခံ. မတူကွဲပြားသောအရောင်များ၏အဝတ်ကိုဥစ္စာအဖြစ်သိသရလက်သို့အပ်လျက်ရှိသည်, နှင့်အမျိုးမျိုးသောကုန်ပစ္စည်းလည်ပင်း၏ဂုဏ်အဘို့ကောက်ယူလျက်ရှိသည်။ ''
5:31 အိုထာဝရဘုရား, ဒါကြောင့်သင်၏ရန်သူအပေါင်းတို့သည်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်စေခြင်းငှါ! သင်တို့မူကားချစ်သောသူဘုန်းနှင့်အတူထွန်းလင်းစေခြင်းငှါ, နေရောင်အဖြစ်က၎င်း၏နေထွက်မှာထွန်းလင်း။ "
6:1 ထိုအခါဣသရေလ၏သားတို့သည်ထိုသခင်၏ရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြု၏, သူကိုခုနစျနှများအတွက်မိဒျန်လူတို့လက်သို့အပ်တော်မူ၏.
6:2 ထိုသူတို့သညျအလှနျသူတို့ကိုညှဉ်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရ. ထိုသူတို့ကတောင်ပေါ်မှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ Hollows နှင့်ဂူအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏, ကာကွယ်ရေးအတွက်အလွန်ခိုင်ခံ့သောအရပ်တို့ကို.
6:3 အမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုးကိုစိုက်ပြီးမှ, မိဒျန်အာမလက်, နှင့်အရှေ့ပိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်၏ကျန်တက်ပြီ,
6:4 သူတို့ကိုအကြားမိမိတို့တဲ pitching, သူတို့ကိုစိုက်ပျိုးခဲ့သည်သမျှပျက်စီးကြောင်း, အဖြစ်ဝေးဂါဇာမှတံခါးဝအဖြစ်. ထိုသူတို့သည်ဣသရေလအမျိုး၌အသက်တာကိုဆက်ထိန်းရန်မှာအားလုံးဘာမျှမကျန်ရစ်, မသိုး, မဟုတ်နှား, မဟုတ်မြည်း.
6:5 သူတို့အပေါင်းတို့နှင့်တကွတို့သည်သိုးစုကိုသူတို့ရွက်ဖျင်တဲတွေနဲ့ရောက်ရှိလာများအတွက်, သူတို့သည်ကျိုင်းကောင်များကဲ့သို့နေရာများအားလုံးမှာဖြည့်, ယောက်ျားနှင့်ကုလားအုပ်တစ်ခုမရေမတွက်နိုင်သောလူအစုအဝေး, သူတို့ထိမိသမျှယူကျုံး.
6:7 ထိုမင်းသည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဟစ်, မိဒျန်ဆန့်ကျင်တောင်းခံသောအကူအညီများ.
6:8 ထိုမင်းသည်သူတို့ကိုပရောဖကျတခဲ့သူတစ်ဦးသည်လူကိုစေလွှတ်, နှင့်ဟုသူကဆိုသည်: "အရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏, ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်: '' ငါသည်သင်တို့ကိုအဲဂုတ္တုပြည်သို့တက်စေ, ငါကျွန်၏အိမျတျောထံမှသင်တို့ဝေးကိုဦးဆောင်.
6:9 ထိုနောက်မှငါသည်အဲဂုတ္တုလူလက်မှနှငျ့သငျဉျးဆဲသောရန်သူအားလုံးထံမှသင်တို့လွတ်မြောက်. ငါသည်လည်းသင်တို့၏ဆိုက်ရောက်မှာသူတို့ကိုနှင်ထုတ်, သင်တို့ကိုငါမှသူတို့၏မြေကိုအပ်.
6:10 ထိုအခါငါကပြောသည်: ငါသင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကို. သင့်အနေဖြင့်အာမောရိနတ်ဘုရားမရိုသေရ, အဘယ်သူ၏မြေယာသငျသညျအသကျရှငျအတွက်. သင်တို့မူကားငါ့စကားသံကိုနားထောငျဖို့ဆန္ဒရှိကြဘူး။ "
6:11 ထိုအခါထာဝရဘုရား၏တစ်ခုအိန်ဂျယ်ရောက်ရှိလာခဲ့, သူသပိတ်ပင်သစ်ပင်အောက်၌ထိုင်လျက်, အရာဩဖရမှာခဲ့တယ်, နှင့်ပြီးသောယောရှပိုင်, Ezri ၏မိသားစု၏ဖခင်. နှင့်သူ၏သားဂိဒေါင်သည်နယ်ရာတန်ဆာမှာစပါးကိုနယ်နှင့်သန့်ရှင်းရေးနေစဉ်, သူကမိဒျန်ထံမှပြေးအံ့သောငှါဒါ,
6:12 ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်သူ့ကိုအားထငျရှား, နှင့်ဟုသူကဆိုသည်: "သခင်ဘုရားသည်သင်နှင့်အတူဖြစ်ပါသည်, ယောက်ျားအများစုသူရဲ။ "
6:13 ဂိဒေါင်သည်ကလညျး: "တောင်းပန်ပါတယ်, ငါ့သခင်, သခင်ဘုရားသည်ငါတို့နှင့်အတူရှိပါလျှင်, အဘယ်ကြောင့်ဤအရာတို့ကိုအကြှနျုပျတို့အားဖြစ်ပျက်ပါပြီ? အဘယ်မှာရှိသည်သူ၏အံ့ဖွယ်အများမှာ, သူတို့ပြောကြသောအခါထားတဲ့ငါတို့ဘိုးဘေးများဖော်ပြထား, '' သခင်ဘုရား။ ကွာအဲဂုတ်တုပွညျမှကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင် '' ယခုမူကားထာဝရဘုရားသည်ငါတို့စွန့်ပစ်, သူမိဒျန်လူတို့လက်သို့ငါတို့ကိုကယ်နှုတ်ခဲ့သည်။ "
6:14 ထိုအခါထာဝရအရှင်သူ့အပေါ်သို့ငုံ့ကြည့်, နှင့်ဟုသူကဆိုသည်: "ဒီနှင့်အတူထွက် Go, သင်၏အစွမ်းသတ္တိ, သငျတို့သညျမိဒနျြလူတို့လကျ မှစ. ဣသရေလလွတ်ရကြလိမ့်မည်. ငါသည်သင်တို့ကိုစေလွှတ်ပြီသိရကြ၏။ "
6:15 ထိုအကိုတုံ့ပြန်, ဟုသူကပြောသည်: "တောင်းပန်ပါတယ်, ငါ့သခင်, ဣသရေလအမျိုးကိုငါလွတ်လတံ့သောအရာကိုနှင့်အတူ? အကယ်, ငါ့မိသားစုမနာရှေအမျိုး၌ သာ. ဆင်းရဲ, ငါ့အဘ၏အိမ်တော်၌အနည်းဆုံးဖြစ်၏။ "
6:16 ထိုအခါသခင်အားဆို၏: "ငါမင်းနဲ့အတူတူရှိနေမယ်. ဆိုတော့, သငျသညျတယောက်သောသူလျှင်အဖြစ်မိဒျန်ခုတ်လှဲမည်။ "
6:17 နှင့်ဟုသူကဆိုသည်: "ငါသည်သင်တို့ရှေ့မှကျေးဇူးတော်တွေ့ပြီဆိုပါက, ငါ့ကိုငါ့ကိုစကားပြောသူကိုသင်သောနိမိတ်လက္ခဏာကိုပေး.
6:18 ထိုအသင်ဒီမှာကနေဆုတ်ခွာမပေးစေခြင်းငှါ, ငါသည်သင်တို့ထံသို့ပြန်လာချိန်အထိ, ယဇ်တင်ဆောင်လာသောနှင့်သင်ဖို့ကကမ်းလှမ်း။ "ထိုအခါသူကတုန့်ပြန်, "ငါသည်သင်တို့၏ပြန်လာဘို့စောင့်ဆိုင်းပါလိမ့်မယ်။ "
6:19 ဒီတော့ဂိဒေါင်ထဲသို့ဝင်, သူဆိတ်ပြုတ်, သူမုန့်ညက်တစ်ဦးအတိုင်းအရှည်ထဲကနေတဆေးမပါသောမုန့်ကိုဖန်ဆင်း. ထိုအခါတောင်းထဲ၌ဇာတိပကတိ setting, ကာအိုး၌ဇာတိပကတိ၏ဟင်းရည်ချပြီး, သူသည်သပိတ်ပင်သစ်ပင်အောက်ကအားလုံးကိုယူ, သူကသူ့ကိုကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်.
6:20 ထိုအခါထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်ကလညျး, "ဇာတိပကတိနှင့်တဆေးမပါသောမုန့်ကိုယူ, နှင့်ကျောက်ပေါ်မှာသူတို့ကိုနေရာ, ထိုသို့အပေါ်သို့ဟင်းရည်ကိုသွန်းလောင်း။ "သောအခါသူပြုသမျှ,
6:21 ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်တစ်န်ထမ်းများ၏အဆုံးတိုးချဲ့, အရာသူ၏လက်၌ကိုင်ထားခဲ့သည်, သူသည်အသားနှင့်တဆေးမဲ့မုန့ထိမိ. ထိုအခါမီးကျောက်ထဲကတက်ပြီ, ထိုသို့ဇာတိပကတိကိုလောင်နှငျ့တဆေးမဲ့မုန့်. ထိုအခါထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်မိမိမျက်မှောက်မှပျောက်ကွယ်.
6:22 ဂိဒေါင်သည်, ဒါကြောင့်သခင်ဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်ခဲ့ကြောင်းသဘောပေါက်, ကပြောပါတယ်: "Alas, ငါ၏သခင်ဘုရားသခငျသညျ! ကျွန်မမျက်နှာမှသခင်ဘုရားမျက်နှာမှအိန်ဂျယ်မြင်ကြပြီ။ "
6:23 ထိုအခါသခင်အားဆို၏: "ငွိမျးခမျြးသငျနှငျ့အတူဖြစ်. မကြောက်ပါနဲ့; သငျသညျမသေရကြမည်။ "
6:24 ထို့ကြောင့်, အရပ်၌ဂိဒေါင်သည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်, သူကကိုခေါ်, ထာဝရဘုရား၏ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကို, ပင်ပစ္စုပ္ပန်နေ့. ထိုမင်းသည်ဩဖရမှာပါသေးနေစဉ်, Ezri များ၏မိသားစုများအရာဖြစ်ပါသည်,
6:25 အဲဒီည, သခင်ဘုရား၏အထံတော်ကဆိုပါတယ်: "သင်၏အဘ၏တစ်ဦးနွားထီးကိုယူ, ခုနစ်နှစ်နောက်ထပ်နွားထီး, သငျတို့သဗာလ၏ယဇ်ပလ္လင်ကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မည်, သင်၏အဘရဲ့အရာဖြစ်ပါသည်. သင်သည်ထိုယဇ်ပလ္လင်ပတ်လည်သောသန့်ရှင်းသောအာရှရပင်များကိုခုတ်လှဲရမည်.
6:26 သငျတို့သညျသငျ၏ဘုရားသခငျထာဝရဘုရားအားယဇ်ပလ္လင်တခုကိုတည်ဆောက်ကြမည်, ဤကျောက်များ၏ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာ, အရာအပေါ်ကိုသင်တို့ရှေ့မှာပူဇော်သောယဇ်ထားရှိ. တဖန်သင်တို့ဒုတိယနွားထီးတကောင်ကိုယူရမည်, သင်သစ်သားပုံပေါ်မှာမီးရှို့ပူဇော်ရမည်, ရာသငျသညျအာရှရပင်မှဆင်းဖြတ်ရမည်။ "
6:27 ထို့ကြောင့်, ဂိဒေါင်သည်, သူ၏ကျွန်များအနေဖြင့်လူတကျိပ်ယူပြီး, သခင်ဘုရားသည်သူ့ကိုညွှန်ကြားခဲ့သည်နည်းတူပြုကြ၏. သို့သော်မိမိအဘ၏အိမ်သူအိမ်သားကွောကျရှံ့သော, ထိုမြို့သူမြို့သားနှင့်ယောက်ျား, သူကနေ့ထိုသို့ပြုမှဆန္ဒရှိမဟုတ်ခဲ့. အဲဒီအစား, သူကညဉ့်အခါအရာရာပြီးစီး.
6:28 ထိုမြို့သားတို့သညျနံနကျထသောအခါ, သူတို့ဗာလ၏ယဇ်ပလ္လင်ကိုဖကျြဆီးခွငျးကိုမွငျလြှငျ, နှင့်သန့်ရှင်းသောအာရှရပင်တို့ကိုခုတ်လှဲ, နှင့်ဒုတိယနွားထီးတကောင်ကိုယဇ်ပလ္လင်ပေါ်မှာသတ်မှတ်ထား, အရာထို့နောက် built ခဲ့.
6:29 ထိုသူတို့ကတယောက်ကိုတယောက်ပြော, "အဘယ်သူသည်ဤအမှုကိုစီရင်?"သောအခါသူတို့လုပ်ရပ်၏စာရေးဆရာအဖြစ်နေရာတိုင်းမေးမြန်းပြီး, ထိုသို့ပြောဆို, "ဂိဒေါင်သည်, ယောရှ၏သား, ဤအရာအလုံးစုံကိုပြု၏။ "
6:30 ထိုသူတို့က, ယောရှအားဆို၏: "ဒီမှာရှေ့ဆက်သင်၏သားကိုယူခဲ့, သူသေဆုံးစေခြင်းငှါဒါ. သူဗာလ၏ယဇ်ပလ္လင်ကိုဖျက်ဆီးပစ်ပြီ, သူသည်သန့်ရှင်းသောအာရှရပင်တို့ကိုခုတ်လှဲလိုက်ပါတယ်။ "
6:31 ဒါပေမယ့်သူကသူတို့ကိုတုံ့ပြန်: "သင်ဗာလသေစားသေစေသောဖြစ်နိုင်, သငျသညျမိမိအကိုယ်စားတိုက်ထုတ်နိုင်အောင်? မိမိအရန်ဘက်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်သောသူမည်သည်ကား,, အလင်းကိုမနက်ဖြန်ရောက်ရှိရှေ့တော်၌သေဆုံးကြကုန်အံ့; သူကဘုရားကိုပါလျှင်, သူ့ကိုသူ၏အဘို့ယဇ်ပလ္လင်ကိုမှောက်ခဲ့သူကသူ့ကိုဆန့်ကျင်သည်ကိုယ်တော်တိုင်အတွက်နောင်တရစေ။ "
6:32 ထိုနေ့ရက်မှသည်, ဂိဒေါင်သည်အဘိမလဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်, ယောရှကဆိုပါတယ်မိသောကြောင့်, "ဗာလသည်သူ၏ယဇ်ပလ္လင်ကိုမှောက်ခဲ့သူကသူ့ကိုဆန့်ကျင်သည်ကိုယ်တော်တိုင်လက်စားချေကြကုန်အံ့။ "
6:33 ဆိုတော့, မိဒျန်အားလုံး, အာမလက်, နှင့်အရှေ့ပိုင်းလူမျိုး စုဝေး.. ထိုအခါယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူး, သူတို့ယေဇရေလချိုင့်၌စားခန်းချကြ၏.
6:34 သို့သော်သခင်ဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဂိဒေါင်ထဲသို့ဝင်, အဘယ်သူသည်, တံပိုးမှုတ်သံမြည်, သူကသူ့ကိုနောက်ကိုလိုက်အံ့သောငှါဒါဗြဇော၏အိမ်တော်ကိုခေါ်.
6:35 ထိုမင်းသည်မနာရှေအမျိုးအားလုံးသို့စေလွှတ်, သူကိုလည်းသူ့ကိုနောက်တော်သို့လိုက်, အာရှာသို့နှင့်အခြားသံတမန်တို့ကို, ဇာဗုလုန်, နှင့်နဿလိ, သူ့ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့သှားသော.
6:36 ဂိဒေါင်သည်ဘုရားသခင့ဆိုပါတယ်: "သင်သည်ငါ၏လက်ဖြင့်ဣသရေလအမျိုးကိုကယ်တင်မည်ဆိုပါက, သငျသညျဆိုသည်နည်းတူ:
6:37 ငါကောက်နယ်တလင်းပေါ်မှာဤသိုးမွေးမွေးထားမည်. သာမွေးပေါ်နှင်းရှိလိမ့်မည်ဆိုပါက, နှင့်မြေတပြင်လုံးသွေ့ခြောက်, ငါသည်ငါ့လက်ဖြင့်သိရကြလိမ့်မည်, သငျသညျတောင်းသည်အတိုင်း, သငျသညျဣသရလေလွတ်သွားပါမည်။ "
6:38 ဒါကြောင့်ပြုမိခဲ့သည်. ထိုအခါညဉ့်၌မြင့်တက်, မွေးထဲကအ wringing, သူကနှင်းနှင့်အတူအိုးဖြည့်.
6:39 တဖန်သူသည်ဘုရားသခင်၏ရန်ကဆိုပါတယ်: "စို့သင့်ရဲ့ဒေါသအမျက်ကိုအကြှနျုပျကိုဆန့်ကျင် enkindled မရ, တစ်ခါတုန်းကပိုပြီးစမ်းသပ်မယ်ဆိုရင်, သိုးမွေးအတွက်နိမိတ်လက္ခဏာကိုရှာကြံ. ငါသာအသိုးမွေးသွေ့ခြောက်သောဖြစ်မည်အကြောင်းဆုတောင်းပဌနာ, နှင့်မြေတပြင်လုံးသည်နှင်းစိုစွတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ "
6:40 ထိုညဥ့်, သူကမေတ္တာရပ်ခံခဲ့သောအဖြစ်သညျဘုရားသခငျကိုပြု၏. ထိုသို့သာမွေးပေါ်သွေ့ခြောက်လေ၏, လူအပေါင်းတို့သည်မြေပြင်ပေါ်တွင်နှင်းရှိခဲ့.
7:1 ဒါအဘိမလ, ထို့အပြင်ဂိဒေါင်သောသူသည်, ညဉ့်အခါမြင့်တက်, ကိုယျတျောနှငျ့နှင့်လူအပေါင်းတို့သည်, Harod ဟုခေါ်ဝေါ်သောစမ်းရေတွင်း၌ထံသို့ ဝင်.. အခုဆိုရင်မိဒျန်တပ်ချိုင့်၌ခဲ့, အမြင့်ဆုံးသောတောင်ကုန်း၏မြောက်ပိုင်းဒေသမှ.
7:2 ထိုအခါထာဝရအရှင်ဂိဒေါင်အားမိန့်: "သင်နှင့်အတူလူများအများဖြစ်ကြ၏, ဒါပေမယ့်မိဒျန်မိမိတို့လက်သို့အပ်လိမ့်မည်မဟုတ်, ငါ့ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဣသရေလအမျိုးသည်တန်ခိုးဘုန်းအသရေဘို့, ဆိုရမည်, '' ငါသည်ငါ၏ကိုယ်ပိုင်တန်ခိုးတော်အားဖြင့်လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ ''
7:3 လူအားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, လူအပေါင်းတို့၏ကြားနာမှုအားဟစ်ကြော်, '' အကြင်သူသည်ကြောက်သို့မဟုတ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ထားပါတယ်, ။ သူ့ကိုပြန်လာကြကုန်အံ့ '' ပြီးတော့နှစ်သောင်းနှစ်ထောင်ကိုလူများအနေဖြင့်ယောက်ျား၏တောင်ကိုဂိလဒ်ပြည်ကနေနုတ်ထွက်နှင့်ပြန်လာသော, သာတသောင်းကျန်ရစ်.
7:4 ထိုအခါထာဝရအရှင်ဂိဒေါင်အားမိန့်: "ဒီကလူအလွန်များသေး. ရေကသူတို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြ, ထိုအရပ်၌သူတို့ကိုငါစုံစမ်းမည်. ထိုအခါငါသူသည်သင်တို့နှင့်အတူလိုက်စေခြင်းငှါသင်တို့ကိုပြောပြတော်မူသောအကြောင်းကိုသူတို့အား, သူ့ကိုသွားပါစေ; ထိုသူသည်ငါသွားကြဖို့မြစ်တားရကြလိမ့်မည်ဘယ်သူကို, သူ့ကိုပြန်လာပါစေ။ "
7:5 လူများတို့သည်ရေဆင်းသက်တော်မူပြီးမှ, သခင်ဘုရားသည်ဂိဒေါင်အားမိန့်: "အကြင်သူသည်လျှာနှင့်အတူရေအိတ်ထဲ၌လောင်းလျက်ရှိပါလိမ့်မယ်, ခွေးအများအားဖြင့်ရင်ခွင်အဖြစ်, သငျသညျမိမိတို့ကိုယ်ကသူတို့ကိုခွဲထုတ်ရကြလိမ့်မည်. ထိုအခါသူတို့ဒူး ထောက်. အခြားဘက်ခြမ်းမှာရှိကြလိမ့်မည်ကွေးနေဖြင့်သောက်ရလိမ့်မည်။ "
7:6 ဒီတော့ကိုရေ lapped ဖူးသောသူတို့၏အမျိုးအအရေအတွက်ကို, နှုတ်တော်ထွက်အဖို့လက်နှင့်အတူကယူလာသဖြင့်, သုံးရာတို့ကိုခဲ့သည်. ထိုအခါလူအစုအဝေးအပေါငျးတို့သကျန်ရှိသောဒူးကွေးနေဖြင့်လည်းသောက်.
7:7 ထိုအခါထာဝရအရှင်ဂိဒေါင်အားမိန့်: "ရေကို lapped သူသုံးရာတို့ကိုအားဖြင့်, ငါသည်သင်တို့ကိုလွတ်သွားပါမည်, ငါသည်လည်းသင်တို့၏လက်သို့မိဒျန်အပ်မည်. ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အရပ်မှလူအစုအဝေးအပြန်အပေါငျးတို့သကျန်ရှိသောပါစေ။ "
7:8 ဆိုတော့, သူတို့ရဲ့အရေအတွက်နှင့်အညီအစားအစာနှင့်တံပိုးကိုယူပြီး, သူကနောက်ကျောကသူတို့ရွက်ဖျင်တဲကိုသွားလူအစုအဝေးအပေါငျးတို့သကြွင်းသောအရာညွှန်ကြား. ထိုအခါသုံးရာတို့ကိုအတူ, သူပဋိပက္ခမှသူ့ကိုယ်သူပေးခဲ့တယ်. အခုဆိုရင်မိဒျန်တပ်ကိုအောက်တွင်ခဲ့သည်, ချိုင့်၌.
7:9 တူညဉ့်၌, သခင်ဘုရား၏အထံတော်ကဆိုပါတယ်: "ထလော့, ပြီးမှတပ်ထဲသို့ဆင်း. ငါသည်သင်တို့၏လက်သို့အပ်တော်မူ၏ပြီ.
7:10 သင်တို့မူကားတစ်ဦးတည်းမသွားကြောက်လျှင်, ကိုယ်တော်၏ကျွန် Purah သင်နှင့်အတူဆင်းကြကုန်အံ့.
7:11 တဖန်သင်တို့ကိုသူတို့ပြောနေနေကြတယ်ဆိုတာကိုနားထောင်မည်သည့်အခါ, ထို့နောက်သင်၏လက်ကိုခိုင်ခံ့စေပါလိမ့်မည်, သင်ရန်သူတပ်ကိုပိုမိုစိတ်ချလက်ချဆင်းပါလိမ့်မယ်။ " သို့ဖြစ်., သူသည်တပ်တစ်တစျပိုငျးကိုသို့မိမိကျွန် Purah နှင့်အတူဆင်းသက်, လက်နက်ကိုင်ယောက်ျားတစ်ဦးလက်ပတ်နာရီရှိခဲ့သည်ဘယ်မှာ.
7:12 သို့သော်မိဒျန်, အာမလက်, လူအပေါင်းတို့အရှေ့ပိုင်းလူမျိုးချိုင့်၌ဖြန့်ကို တင်., ကျိုင်းကောင်များ၏လူအစုအဝေးနဲ့တူ. သူတို့ကုလားအုပျ, လွန်း, မရေမတွက်နိုင်သောခဲ့ကြသည်, ပင်လယ်ကမ်းတွင်တည်ရှိသည်သောသဲနဲ့တူ.
7:13 ဂိဒေါင်သည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမှ, တစ်စုံတစ်ဦးကအိပ်မက်မိမိအိမ်နီးချင်းကိုပြောသည်. သူမြင်သောအရာကို related, ဒီလိုမျိုး: "ကျွန်မနေတဲ့အိပ်မက်ကိုမြင်လျှင်, ထိုသို့ပေါင်မုန့်လျှင်သကဲ့သို့ငါ့ကိုပုံ, ရှင်းပြီမုယောစပါးကနေပြာကိုအောက်မှာဖုတ်, မိဒျန်တပ်ထဲသို့ဆင်းသက်. ထိုသို့တဲရောက်လာသည့်အခါတိုင်း, အဲဒါကိုလှုပ်ခတ်, ထိုသို့မှောက်, ရှင်းရှင်းမြေပြင်ကညှိပြီး။ "
7:14 သူပြောသောအဘယ်သူကိုမှသူ, တုန့်ပြန်: "ဒါဟာဘာမှပေမယ်ဂိဒေါင်၏ထားဖြစ်ပါတယ်, ယောရှ၏သား, ဣသရေလအမျိုး၏လူယောက်ျား. သခင်ဘုရားသည်မိမိလက်ကိုမိဒျန်ကယ်နှုတ်တော်မူပြီ, သူတို့ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုစခန်းနှင့်အတူ။ "
7:15 ဂိဒေါင်သည်အိပ်မက်နှင့်၎င်း၏အနက်ကိုကြားလျှင်, သူကကိုးကှယျ. ထိုမင်းသည်ဣသရေလအမျိုး၏တပ်သို့ပြန်သွား၏, နှင့်ဟုသူကဆိုသည်: "ထလော့! သခင်ဘုရားအဘို့အကိုငါတို့လက်သို့မိဒျန်တပ်ကိုအပ်လိုက်ပါတယ်။ "
7:16 ထိုမင်းသည်သုံးပိုင်းစသုံးရာတို့ကိုအပိုင်းပိုင်းခွဲ. ထိုမင်းသည်တံပိုးပေးခဲ့တယ်, နှင့်အချည်းနှီးသောအိုး, နှင့်အိုး၏အလယ်များအတွက်မီးခွက်, ၎င်းတို့၏လက်သို့.
7:17 ထိုသူတို့အားဆို၏: "သင်ငါ့ကိုပြုပါအဘယ်အရာကိုမြင်ကြလိမ့်မည်, အတူတူပြုပါ. ငါစခန်းတစ်ခုသောအဘို့ကိုရိုက်ထည့်ပါဦးမည်, ငါအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကို, သငျသညျနောကျလိုကျရကြလိမ့်မည်.
7:18 ငါ့လက်၌တံပိုးမှုတ်ထုတ် blares လိုက်တဲ့အခါ, သင်သည်လည်းတံပိုးမြည်ရလိမ့်မည်, တပ်အရပ်ရပ်အပေါ်, နှင့်သခင်ရန်နှင့်ဂိဒေါင်အတူတကွကြွေးကြော်။ "
7:19 ဂိဒေါင်သည်, သူနှင့်အတူရှိနသောသူနှင့်သုံးရာတို့ကို, တပ်တစ်သောအဘို့ကိုဝင်ကြ၏, ညဉ့်သန်းခေါင်ယံအတွက်လက်ပတ်နာရီရဲ့အစမှာ. ထိုအခါအစောင့်သတိပေးခဲ့ကြရသောအခါ, သူတို့ကတံပိုးမှုတ်ရန်နှင့်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဆန့်ကျင်အိုးခုတ်တီးစတင်.
7:20 ထိုသူတို့စခန်းပတ်ပတ်လည်သုံးသောနေရာများမှာသူတို့ရဲ့တံပိုးမှုတ်သောအခါ, နှင့်၎င်းတို့၏ရေအိုးလည်းကျိုးခဲ့, သူတို့လက်ဝဲလက်၌မီးခွက်ကျင်းပ, နှင့်၎င်းတို့၏လက်ျာလက်၌တံပိုးမှုတ်. ထိုသူတို့သညျကွှေးကျွော, "သခင်နှင့်ဂိဒေါင်၏ထား!"
7:21 အသီးအသီးတရန်သူစခန်းတစ်လျှောက်လုံးမိမိနေရာ၌ရပ်နေ၏. ဒါတစ်ခုလုံးကိုစခန်းရှုပ်ထွေးခဲ့; သူတို့ပွေး, ငိုကြွေးခြင်းနဲ့အော်ဟစ်.
7:22 ထိုအခါသုံးရာတို့ကိုလက်ထက်တို့သည်တံပိုးမြည်ဆက်လက်. ထိုအခါထာဝရအရှင်တစ်ခုလုံးကိုစခန်းထဲသို့ဓားကိုစလှေတျတျော, သူတို့ကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့တဲ့ခြင်းနှင့်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ခုတ်လှဲ,
7:23 အဖြစ်ဝေးဗက်အဖြစ်ထွက်ပြေး, နှင့်ဇေရရတ်အတွက် Abelmeholah ၏အခြေစိုက်စခန်း. သို့သော်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်အမိဒျန်လိုက်, နဿလိခရိုင်နှင့်အာရှာခရိုင်ထဲကနေအော်ဟစ်, မနာရှေအမျိုးအားလုံးထံမှ.
7:24 ဂိဒေါင်သည်တောင်ပေါ်မှာဧဖရိမ်အမျိုးအားလုံးတစ်လျှောက်လုံးစေလွှတ်, ဟုဆို, "မိဒျန်တွေ့ဆုံရန်ဆင်းသက်, နှင့်။ အဖြစ်ဝေး Bethbarah နှင့်ယော်ဒန်မြစ်အဖြစ်ရှေ့ဆက်သူတို့ထဲကရေကိုသိမ်းပိုက် "ထိုအခါဧဖရိမ်အမျိုးသားရှိသမျှတို့ကိုအော်ဟစ်, သူတို့ရှေ့ဆက်သူတို့ထဲကရေကိုသိမ်းပိုက်, ယော်ဒန်မြစ် မှစ. Bethbarah မှ.
7:25 ထိုအမိဒျန်လူနှစ်ဦးဖမ်းမိဘဲလျက်, ဩရနှင့်ဇေဘတို့ကို, သူတို့ဩရ၏ကျောက်မှာအသေသတ်ခြင်းကိုဩရထား, အမှန်တကယ်, ဇေဘတို့ကို, ဇေဘတို့ကိုများ၏ရာမှာ. ထိုသူတို့ကမိဒျန်လိုက်, ဂိဒေါင်ရန်ဩရနှင့်ဇေဘတို့ကို၏ဦးခေါင်းတင်ဆောင်လာသော, ယော်ဒန်မြစ်၏ရေကိုဖြတ်ပြီး.
8:1 ဧဖရိမ်အမျိုးသားတို့သည်အထံတော်သို့ကဆိုပါတယ်, "ဒါဘာလဲ, သင်ပြုစေချင်ကြောင်း, သငျသညျမိဒျန်တိုက်သွားသောအခါသင်သည်ငါတို့ကိုမခေါ်ဘဲမယ်လို့ဒါ?"ထိုသူတို့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်သူ့ကိုဆုံးမတော်မူ, နှင့်အကြမ်းဖက်မှုများကို အသုံးပြု. နီးကပ် လာ. ,.
8:2 ထိုမင်းသည်ထိုသူတို့အားတုံ့ပြန်: "ဒါပေမယ့်ငါသည်သင်တို့ကိုအဘယ်သို့ပြုသည်ကိုအမျှဤမျှလောက်ကြီးစွာသောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အဘယျသို့ပွုမိပါပွီနိုင်? အဗြဇော၏စပျစ်သီးကိုထက်ပိုကောင်းဧဖရိမ်၏စပျစ်သီး၏တဦးတည်းတစည်းမဟုတျပါဘူး?
8:3 သခင်ဘုရားသည်သင့်လက်၌မိဒျန်များ၏ခေါင်းဆောင်များကိုအပ်လိုက်ပါတယ်, ဩရနှင့်ဇေဘတို့ကို. ငါသည်သင်တို့ကိုအဘယ်သို့ပြုသည်ကိုအမျှဤမျှလောက်ကြီးစွာသောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အဘယျသို့ပွုမိပါပွီနိုင်?"သောအခါသူသည်ဤပြောသည်, သူတို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အား, သူ့ကိုဆန့်ကျင်တက်ရောင်ရမ်းခြင်းခံခဲ့ရရာ, ငွိမျခဲ့သည်.
8:4 ဂိဒေါင်သည်ယော်ဒန်မြစ်ရောက်လာခဲ့ကြသောအခါ, သူကသူနှင့်အတူသူသုံးရာတို့ကိုအတူကကူး. ထိုသူတို့ကသူတို့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုလိုက်ရန်နိုင်ခဲ့သောကြောင့်ငြီးငွေ့ခဲ့ကြ.
8:5 ထိုမင်းသည်သုကုတ်မြို့သားတို့သည်အားဆို၏, "တောင်းပန်ပါတယ်, ငါနှင့်အတူအဘယ်သူသည်လူမုန့်ပေး, သူတို့သည်အလွန်အားနည်းနေကြသည်များအတွက်, ကျနော်တို့အမှုထမ်းတို့ကိုမှီအောင်လိုက်နိုင်ပေမည်ဒါကြောင့်, မိဒျန်မင်းကြီး။ "
8:6 သုကုတ်၏ခေါင်းဆောင်များဖြေကြား, "ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အမှုထမ်းများ၏လက်ဝါးသင်၏လက်၌ရှိကြ၏, နှင့်ဤအကြောင်းပြချက်များအတွက်, သငျသညျငါတို့သည်သင်တို့၏စစ်တပ်မှမုန့်ပေးသောကိုတောင်းခံပါ။ "
8:7 ထိုသူတို့အားဆို၏, "ဒါပြီးရင်, သခင်ဘုရားသည်ငါ့လက်သို့အမှုထမ်းအပ်လိမ့်မည်သည့်အခါ, ငါသဲကန္တာရ၏ဆူးပင်အမျိုးမျိုးနှင့်သင်တို့အသားကိုနယ်ပါလိမ့်မယ်။ "
8:8 ထိုအရပ်၌မှတက်မယ့်, သူကပေနွေမှာရောက်ရှိ. ထိုမင်းသည်အလားတူအရပ်ကိုသားတို့သညျမိနျ့တျောမူ၏. ထိုသူတို့ကလည်းသူ့ကိုပြန်ပြောသည်, သုကုတ်မြို့သားတို့သည်ထူးမယ့်အဖြစ်.
8:9 ဒီတော့သူလည်းကလညျး, "ငါသည်ငြိမ်ဝပ်စွာနေတဲ့ Victor အဖြစ်ပြန်သွားကြပြီကြလိမ့်မည်သည့်အခါ, ငါသည်ဤရဲတိုက်ကိုဖျက်ဆီးမည်။ "
8:10 အခုတော့အမှုထမ်းသူတို့ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်နှင့်အတူအနားယူခဲ့သည်. တဆယ်တထောင်ယောက်ျားအရှေ့ပိုင်းကလူအပေါငျးတို့သတပ်တွေထဲကထွက်ခွာသွားခဲ့ကြသည်များအတွက်. ထိုအခါဓားကိုဆွဲငင်တရာနှစ်ဆယ်တထောင်သူရဲတို့ကိုခုတ်လှဲခဲ့.
8:11 ဂိဒေါင်သည်တဲ၌နေသောခဲ့ကြသည်သောသူတို့၏အမျိုးအလမ်းဖြင့်တက်ပြီ, နောဗာသည်လည်းနှင့် Jogbehah ၏အရှေ့ပိုငျးမှ. သူသည်ထိုအရန်သူစခန်းလှုပ်ခတ်, သူကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုတို့ဆိုးရွားသောဘာမျှသံသယခဲ့ကြသည်.
8:12 နှင့်အမှုထမ်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်. ဂိဒေါင်သည်သူတို့ကိုလိုက်နှင့်မှီ, ရှုပ်ထွေးမှုများသို့၎င်းတို့၏တစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်ကပေးပို့ခြင်း.
8:14 သူကကုတ်ဒလူတို့သညျအထဲမှတစ်ဦးကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုယူ. ထိုမင်းသည်သူ့ကိုကုတ်၏ခေါင်းဆောင်များနှင့်အကွီးအကဲမြားများ၏အမည်များကိုမေးမြန်း. ထိုမင်းသည်ခုနစ်ဆယ်ခုနစ်ယောက်တို့ကိုဖော်ပြထား.
8:15 ထိုမင်းသည်သုကုတ်မြို့သို့သွား၏, သူကထိုသူတို့အားပြောဆို: "ကှ္ဂျကှ္ဂျအမှုထမ်း, အဘယ်သူကိုကျော်သငျသညျအကြှနျုပျကိုဆုံးမတျောမူ, ဟုဆို: '' ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အမှုထမ်းလက်သင့်လက်၌ရှိကြ၏, နှင့်ဤအကြောင်းပြချက်များအတွက်, သငျသညျအကြှနျုပျတို့နေရပ်ရင်းနှင့်အားနည်းသူလူတို့အားမုန့်ပေးကြောင်းတောင်းဆိုရန်။ ' "
8:16 ထို့ကြောင့်, သူမြို့၌အသက်ကြီးသူတို့သည်လူကိုယူ, နှင့်, သဲကန္တာရ၏ဆူးပင်အမျိုးမျိုးနှင့်သုံးပြီး, ထိုသူတို့နှင့်အတူနယ်, သူအပိုင်းပိုင်းသုကုတ်မြို့သားတို့သည်ဖြတ်.
8:17 သူလည်းပေနွေ၏ရဲတိုက်မှောက်, သူမွို့သားတို့သညျဦးသေဆုံး.
8:18 ထိုမင်းသည်အမှုထမ်းတို့အားဆို၏, "လူ၏အဘယျသို့သောသင်တာဗော်မြို့မှာအသတ်ခံသောသူတို့ကိုခဲ့ကြသည်?"သူတို့ကတုန့်ပြန်, "သူတို့ကသငျသညျကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏, သူတို့တဦးတည်းသောရှငျဘုရငျ၏သားကဲ့သို့ဖြစ်၏။ "
8:19 သူကလညျး: "သူတို့ကငါ့ညီအစ်ကိုတို့ခဲ့ကြသည်, ငါ့အမိ၏သား. သခင်ဘုရားဘဝတွေကိုအဖြစ်, သင်သည်ထိုသူတို့ထိန်းသိမ်းထားခဲ့မယ်ဆိုရင်, ငါသည်သင်တို့ကိုမသတ်လိမ့်မယ်။ "
8:20 ထိုမင်းသည်ယေသာပြောဆို၏, မိမိသားဦးသား, "ထလော့, နှင့်။ အသေခံစေ "ဒါပေမယ့်သူသည်မိမိဓားကိုဆွဲမပြုခဲ့. သူကကြောက်ဘို့, ဆဲကောင်လေးဖြစ်ခြင်း.
8:21 နှင့်အမှုထမ်းကပြောသည်: "သင်ထကျွန်တော်တို့ကိုဆန့်ကျင်အလျင်စလိုသင့်တယ်. တစ်ဦးယောက်ျား၏အစွမ်းသတ္တိကိုကသူ့အသက်အရွယ်နှင့်အညီဖြစ်၏။ "ဂိဒေါင်သည်ထ, သူအမှုထမ်းအသတ်ခံရ. သူသည်ထိုအဆင်တန်ဆာများနှင့်လုံးကိုယူ, တော်ဝင်ကုလားအုပ်၏လည်ပင်းများသောအားဖြင့်ဆင်ယင်ခြယ်သနေသောနှင့်အတူ.
8:22 ဣသရလေလူအပေါငျးတို့ဂိဒေါင်အားမိန့်: "သင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုအုပ်စိုးသင့်တယ်, နှင့်သင့်သား, နှင့်သင့်သား၏သား. သငျသညျမိဒျန်လူတို့လက်မှကျွန်ုပ်တို့ကိုလွတ်မြောက်သည်။ "
8:23 ထိုသူတို့အားဆို၏: "ငါသည်သင်တို့ကိုအုပ်စိုးမည်မဟုတ်. ကိုမကြှနျုပျ၏သားကိုစည်းမျဉ်းကိုသင်ကျော်ရကြမည်. အဲဒီအစား, ထာဝရဘုရားသည်သင့်ကိုအုပ်စိုးရလိမ့်မည်။ "
8:24 ထိုသူတို့အားဆို၏: "ငါသည်သင်တို့ထံကတဦးတည်းတောင်းဆိုမှုကိုအယူခံလွှာတင်ရေး. ငါ့ကိုကသင်၏ဥစ္စာထံမှပုတီးပေးပါ။ "ဟုအဆိုပါဣရှမေလသည်ရွှေနားကပ်ဝတ်ဆင်လေ့ရှိသောခဲ့ကြသည်.
8:25 သူတို့ကတုန့်ပြန်, "ကျနော်တို့က။ သူတို့ကိုပေးရအလွန်ဆန္ဒရှိနေကြသည်" ထိုမြေပေါ်တွင်ရင်ခွင်ပျံ့နှံ့, သူတို့ကအပေါ်သို့ဥစ္စာထံမှပုတီးကိုနှင်ထုတ်.
8:26 ထိုမင်းသည်မေတ္တာရပ်ခံသောပုတီး၏အလေးချိန်ရွှေတထောင်ခုနစ်ပိဿာခဲ့သည်, ဘေးဖယ်သည့်အဆင်တန်ဆာအနေဖြင့်, နှင့်လည်ဆွဲ, နှင့်ခရမ်းရောင်ဝတ်သောအဝတ်ကို, ရာမိဒျန်မင်းကြီးသုံးစွဲဖို့လေ့ခဲ့ကြသည်, နှင့်ဘေးဖယ်ကုလားအုပ်ပေါ်ရွှေသံကြိုးကနေ.
8:27 ဂိဒေါင်သည်ဤမှသင်တိုင်းကိုဖန်ဆင်း, မိမိမြို့အတွက်ထားရှိမည်, ဩဖရ. ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်အတူမတရားသောမေထုန်ကိုကျူးလွန်ခဲ့သော, ထိုသို့ဂိဒေါင်ရန်နှင့်အားလုံးမိမိအိမျကိုဖွိုဖကျြဖြစ်လာခဲ့သည်.
8:28 သို့သော်မိဒျန်အမျိုးသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ရှေ့မှာမ့်ခဲ့. သူတို့လည်ပင်းချီကြွဖို့ဆိုပိုရှည်နိုင်ခဲ့ကြတယ်လညျးမ. သို့သော်အနှစ်လေးဆယ်တိုင်တိုင်တပြည်လုံးအဘို့ငြိမ်ဝပ်စွာနေ, ဂိဒေါင်သည်သဘာပတိအဖြစ်စဉ်.
8:29 ဒါအဘိမလ, ယောရှ၏သား, သွား. မိမိအိမျ၌နထေိုငျ.
8:30 ထိုမင်းသည်ခုနစ်ဆယ်သား, မိမိပခုံးမှထွက် သွား. အဘယ်သူသည်. သူသည်အများသောမယားအဘို့.
8:31 သို့သော်သူ၏မယားငယ်, သူကရှေခင်မြို့မှာရှိတဲ့ခဲ့ဘယ်သူကို, သူ့ကိုအဘိမလက်အမည်ရှိသားယောက်ျားကိုဘွားမြင်လေ၏.
8:32 ဂိဒေါင်သည်, ယောရှ၏သား, တစ်ဦးကောင်းအသက်ကြီးသေဆုံးခဲ့, သူသည်မိမိအဘ၏သင်္ချိုင်းတွင်း၌သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံခဲ့သည်, ဩဖရမှာ, Ezri များ၏မိသားစုများ.
8:33 ဒါပေမယ့်ဂိဒေါင်ကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်, ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်မငြိမ်း, သူတို့သည်ဗာလဘုရားတို့နှင့်အတူမတရားသောမေထုန်ကိုကျူးလွန်ခဲ့သော. ထိုသူတို့က, ဗာလနှင့်ပဋိညာဉ်ဖွဲ့လုပ်ကြံ, သူကသူတို့ရဲ့ဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်.
8:34 ထိုသူတို့ကသခင်ဘုရားသည်မိမိတို့ဘုရားသခငျမအောက်မေ့ဘဲ, သူအပေါင်းတို့သည်နှစ်ဖက်ပေါ်မှာရှိသမျှသူတို့ရဲ့ရန်သူလက်မှသူတို့ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့.
8:35 သူတို့အဘိမလဂိဒေါင်၏အိမ်တော်ကိုကရုဏာကိုပြသဘဲ, သူသည်ဣသရေလအမျိုးအဘို့ပြုသမျှကောင်းမွန်သောနှင့်အညီ.
9:1 အခုတော့အဘိမလက်, ယရေုဗ်ဗာလ၏သား, ရှေခင်မြို့သို့သွားကြ၏, မိမိအမိခင်နဲ့ညီအစျကို, သူပွောဆိုကွလြှငျ, နှင့်သူ၏မိခင်အဘိုး၏အိမျတျောအပေါငျးတို့သဆွေမျိုးများမှ, ဟုဆို:
9:2 "ရှေခင်မြို့သားအပေါငျးတို့သညျအားဆင့်ဆိုရမည်: သင်တို့အဘို့ပိုကောင်းဘယ်ဟာဖြစ်ပါသည်: ကြောင်းခုနစ်ဆယ်ယောက်ျား, ယရေုဗ်ဗာလသားအပေါင်းတို့, သငျသညျကိုအုပ်စိုးသင့်တယ်, သို့မဟုတ်တယောက်သောသူအုပ်စိုးသင့်ကြောင်း? ငါသည်လည်းသင်တို့၏အရိုးနှင့်အသင်တို့အသားကိုဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းစဉ်းစားပါ။ "
9:3 နှင့်သူ၏မိခင်ကညီအစ်ကိုတွေရှေခင်မြို့သားအပေါငျးတို့သညျသူ့ကိုအကွောငျးပွော, ဤစကားအလုံးစုံတို့ကို, သူတို့အဘိမလက်သည်ပြီးနောက်မိမိတို့၏နှလုံးသားများနာမယူဘဲနေ, ဟုဆို, "သူကငါတို့ညီဖြစ်၏။ "
9:4 ထိုသူတို့ကသူ့ကိုဗာလ berith ၏နတ်ကွန်းကနေခုနစ်ဆယ်, ငွေဒင်္ဂါးပြား၏အလေးချိန်ကိုပေး၏. ဤအတူ, သူသညျမိမိအဘို့ဆင်းရဲသောနှင့်လည်ရသောယောက်ျားငှားရမ်းထား, သူတို့သညျနောကျသို့လို.
9:5 ထိုမင်းသည်ဩဖရမိမိအဘ၏အိမျသို့သှား, မိမိညီအစ်ကိုတို့ကိုအသေသတ်, ယရေုဗ်ဗာလ၏သား, ခုနစ်ဆယ်ယောက်ျား, တဦးတည်းသောကျောက်တို့အပေါ်မှာ. သာ Joatham အဲဒီမှာကနျြရ, ယရေုဗ်ဗာလ၏သားအငယ်ဆုံး, သူပုန်းခိုခဲ့.
9:6 ထိုအခါရှေခင်မြို့သားအပေါငျးတို့သညျစုဝေး, မိလ္လောမြို့၏မြို့နှင့်တကွလူအပေါင်းတို့မိသားစုများ, သူတို့ သွား. ဘုရင်အဖြစ်အဘိမလက်သည်အဖြစ်ခန့်အပ်, ရှေခင်မြို့နားမှာရပ်နေ၏သောသပိတ်ပင်အနားမှာ.
9:7 ဒီယောသံအစီရင်ခံခဲ့သည့်အခါ, သူကတောင်ပေါ်မှာဂေရဇိမ်ရဲ့ထိပ်မှာ သွား. ရပ်နေကြ၏. နှင့်သူ၏စကားသံကိုချီ, သူအော်ဟစ်ဟု: "ငါပြောတာနားထောင်ပါ, ရှေခင်မြို့၏လူတို့သညျ, ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသင့်ကိုနားထောင်စေခြင်းငှါ.
9:8 သစ်ပင်များကိုမိမိတို့ကိုယ်ကိုအုပ်စိုးသောရှင်ဘုရင်ဆီလိမ်းထံသို့ ဝင်.. ထိုသူတို့ကသံလှငျပငျအားဆို၏, '' ကျွန်တော်တို့ကိုအုပျစိုးတျော။ '
9:9 ထိုသို့တုန့်ပြန်, '' အဘယ်သို့ငါငါ့အဆူစွန့်လွှတ်နိုင်, အရာတပါးသောဘုရားတို့နှင့်လူတို့၏နှစ်ဦးစလုံး၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်, နှင့်ပင်တို့တွင်ရာထူးတိုးခံရဖို့ထွက်သွား?''
9:10 ထိုအခါသစ်ပင်များသင်္ဘောသဖန်းပင်အားမိန့်, '' လာကြခြင်းနှင့်အကြှနျုပျတို့ကိုအုတော်ဝင်အာဏာကိုလက်ခံပါ။ ''
9:11 ထိုသို့သူတို့ကိုတုံ့ပြန်, '' အဘယ်သို့ငါငါ့အချိုစွန့်လွှတ်နိုင်, နှင့်ငါ့ကအရမ်းချိုမြိန်အသီးအပွ, နှင့်အခြားအပင်တို့တွင်ရာထူးတိုးခံရဖို့ထွက်သွား?''
9:12 ထိုအခါသစ်ပင်များစပျစ်နွယ်ပင်ကလည်း,, '' လာကြခြင်းနှင့်အကြှနျုပျတို့ကိုအုပျစိုး။ '
9:13 ထိုသို့သူတို့ကိုတုံ့ပြန်, '' ငါကဘယ်လိုစပျစ်ရည်ကိုစွန့်ခွာနိုင်, ဘုရားသခင်နှင့်လူတို့သညျရှငျလနျးပေးသော, နှင့်အခြားအပင်တို့တွင်ရာထူးတိုးခံရ?''
9:14 နှင့်ရှိသမျှသောအပင်တို့သည်ဆူးပင်အားဆို၏, '' လာကြခြင်းနှင့်အကြှနျုပျတို့ကိုအုပျစိုး။ '
9:15 ထိုသို့သူတို့ကိုတုံ့ပြန်: '' သငျသညျရှငျဘုရငျအဖွစျငါ့ကိုခန့်ထားမည်ဟုအမှန်တကယ်လိုလျှင်, ငါ့အရိပ်အောက်မှာလာနှင့်ငြိမ်ဝပ်စွာနေ. သင်တို့မူကားဆန္ဒရှိနေကြသည်မဟုတ်ပါလျှင်, မီးဆူးပင်ကနေထွက်သွားကြကုန်အံ့, ထိုသို့လေဗနုန်အာရဇ်ပင်တို့ကိုကိုက်စားခြင်းပါစေ။ ' "
9:16 ဒါကြောင့်ယခု, သင်အုပ်စိုးသောရှင်ဘုရင်အဖြစ်အဘိမလက်သည်ခန့်အပ်အတွက်ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်လျှင်, သငျတို့သယရေုဗ်ဗာလနှင့်အတူကောင်းစွာပြုမူလျှင်, မိမိအိမျနှငျ့အတူ, သငျတို့သဆပ်ကြပါလျှင်, တစ်ပြန်တစ်လှည့်, သင့်ရဲ့ကိုယ်စားဘက်မှာစစ်တိုက်တော်မူသောသူ၏အကျိုးကျေးဇူးများ,
9:17 သူအန္တရာယ်များအားမိမိအသက်တာကိုပေးတျောမူ, သူကမိဒျန်လူတို့လက်မှသင်တို့ကိုကယ်နှုတ်အံ့သောငှါဒါ,
9:18 သငျသညျယခုပငျငါ့အဘ၏အိမျတျောကိုဆန့်ကျင်ထကြသော်လည်း, နှင့်သူ၏သားတို့သည်ကွပ်မျက်ကြပြီ, ခုနစ်ဆယ်ယောက်ျား, တဦးတည်းသောကျောက်တို့အပေါ်မှာ, အဘိမလက်ကိုခနျ့အပျခဲ့ကြ, မိမိအ၏ကြှနျမသား, ရှေခင်မြို့သားတို့အုပ်စိုးသောရှင်ဘုရင်အဖြစ်, သူသည်သင်၏ညီအစ်ကိုဖြစ်၏ကတည်းက,
9:19 ထို့ကြောင့်လျှင်သင်ဖြောင့်မတ်ဖြစ်ကြပြီးယရေုဗ်ဗာလနှင့်သူ၏အိမ်သူအိမ်သားတွေနဲ့အမှားမရှိဘဲပြုမူဆောင်ရွက်ခဲ့သည်, ထို့နောက်သငျသညျအဘိမလက်၌ဤနေ့၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသင့်တယ်, သူသည်သင်တို့ကိုအမှီ ပြု. ဝမ်းမြောက်သင့်တယ်.
9:20 သင်တို့မူကားမတရားပြုမူလျှင်, သူ့ထံမှထွက် သွား. နှင့်ရှေခင်မြို့သားတို့နှင့်မိလ္လောမြို့မြို့လောင်မီးစခွေငျးငှါ. ထိုအရှေခင်မြို့သားတို့သညျမှမိလ္လောမြို့မြို့ကနေထွက်သွားပစ်ခတ်စေခြင်းငှါ, အဘိမလက်ကိုလောင်ကြပြီ။ "
9:21 ထိုမင်းသည်ဤအရာတို့ကိုပြောကြားခဲ့သည်ပြီးမှ, သူပြေးဘီယာထံသို့သှား. ထိုအရပျ၌နထေိုငျ, အဘိမလက်သည်ကိုကွောကျရှံ့ထဲက, သူ့အစ်ကို.
9:23 ထိုအခါထာဝရအရှင်အဘိမလက်နှင့်ရှေခင်မြို့သားစပ်ကြားမှာအလွန်ကြမ်းတမ်းသောဝိညာဉျတျောထား, သူ့ကိုစက်ဆုပ်ရွံ့ရှာဖို့စတင်ခဲ့တဲ့သူ,
9:24 နှင့်ယရေုဗ်ဗာလ၏ခုနစ်ဆယ်သားတို့၏သတ်ဖြတ်မှု၏ရာဇဝတ်မှုများအတွက်အပြစ်တင်နေရာ, နှင့်သူတို့၏အသွေးမသွန်းလောင်းဘဲများအတွက်, အဘိမလက်သည်အပျေါ, သူတို့ရဲ့အစ်ကို, နှင့်ရှေခေမိခေါင်းဆောင်များ၏ကျန်အပေါ်သို့, အဘယ်သူသည်သူ့ကိုကူညီ.
9:25 ထိုသူတို့ကတောင်ထိပ်မှာသူ့ကိုဆန့်ကျင်ကာကင်းတပ်တပ်စွဲ. ထိုသူတို့သညျမိမိရောက်ရှိဘို့စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြစဉ်, သူတို့လုယက်မှုကျူးလွန်ခဲ့သော, ကွှသှားရှိသူများထံမှဥစ္စာကိုယူပြီး. ဤရွေ့ကား, အဘိမလက်ထံသို့အစီရင်ခံခဲ့သည်.
9:26 အခုဆိုရင်ဂါလ, ဧဗကျ၏သား, သူ့အစ်ကိုတွေနှငျ့အတူကွှ, နှင့်ရှေခင်မြို့သို့ကူး. ရှေခင်မြို့နှင့်မြို့သားတို့, မိမိအဆိုက်ရောက်ခြင်းဖြင့်အတန်းကိုလည်းမြှင်,
9:27 လယ်ကွင်းသို့ထွက် သွား., စပျစ်ဥယျာဉ်မှစွန့်ပစ်တင်သော, နှင့်စပျစ်သီးကိုနင်း. သီချင်းဆိုခြင်းနှင့်ကခုန်နေချိန်တွင်, သူတို့ဘုရား၏နတ်ကွန်းသို့ ဝင်.. ထိုအစားသောက်နှင့်သောက်သုံးနေစဉ်, သူတို့အဘိမလက်ကိုကျိန်ဆဲ.
9:28 ဂါလ, ဧဗကျ၏သား, အော်ဟစ်: "အဘိမလက်သည်ဘယ်သူလဲ, နှင့်ကိုရှေခင်ကားအဘယ်သို့, ငါတို့သည်သူ့ကိုအဝတျပွုသငျ့ကွောငျး? အဘိမလ၏သားမဟုတျပါဘူး, အဘယ်သူသည်ဇဗေုလခနျ့ထား, မိမိကျွန်, ဟာမျောလူတို့၏အုပ်စိုးအဖြစ်, ရှေခင်မြို့၏ဖခင်? အဘယ်ကြောင့်ငါတို့သည်သူ့ကိုအဝတ်ပြုရမည်?
9:29 ငါတစ်စုံတစ်ဦးကငါ့လက်ကိုအောက်တွင်ဤလူမျိုးကိုသတ်မှတ်ထားလိမ့်မယ်လို့ဆန္ဒရှိ, ငါ။ ဟာသူတို့ရဲ့အထဲကအဘိမလက်ကိုပယ်ရှင်းစေခြင်းငှါ, "ထိုသို့အဘိမလက်သည်မှကြားပြောလေ၏နိုင်အောင်, "တစ်ဦးကြည်းတပ်များအလုံးအရင်းစုဝေး, နှင့်ချဉ်းကပ်နည်း။ "
9:30 ဇဗေုလများအတွက်, မြို့အအုပျ, ဂါလ၏စကားကိုကြားလျှင်အပျေါ, ဧဗကျ၏သား, အလွန်အမျက် ထွက်. ဖြစ်လာခဲ့သည်.
9:31 ထိုမင်းသည်အဘိမလက်ထံသို့တိတ်တဆိတ်စေလွှတ်, ဟုဆို: "အကယ်, ဟား, ဧဗကျ၏သား, သူ့အစ်ကိုတွေနဲ့အတူရှေခင်မြို့မှာရောက်ရှိခဲ့ပါသည်, သူသည်လည်းသင်တို့ကိုဆန့်ကျင်မြို့မသတ်မှတ်ထားပါတယ်.
9:32 ဆိုတော့, ညဉ့်အခါထ, သင်နှင့်အတူနေသောလူတို့နှင့်အတူ, နှင့်မုသားလယ်၌ဝှက်ထား.
9:33 နံနက်ယံ၌ပထမဦးဆုံးအလင်းမှာ, နေရောင်ကိုမြင့်တက်နေသည်အဖြစ်, မြို့သူမြို့သားတို့အပေါ်မှာစွန်ပလွံ. ထိုမင်းသည်သင်တို့တဘက်၌ထွက်ဝင်ရသောအခါ, မိမိလူမျိုးနှင့်, သင်ပြုပေးနိုင်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာသူ့ကိုမှလုပ်ပါ။ "
9:34 ဒါအဘိမလက်သည်ထလျက်, မိမိဗိုလ်ခြေအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ညဉ့်အခါ, သူလေးသောနေရာများမှာရှေခင်မြို့ကိုအနီးကင်းတပ်ကိုသတ်မှတ်.
9:35 ဂါလ, ဧဗကျ၏သား, ထွက် သွား., သူသည်မြို့တံခါးဝ၌ရပ်နေလေ၏. ထိုအခါအဘိမလက်သည်ထလျက်, ကိုယျတျောနှငျ့အပေါငျးတို့တပ်မတော်, အဆိုပါကင်းတပ်များ၏နေရာတွေကနေ.
9:36 ဂါလသည်လူများမြင်ကြပြီးမှ, သူကဇဗေုလကလည်း,, "အကယ်, အလုံးအရင်း။ တောင်ကြီးတို့ထံမှဆင်းသက်သည်ကို "ထိုအခါသူကသူ့ကိုတုန့်ပြန်, "သင်တောင်မှောင်မိုက်အရိပ်မြင်နေကြသည်, သူတို့ယောက်ျားများ၏အကြီးအကဲများတက်ရောက်ကြသည်လျှင်အဖြစ်, ဒါသင်ဤအမှားအားဖြင့်လှည့်ဖြားနေပါသည်။ "
9:37 နောက်တဖန်အ, ဂါလကပြောပါတယ်, "အကယ်, လူမျိုးတမျိုးသည်ပြည်အလယ်ကနေဆငျးသနေသည်, နှင့်တဦးတည်းကုမ္ပဏီပိတ်ပင်ဆီသို့ဦးတည်ကြည့်ရှုသောလမ်းဖြင့်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ "
9:38 ထိုအဇဗေုလကလညျး: "ဘယ်မှာသင်၏နှုတ်သည်ယခု, သငျသညျဟုနှင့်အတူ, '' ကျွန်တော်သူ့ကိုအစေခံသင့်ကြောင်းအဘိမလက်သည်ဘယ်သူလဲ?'' ဤသူသည်သင်တို့ despising သောလူမဟုတ်ဟု Is? ထွက် သွား. သူ့ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တယ်။ "
9:39 ထို့ကြောင့်, ဟားထွက် သွား., ရှေခင်သည်လူများစောင့်ကြည့်တွေနဲ့, သူအဘိမလက်လူတို့ကိုစစ်တိုက်,
9:40 အဘယ်သူသည်သူ့ကိုလိုက်, ထွက်ပြေးလာသော, နှင့်မြို့တော်သို့သူ့ကိုကားမောင်း. လူအမြားတို့ကသူ့ဘက်မှာခုတ်လှဲခဲ့ကြသည်, ပင်မြို့တံခါးသို့.
9:41 အဘိမလကျ Arumah မှာစခန်းကိုဖန်ဆင်း. သို့သော်ဇဗေုလမြို့မှဂါလနှင့်သူ၏အပေါင်းအဘော်နှင်ထုတ်ခံရ, သူက၌မတည်ဖို့သူတို့ကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး.
9:42 ထို့ကြောင့်, အောက်ပါနေ့၌, လူများတို့သည်တောအရပ်သို့ထွက် သွား.. ဤရွေ့ကား, အဘိမလက်ထံသို့အစီရင်ခံထားပြီးမှ,
9:43 သူကမိမိတပ်ကိုယူ, သုံးယောက်ကုမ္ပဏီများမှသို့ခှဲဝေ, သူသည်လယ်ပြင်၌ကင်းထိုးနေရာချ. လူများတို့သည်ဤမြို့မှထွက်သွားသည်ကိုသိမြင်လျှင်, သူထသူတို့အပေါ်မှာတဟုန်တည်းပြေး,
9:44 သူ့ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ, မြို့သူမြို့သားတိုက်ခိုက်ရန်နှင့်ဝိုင်း. ဒါပေမယ့်နှစ်ခုအခြားကုမ္ပဏီများသည်ထိုလယ်၌အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားရနျသူမြားကိုလိုကျ.
9:45 အခုတော့အဘိမလက်သည်အားလုံးထိုနေ့ရက်သည်မြို့တော်ကိုစော်ကား. ထိုသိမ်းဆည်းရမိ, သူက၎င်း၏မြို့သားတို့အသတ်ခံရ, သူကဖျက်ဆီးခံရ, သူကဆားအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားသောကြောင့်ဤမျှလောက်.
9:46 ထိုအရှေခင်ရဲတိုက်တွင်နေထိုင်သူတို့အားဤအကြောင်းကိုကြားလျှင်, သူတို့ဘုရား၏ဗိမာန်ထဲသို့ဝင်, Berith, သူတို့ကသူ့ကိုနှင့်ပဋိညာဉ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ. ထိုသို့ဖြစ်သောကြောင့်ဤအမှုဖြစ်ခဲ့သည်, ထိုအရပ်ကို၎င်း၏အမည်ကိုယူခဲ့ကြောင်း. ထိုသို့ကိုအလွန်ခိုင်ခံ့သောခံခဲ့ရ.
9:47 အဘိမလက်သည်, ထို့အပြင်ရှေခင်ရဲတိုက်သားတို့သညျအတူတကွပူးပေါင်းခဲ့ကွောငျးကိုကွား,
9:48 ဇာလမုန် mount မှတက်ပြီ, အားလုံးမိမိလူမျိုးနှင့်. ထိုပုဆိန်ကိုယူပြီး, သူကအပင်တစ်ပင်၏ဌာနခှဲခုတ်လှဲ. နှင့်သူ၏ပခုံးပေါ်မှာတင်သော, ထိုသို့တင်ဆောင်လာသော, သူသည်မိမိအပေါင်းအဘော်တို့အားဆို၏, "သင်ငါ့ကိုအလုပျကွညျ့ပါကဘာလဲ, သငျသညျမွနျမွနျလုပျရမယျ။ "
9:49 ဆိုတော့, စိတ်အားထက်သန်စွာသစ်ပင်များကနေအကိုင်းခုတ်, သူတို့ခေါင်းဆောင်နောက်တော်သို့လိုက်. ထိုအခါခိုင်ခံ့သောအရပျပတျဝနျးကငျြ, သူတို့မီးပေါ်မှာတင်ထား. ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်, မီးခိုးများနှင့်မီးဖြင့်, တထောပုဂ္ဂိုလ်များကွယ်လွန်သွား, အတူတူယောက်ျားမိန်းမတို့, ရှေခင်ရဲတိုက်၏နေရာချထား.
9:50 ထိုအခါအဘိမလက်, ထိုအရပ်မှထွက် setting, Thebez မြို့မှာရောက်ရှိ, ပေးသောသူကိုဝိုင်းရံခြင်းနှင့်မိမိတပ်နှင့်အတူမြို့ကိုဝိုင်းထား.
9:51 အခုတော့ရှိခဲ့, မြို့အလယ်၌, မြင့်မားသောမျှော်စင်, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအတူတူထွက်ပြေးခဲ့ကြရသောမှ, တမြို့လုံး၌ရှိသမျှသောခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ. နှင့်, အလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တံခါးဝကိုတံဆိပ်ခတ်ပြီးလျှင်, သူတို့ကိုယ်တိုင်ခုခံကာကွယ်ဖို့မျှော်စင်၏ခေါင်မိုးပေါ်တွင်ရပ်နေခဲ့ကြ.
9:52 အဘိမလကျ, မျှော်စင်အနီး drawing, ရဲရငျ့စှာကိုစစ်တိုက်ကြ၏. ထိုအခါမြို့တံခါးဝ၌ချဉ်းကပ်, သူကမီးပေါ်မှာတင်ထားရန်ကွိုး.
9:53 ထိုအခါ, အမျိုးသမီးတစ်ဦး, အထက်ကနေကြိတ်ဆုံကျောက်တဲ့အပိုင်းအစနဲ့ပေါက်, အဘိမလက်သည်၏ဦးခေါငျးကိုလုပ်ကြံ, နှင့်သူ၏ဦးခေါင်းခွံကိုဖဲ့.
9:54 ထိုမင်းသည်လျင်မြန်စွာသူ၏လက်နက်ဆောင်လုလင်ကိုခေါ်, နှင့်ကလညျး, "သင်၏ဓားကိုဆွဲပါငါ့ကိုဒဏ်ခတ်, မဟုတ်ရင်ငါအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ဖြင့်အသေခဲ့ဟုဆိုသည်နိုင်ပါသည်။ "ထိုအ, သူကအမိန့်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်အဖြစ်လုပ်နေတာ, သူကသူ့ကိုသတ်ပစ်.
9:55 ထိုမင်းသည်သေသောအခါ, သူနှင့်အတူရှိနသောသူဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်သူတို့အား၎င်းတို့၏နေအိမ်များမှပြန်လာသော.
9:57 ရှေခေမိကိုလည်းသူတို့ပြုသမျှသောအရာကိုလက်စားချေပေးခဲ့, ယောသံ၏ကျိန်ခြင်း, ယရေုဗ်ဗာလ၏သား, သူတို့အပေါ်သို့ပြုတ်ကျ.
10:1 အဘိမလက်သည်ပြီးနောက်, ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဣသရေလအမျိုး၌ထလျက်, တောလ, ခခြဲ့၏သား, အဘိမလက်သည်များ၏အဖေဘက်ကဦးလေး, ဣသခါသည်လူကို, အဘယ်သူသည်ဧဖရိမ်တောင်ပေါ်ပေါ်ရှတှငျနထေိုငျ.
10:2 ထိုမင်းသည်အသက်နှစ်ဆယ်နှစ်တွင်သုံးနှစ်အဘို့ဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်စိုး, သော်သေလေ၏နဲ့ရှမြို့၌သင်္ဂြိုဟ်လေ၏.
10:3 သူ့ကိုယာဣအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက်, တစ်ဂိလဒ်, နှစ်ဆယ်နှစ်နှစ်ဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်စိုးသောသူသည်,
10:4 သုံးဆယ်ငယ်ရွယ်မြည်းပေါ်မှာထိုင်သုံးဆယ်သားတို့သရှိခြင်း, သုံးဆယ်မြို့များ၏ခေါင်းဆောင်များအဘယ်သူသည်ခဲ့ကြသည်, သူ၏နာမထံမှရသော Havvoth ယာဣရဟုခေါ်တွင်ခဲ့ကြသည်, ကြောင်း, ယာဣရ၏မြို့ရွာ, ပင်ပစ္စုပ္ပန်နေ့, ဂိလဒ်ပြည်ပြည်၌.
10:5 ထိုအယာဣသေဆုံး, သူ Kamon ဟုခေါ်ဝေါ်သောအရပ်၌ရှိသင်္ဂြိုဟ်လေ၏.
10:6 သို့သော်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ထာဝရဘုရား၏ရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြု၏, အဟောင်းမှအသစ်သို့အပြစ်များကိုလာရောက်ပူးပေါင်း, သူတို့ရုပ်တုတို့ကိုဝတ်ပြုကြ၏, ဗာလဘုရားတို့နှင့်အာရှတရုတ်မြို့, နှင့်ဆီးရီးယားနှင့်ဇိဒုန်မြို့၏ဘုရား, မောဘနှင့်အမ်မုနျအမြိုးသား၏, ဖိလိတ္တိလူ. ထိုသူတို့ကသခင်ဘုရားသည်စွန့်ပစ်, သူတို့ကသူ့ကိုမကိုးကွယ်ခဲ့ပါ.
10:7 ထိုအခါထာဝရအရှင်, သူတို့တဘက်၌အမျက်ထွက်သောဖြစ်လာ, ဖိလိတ္တိလူတို့လက်နှင့်အမ္မုန်၏သားသို့အပ်တော်မူ၏.
10:8 ထိုသူတို့ကတဆယ်ရှစ်နှစ်ပတ်လုံးအဘို့ကိုညှဉ်းဆဲခြင်းနှင့်ပြင်းထန်စွာဖိနှိပ်ခဲ့ကြ, အာမောရိပွညျ၌ယော်ဒန်မြစ်အသကျရှငျခဲ့ကြသူအပေါင်းတို့သည်, ဂိလဒ်ပြည်၌အရာဖြစ်ပါသည်,
10:9 အမ္မုန်၏သားကားဤမျှလောက်ကြီးစွာသောအတိုင်းအတာအထိ, ယော်ဒန်မြစ်ကူး, ယုဒအမျိုးနှင့်ဗင်္ယာမိန်အမျိုးနှင့်ဧဖရိမ်ဖို့ထားစွန့်ပစ်. အမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုးသည်အလွန်ဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်သောခဲ့သည်.
10:10 ထိုအခါထာဝရဘုရားအားအော်ဟစ်, သူတို့ကဆိုပါတယ်: "ကျနော်တို့ကသငျသညျပွစျမှားမိပါပွီ. ငါတို့သည်အကြှနျုပျတို့ဘုရားသခငျထာဝရဘုရားစွန့်ပစ်ကြပြီ, ကျနော်တို့ဗာလဘုရားတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီ။ "
10:11 ထိုအခါထာဝရအရှင်ကလညျး: "အဲဂုတ္တုလူမဟုတ်, နှင့်အာမောရိလူ, အမ္မုန်အမျိုးသားနှင့်သားတို့သ, ဖိလိတ္တိလူ,
10:12 နှင့်လည်းဇိဒုန်, အာမလက်, ခါနာန်, သငျသညျမညှဉ်းဆဲ, ဒါသငျသညျအကြှနျုပျကိုအားအော်ဟစ်, ငါသည်လည်းသူတို့၏လက်မှသင်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့?
10:13 သို့သော်လည်းသင်တို့သည်ငါ့ကိုစွန့်ပစ်ကြပြီ, သငျတို့သနိုင်ငံခြားဘုရားတွေကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြ. ဒီအတွက်ကြောင့်, ငါသည်သင်တို့ကိုမဆိုပိုပြီးလွတ်ဆက်လက်မည်မဟုတ်.
10:14 Go ကို, နှင့်သင်တို့ကိုရွေးကောက်သကြတော်မူသောဘုရားကိုမကိုးကွယ်ပဌနာ. သူတို့ကိုဒုက္ခဆင်းရဲကာလ၌သင်တို့ကိုလွတ်ပါစေ။ "
10:15 ဣသရလေအမြိုးသားတို့သခင်ဘုရားကလည်း,: "ကျနော်တို့ပြစ်မှားပါပြီ. သငျသညျသမျှလမ်းကိုသင်နှစ်သက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ဆပ်စေခြင်းငှါ. သို့သျောလညျးယခုကျွန်တော်တို့ကိုအခမဲ့ဖြစ်သည်။ "
10:16 ထိုအမှုအရာဟူမူကား, သူတို့ဒေသများအနေဖြင့်နိုင်ငံခြားတပါးသောဘုရားအပေါငျးတို့သသည်ရုပ်တုတို့နှင်ထုတ်, သူတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားတာဝန်ထမ်းဆောင်. ထိုမင်းသည်မိမိတို့၏ဒုက္ခအားဖြင့်ထိမိခဲ့သည်.
10:17 အမ္မုန်အမျိုးသား, ပြီးတော့သားတို့သ, အတူတူထွက်အော်ဟစ်, ဂိလဒ်ပြည်၌သူတို့တဲကိုဆောက်. ဣသရလေအမြိုးသားတို့ကသူတို့ကိုဆန့်ကျင်မှာစုဝေး, သူတို့မိဇပါမြို့မှာစခန်းကိုဖန်ဆင်း.
10:18 ဂိလဒ်၏ခေါင်းဆောင်များအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ပြောဆို၏, "အကြင်သူသည်ငါတို့တှငျအမ်မုနျအမြိုးသားတို့သဆန့်ကျင်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုမှစတင်ပထမဦးဆုံးဖွစျလိမျ့မညျ, သူသည်ဂိလဒ်၏လူများ၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရကြမည်။ "
11:1 ထိုအချိန်မှာ, တစ်ဂိလဒ်ရှိခဲ့, ယေဖသ, အလွန်အားကောင်းတဲ့လူနှင့်တစ်ဦးတိုက်လေယာဉ်, တစ်ဦးထားရှိမည်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏သား, သူသည်ဂိလဒ်၏မွေးဖွားခဲ့သည်.
11:2 အခုတော့ဂိလဒ်ပြည်တစ်ဦးဇနီးခဲ့, အဘယ်သူကိုကနေသူ၏သားတို့အလက်ခံရရှိ. ထိုသူတို့က, တက်ကြီးထွားလာပြီးနောက်, ယေဖသကိုနှင်ထုတ်, ဟုဆို, "သင်ငါတို့အဘ၏အိမျ၌အမွေမပေးနိုငျ, သင်သည်အခြားအမိ၏မွေးဖွားခဲ့လို့ပဲ။ "
11:3 ဆိုတော့, ထွက်ပြေးလာသောသူတို့ကိုရှောင်ရှား, သူကတောဘပြည်၌နေထိုင်ခဲ့. နှင့်ဆင်းရဲသောနှင့်ဓားပြဖြစ်နှင့်သောသူတို့သညျကိုယျတျောနှငျ့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး, သူတို့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်သူ့ကိုနောက်တော်သို့လိုက်.
11:4 ထိုနေ့ရက်ကာလ၌, အမ္မုန်၏သားဣသရကိုစစ်တိုက်.
11:5 ထိုအစေ့စေ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခံရ, သူတို့အကူအညီယေဖသအဘို့အရယူအံ့သောငှါဒါဂိလဒ်ပြည်သားအသက်ကြီးသူတို့သည်ခရီးထွက်, တောဘပြည်မှ.
11:6 ထိုသူတို့သညျအထံတျောကပြောပါတယ်, "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင် လာ. ဖြစ်, အမ်မုနျအမြိုးသားတို့သဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တယ်။ "
11:7 ဒါပေမယ့်သူကလညျး: "သင်ငါ့ကိုမုန်းသူမဟုတ်, သူငါ့အဘ၏အိမ်တော်ထဲကငါ့ကိုပစ်? သို့သော်လည်းယခုသင်တို့သည်ငါ့ထံသို့လာ, လိုအပ်မှုအနိုင်အထက်?"
11:8 ဂိလဒ်၏ခေါင်းဆောင်များယေဖသဟုမိန့်, "ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုသင်တို့အားယခုချဉ်းကပ်ကြပါပြီဒီလိုအပ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, သငျသညျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူထွက် set စေခြင်းငှါဒါ, အမ်မုနျအမြိုးသားတို့သဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်, ဂိလဒ်တှငျနထေိုငျသောသူအပေါင်းတို့ကိုကျော်တပ်မှူးဖြစ်လိမ့်မည်။ "
11:9 ယေဖသသည်လည်းထိုသူတို့အားပြောဆို: "ငါသည်အမ္မုန်၏သားဆန့်ကျင်သင်တို့အဘို့စစ်တိုက်ခြင်းစခွေငျးငှါဒါကြောင့်သင်သည်ငါ့ဆီသို့လာကြလျှင်, နှင့်သခင်သည်ငါ့လက်သို့သူတို့ကိုငါအပ်မည်ဆိုပါက, ငါသညျအမှနျတကယျသင့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လိမ့်မည်?"
11:10 သူတို့ကသူ့ကိုပြန်ပြော, "ဤအမှုအရာကြားသောသူထာဝရဘုရားသည်အာမခံနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဂတိထားသောအဘယ်သို့ပြုရမည်သောသကျသခေံကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်၏။ "
11:11 ဒါယေဖသသည်ဂိလဒ်၏ခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူလိုက်, နှင့်လူအပေါင်းတို့သည်သူ့ကိုသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်လုပ်. ယေဖသကသူ၏စကားအလုံးစုံတို့ကိုပြောသော, သခင်ဘုရား၏မျက်မှောက်၌, မိဇပါမြို့မှာ.
11:12 ထိုမင်းသည်အမ္မုန်၏သားသည်ရှင်ဘုရင်ထံသို့သံတမန်ကိုစေလွှတ်, အဘယ်သူသည်ကိုယ်စားဆိုပါတယ်, "ဘာသငျနှငျ့ကြှနျုပျကိုအကြားရှိ, သငျသညျအကြှနျုပျကိုဆန့်ကျင်ချဉ်းကပ်မယ်လို့, သငျသညျငါ့မြေမှစွန့်ပစ် တင်. အံ့သောငှါဒါ?"
11:13 ထိုမင်းသည်ထိုသူတို့အားတုံ့ပြန်, ဣသရေလအမျိုးသည်ငါ့ပြည်ကိုယူသောကြောင့်, "ဒါဟာဖြစ်ပါသည်, သူကအဲဂုတ္တုပြည်တက်ပြီသည့်အခါ, အာနုန်၏အစိတ်အပိုင်းများကနေ, အဖြစ်ဝေး Jabbok နှင့်ယော်ဒန်မြစ်အဖြစ်. သို့ဖြစ်., ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ငါ့ကိုဤ restore ။ "
11:14 ယေဖသကနောက်တဖန်သူတို့ကိုပြန်တမ်း, သူအမ္မုန်ရှင်ဘုရင်ထံသို့ပြောသူတို့ကိုအမိန့်ထုတ်:
11:15 "ယေဖသသည်ဤပြောပါတယ်: ဣသရေလအမျိုးသည်မောဘပြည်ကိုယူခဲ့ပါဘူး, အမ္မုန်၏သားမဟုတ်, ထိုပြည်၌.
11:16 ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲဂုတ္တုပြည်အတူတကွတက်ပြီသည့်အခါ, သူအဖြစ်ဝေးဧဒုံပင်လယ်အဖြစ်သဲကန္တာရမှတဆင့်လမ်းလျှောက်, သူကာဒေရှသို့သွားလေ၏.
11:17 ထိုမင်းသည်ဧဒုံရှင်ဘုရင်၏ထံသို့သံတမန်ကိုစေလွှတ်, ဟုဆို, '' သင်တို့ပြည်ကိုရှောက်သွားငါ့ကိုခွင့်ပြုသည်။ '' ဒါပေမယ့်သူကသူ့အသနားခံစာဖို့သဘောတူရန်ဆန္ဒရှိမဟုတ်ခဲ့. အလားတူပဲ, သူမောဘရှင်ဘုရင်ထံသို့စေလွှတ်, ဒါ့အပြင်သူ့ကိုကျမ်းပိုဒ်ကိုဆက်ကပ်ရန်ငြင်းဆန်သောသူ. ဒီတော့သူကကာဒေရှအတွက်နှောင့်နှေး,
11:18 သူဧဒုံပြည်၌နှင့်မောဘပြည်၏ဘေးထွက်တဝိုက်လှည့်ပတ်. ထိုမင်းသည်မောဘပြည်၏အရှေ့ပိုင်းဒေသဆန့်ကျင်ဘက်ရောက်ရှိလာခဲ့. သူသည်ထိုအအာနုန်ဖြတ်ပြီးစခန်းကိုဖန်ဆင်း. ဒါပေမယ့်သူမောဘ၏နယ်နိမိတ်ထဲဝငျဖို့ဆန္ဒရှိမဟုတ်ခဲ့. (ဒါပေါ့, အာနုန်မောဘပြည်၏နယ်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။)
11:19 ဒါသည်ဣသရေလအမျိုးရှိဟုန်မင်းထံသို့သံတမန်ကိုစေလွှတ်, အာမောရိရှင်ဘုရင်၏အ, ဟေရှဘုန်မြို့မှာနေထိုင်နေသူ. ထိုသူတို့သညျအထံတျောကပြောပါတယ်, "အဖြစ်ဝေးမြစ်ကဲ့သို့သင့်နေရာပြည်၌တဆင့်ဖြတ်ကူးဖို့ကျွန်မကိုခွင့်ပြုသည်။ "
11:20 ဒါပေမယ့်သူ, လွန်း, ဣသရေလအမျိုး၏စကားများ despising, မိမိအနယ်စပ်မှတစ်ဆင့်ကူးဖို့သူ့ကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး. အဲဒီအစား, တစ်ခုမရေမတွက်နိုင်သောလူအစုအဝေးစုဆောင်း, သူယာဟတ်မြို့မှာသူ့ကိုဆန့်ကျင်ထွက် သွား., သူပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံ.
11:21 သို့သော်လည်းသခင်ဘုရားသည်သူ့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏, မိမိအတစ်ခုလုံးကိုစစ်တပ်နှင့်အတူ, ဣသရေလအမျိုး၏လက်သို့. ထိုမင်းသည်သူ့ကိုဒဏ်ခတ်, သူသည်အာမောရိပြည်တရှောက်လုံးသိမ်းယူ, ကြောင်းဒေသ၏နေသောသူ,
11:22 အားလုံး၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူ, အာနုန်ထံမှအဖြစ်ဝေး Jabbok အဖြစ်, နှင့်တောထဲကပင်ယော်ဒန်မြစ်မှ.
11:23 ထို့ကြောင့်, ဒါကြောင့်သခင်ဘုရားခဲ့, ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်, အာမောရိဖျက်ဆီးသူကို, မိမိလူတို့ကိုအားဖွငျ့ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုသူတို့တဘက်၌တိုက်ခိုက်နေ. ယခုမှာသင်သည်သူ၏ပြည်ကိုဝင်စားရန်ဆန္ဒရှိ?
11:24 ညာဘက်အားဖြင့်သင်တို့ကိုမှအကြွေးသငျ၏ဘုရားခေမုရှပိုင်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုဖြစ်ကြသည်မဟုတ်? ဆိုတော့, ကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျအောင်ပွဲရယူထားပြီးသခင်ဘုရားကိုအပိုင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျရောက်သောအရာကို.
11:25 သို့မဟုတ်သင်များမှာ, ဖြစ်ကောင်း, ဗာလက်မင်းသည်ထက်ပိုကောင်းတဲ့, ဇိဖျေါ၏သား, မောဘရှင်ဘုရင်? ဒါမှမဟုတ်သင်ကသူ့အငြင်းအခုံဣသရေလအမျိုးတဘက်၌အဘယျရှင်းပြနိုင်ကြသည်, အဘယ်ကြောင့်သူ့ကိုဆန့်ကျင်တိုက်သော်လည်း?
11:26 ထိုမင်းသည်ဟေရှဘုန်မြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိသည်သော်လည်း, နှင့်၎င်း၏ကျေးရွာပေါင်း, နှင့်အာရော်အတွက်, နှင့်၎င်း၏ကျေးရွာပေါင်း, နှင့်ယော်ဒန်မြစ်အနီးရှိမြို့ရှိသမျှထဲမှာအနှစ်သုံးရာများအတွက်, အဘယ်ကြောင့်သင်ရှိသည်, ထိုကဲ့သို့သောကာလကြာများအတွက်, ဤပြောဆိုချက်ကိုအကြောင်းကိုရှေ့ဆက်ဘာမျှမထား?
11:27 ထို့ကြောင့်, ငါသည်သင်တို့ကိုပြစ်မှားမပေးပါ၏, သင်မူကားငါ့တဘက်၌မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်နေကြ, ငါ့ကိုဆန့်ကျင်ကာမတရားတဲ့စစ်ကြေညာခြင်းဖြင့်. သခင်ဘုရားသည်ယနေ့ဤတရားသူကြီးနှင့် Arbiter ဖြစ်နိုင်ပါစေ, ဣသရေလအမျိုးနှင့်အမ္မုန်၏သားများအကြား။ "
11:28 ဒါပေမယ့်အမ်မုနျအမြိုးသား၏ရှင်ဘုရင်က, သူသံတမန်များကပြန်တမ်းတစ်ခုကိုယေဖသ၏စကားမှသဘောတူရန်ဆန္ဒရှိမဟုတ်ခဲ့.
11:29 ထို့ကြောင့်, သခင်ဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေဖသအပေါ်မှာသက်ရောက်ငြိမ်ဝပ်စွာနေ, ဂိလဒ်န်းကျင်ကိုဝိုငျး, မနာရှေအမျိုး, လည်းဂိလဒ်မိဇပါမြို့, အမ်မုနျအမြိုးသားတို့သမှထိုအရပ်မှဖြတ်ကူး,
11:30 ထာဝရဘုရား၏လက်တော်အားသစ္စာလုပ်, ဟုဆို, "သင်သည်ငါ၏လက်သို့အမ်မုနျအမြိုးသားတို့သအပ်မည်ဆိုပါက,
11:31 အကြင်သူသည်ငါ့ကိုတွေ့ဆုံရန်ငါ့အိမ်တံခါးကနေထွက်သွားဖို့ပထမဦးဆုံးဖွစျလိမျ့မညျ, ငါအမ်မုနျအမြိုးသားတို့သထံမှငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပြန်လာသည့်အခါ, အတူတူငါထာဝရဘုရားအားမီးရှို့အဖြစ်ပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ "
11:32 ယေဖသကအမ်မုနျအမြိုးသားတို့သမှကူး, သူကသူတို့ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်စေခြင်းငှါဒါ. ထိုအခါထာဝရဘုရားသည်မိမိလက်သို့အပ်တော်မူ၏.
11:33 ထိုမင်းသည်အာရော်ကနေသူတို့ကိုဒဏ်ခတ်, အဖြစ်ဝေး Minnith ဖို့ဝင်ပေါက်အဖြစ်, နှစ်ဆယ်မြို့ကြီးများ, နှင့်အမျှဝေးအာဗေလအဖြစ်, အရာစပျစ်ဥယျာဉ်များနှင့်ဖုံးလွှမ်းနေသည်, တစ်ဦးသည်အလွန်ကြီးစွာသောလုပ်ကြံခြင်းအတွက်. အမ္မုန်၏သားဣသရလေအမြိုးသားတို့သဖြင့်နှိမ့်ချခဲ့သည်.
11:34 သို့သော်ယေဖသသည်မိဇပါမှပြန်လာသောအခါ,, မိမိအိမ်သို့, မိမိအသာသမီးကခုန်လျက်နှင့်သူ့ကိုတွေ့ဆုံခဲ့. သူကမျှမကအခြားကလေးတွေရှိခဲ့ပါတယ်များအတွက်.
11:35 နှင့်သူမ၏မြင်နေအပေါ်သို့, မိမိအဝတ်ကိုဆုတ်, နှင့်ဟုသူကဆိုသည်: "Alas, ကျွန်တော့်သမီး! သငျသညျအကြှနျုပျကိုလိမ်လည်လှည့်ကြ, နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်လိမ်လည်လှည့်ပြီ. ငါသည်ထာဝရဘုရားမှငါ့နှုတ်ကိုဖွင့်လှစ်ဘို့, ငါဘာမှလုပ်ပေးနိုင်တယ်။ "
11:36 ထိုမိနျးမကလညျး, "ငါ့အဖေ, သငျသညျထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌သင်တို့ပစပ်ကိုဖွင့်လျှင်, သငျသညျဂတိထားသောသမျှငါ့ကိုပြု, အောင်ပွဲသည်သင်ခွင့်ပြုထားပြီးကတည်းက, အဖြစ်ကောင်းစွာသင်တို့၏ရန်သူများကိုဆန့်ကျင်မျက်တော်ပြေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ "
11:37 ထိုမိန်းမသည်သူမ၏ဖခင်အားဆို၏: "ငါ့ကိုရန်ဒီတစ်ခုအရာပေးသနား, ငါကိုတောင်းဆို. ငါ့ကိုခွင့်, ငါနှစ်လများအတွက်တောင်စောင်းလှည့်လည်စေခြင်းငှါ, နှင့်ငါသည်ငါ၏အပေါင်းအဘော်နဲ့ငါ့အပျိုစင်ညညျးတှားလိမ့်မည်။ "
11:38 ထိုမင်းသည်သူမ၏ဖြေကြား, "။ Go" ထိုအခါသူကနှစ်လသူမ၏ဖြန့်ချိ. ထိုမိန်းမသည်သူမ၏မိတ်ဆွေများနှင့်အပေါင်းအဖော်နှင့်အတူထွက်သွားကြပြီးမှ, သူမသည်တောင်စောင်းများတွင်သူမ၏အပျိုစင်ဘကျော်ငိုကွှေးလကျြ.
11:39 ထိုအခါနှစ်လသက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါ, သူမကသူမ၏ဖခင်မှပြန်လာသော, သူကတိပြုခဲ့သောနည်းတူသူမ၏ပြု, သူမအဘယ်သူမျှမသိတယ်သော်လည်း. ဒီကနေ, ထုံးစံဣသရေလအမျိုး၌ကြီးပြင်း, နှင့်အလေ့အကျင့်စောင့်မထားသည်,
11:40 ထိုကဲ့သို့သော, နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း 'passes ပြီးနောက်, ဣသရေလအမျိုး၏သမီးတစ်ဦးအဖြစ်ကျင်းပ, သူတို့ယေဖသ၏သမီးမြည်တမ်း, ဂိလဒ်, လေးနေ့ရက်ကာလအဘို့.
12:1 ထိုအခါ, တစ်ပုနျကနျသည်ဧဖရိမ်သည်ထ. ထိုအခါ, မြောက်ဘက်ဆီသို့ကွှသှားစဉ်, သူတို့ယေဖသဟုမိန့်: "သင်အမ်မုနျအမြိုးသားတို့သဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်သွားကြသောအခါ, ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ရန်သင့်အားမလိုလားခဲ့ပေအဘယ်ကြောင့်, ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူလိုက်အံ့သောငှါဒါ? ထို့ကြောင့်, ငါတို့သည်သင်တို့၏အိမ်ကိုမီးမရှို့ပါလိမ့်မယ်။ "
12:2 ထိုမင်းသည်သူတို့ကိုဖြေကြား: "ငါသည်ငါ၏လူအမ်မုနျအမြိုးသားတို့သဆန့်ကျင်တဲ့အကြီးအပဋိပက္ခဖြစ်ရှိကြ၏. ထိုအခါငါသင်တို့ကိုခေါ်, သငျသညျကြှနျုပျအားအကူအညီများကိုဆက်ကပ်အံ့သောငှါဒါ. တဖန်သင်တို့အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိကြဘူး.
12:3 ဤရွေ့ကား, ပိုင်းခြား, ငါသည်ငါ့ကိုယ်လက်အတွက်ငါ့အသက်ကိုထား, ငါအမ်မုနျအမြိုးသားတို့သမှကူး, နှင့်သခင်သည်ငါ့လက်သို့အပ်တော်မူ၏. ငါ၏အပြစ်ရှိကြောင်းအဘယ်အရာဖြစ်ကြောင်းကို, သငျသညျအကြှနျုပျကိုစစ်တိုက်ခြင်းငှါထမယ်လို့?"
12:4 ဆိုတော့, ဂိလဒ်ပြည်သားအပေါငျးတို့သညျမိမိကိုယျကိုမှတောင်းဆို, သူသည်ဧဖရိမ်လူတို့ကိုစစ်တိုက်. ဂိလဒ်အမျိုးသားတို့သည်ဧဖရိမ်ခရိုင်ဒဏ်ခတ်, ဟုသူကပြောသည်မိသောကြောင့်, "ဂိလဒ်ပြည်သည်ဧဖရိမ်ကနေရမ်းပြေးဖြစ်ပါသည်, သူသည်ဧဖရိမ်နှင့်မနာရှေ၏အလယ်၌နေထိုင်ပါတယ်။ "
12:5 ထိုအခါဂိလဒ်လူတို့သည်ယော်ဒန်မြစ်ကူးရာသိမ်းပိုက်, ဧဖရိမ်အမျိုးပြန်လာခဲ့သည့်တလျှောက်. ဧဖရိမ်၏နံပါတ်ကနေမည်သူမဆိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမှ, ထွက်ပြေးလာသော, ဟုခဲ့သည်, "ငါသည်သင်တို့ကိုရှောက်သွားငါ့ကိုခွင့်သည်ဟုတောင်းပန်,"ဂိလဒ်လူတို့သည်အထံတော်ပြောချင်, "သင်ဧဖရိမ်အမျိုးသားဖြစ်နိုင်?"ထိုအခါသူကပြောသည်လျှင်, "ငါမဟုတ်ဘူး,"
12:6 သူတို့ကသူ့ကိုမေးပါလိမ့်မယ်, ထို့နောက် '' Shibboleth ပြောပါ,စပါးနားကို '' အဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသောသော '' ။ '' ဒါပေမယ့်သူကပြန်ပြော '' Sibboleth,'' အတူတူအက္ခရာ၌စပါးတစ်ခုနားကိုများအတွက်စကားလုံးဖော်ပြနိုင်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်. ထိုခဏသူ့ကို apprehending, သူတို့ကသူ့လည်ချောင်းဖြတ်မည်ဟု, ယော်ဒန်မြစ်၏တူညီသောကူးအမှတ်မှာ. ဧဖရိမ်၏ထိုကာလအတွက်, လေးသောင်းနှစ်ထောင်ကျဆင်း.
12:7 ဒါယေဖသ, ဂိလဒ်, ခြောက်နှစ်ဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်စိုး. သော်သေလေ၏, သူဂိလဒ်ပြည်၌မိမိအမြို့မြို့၌သင်္ဂြိုဟ်လေ၏.
12:8 သူ့နော, ဗက်လင်မြို့၏အဗဇဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်စိုး.
12:9 သူကသုံးဆယ်သား, သမီး၏တူညီသောအရေအတွက်က, သူကခင်ပွန်းအားပေးခံရဖို့လွှတ်လိုက်တော်မူသော. ထိုမင်းသည်အတူတူပင်အရေအတွက်သူ၏သားတို့အဘို့မယားများကိုလက်ခံခဲ့သည်, မိမိအိမျသို့သူတို့ကိုငါဆောင်ခဲ့. ထိုမင်းသည်ခုနစ်နှစ်အတွင်းဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်စိုး.
12:10 သော်သေလေ၏, သူဗက်လင်မြို့၌သင်္ဂြိုဟ်လေ၏.
12:11 သူ့ကိုဧအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက်, တစ်ဦးဇာဗုလုန်. ထိုမင်းသည်ဆယ်နှစ်ဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်စိုး.
12:12 သော်သေလေ၏, သူဇာဗုလုန်ခရိုင်မြို့၌သင်္ဂြိုဟ်လေ၏.
12:13 သူ့နော, အာဗဒုန်, Hillel ၏သား, တစ်ဦး Pirathonite, တရားသဖြင့်စီရင်ဣသရ.
12:14 ထိုမင်းသည်လေးဆယ်သား, နှင့်သူတို့ထံမှသုံးဆယ်မြေး, အားလုံးခုနစ်ဆယ်ငယ်ရွယ်မြည်းအပေါ်သို့စီးနင်း. ထိုမင်းသည်ရှစ်နှစ်ဘို့ဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်စိုး.
12:15 သော်သေလေ၏, သူရသုန်မြို့၌သင်္ဂြိုဟ်လေ၏, ဧဖရိမ်၏ပွညျ၌, အာမလက်တောင်ပေါ်မှာ.
13:1 တဖန်တုံ, ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ထာဝရဘုရား၏ရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ကိုပြု၏. ထိုမင်းသည်အနှစ်လေးဆယ်ပတ်လုံးဖိလိတ္တိလူတို့လက်သို့အပ်တော်မူ၏.
13:2 အခုတော့ဇောရာကနေလူတယောကျရှိ၏, ဒန်၏စတော့ရှယ်ယာများ၏, မာနျောအမညျ, တစ်မြုံသောမယားသည်ရှိခြင်း.
13:3 ထိုအခါထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်သူမ၏အားထင်ရှား, နှင့်ဟုသူကဆိုသည်: "ခင်ဗျားကမြုံသောနှင့်ကလေးများမပါဘဲဖြစ်ကြောင်း. သို့သော်သင်တစ်ဦး၏သားကိုပဋိသန္ဓေ ယူ. ဘွားလိမ့်မည်နှင့်.
13:4 ထို့ကြောင့်, သငျသညျကိုစပျစ်ရည်သို့မဟုတ်သေရည်သေရက်ကိုမသောက်ကြဘူးကြောင်းဂရုစိုက်. သငျသညျမစင်ကြယ်သောအစာကိုစားရကြလိမ့်မည်မတော်မတစုံတခုမျှ.
13:5 သင်တစ်ဦး၏သားကိုပဋိသန္ဓေ ယူ. ဘွားလိမ့်မည်ဘို့နဲ့, အဘယ်သူ၏ဦးခေါင်းကိုမျှမထိရကြလိမ့်မည်သင်တုန်း. သူသညျဘုရားသခငျ၏နာဇရိလူဖြစ်ရကြလိမ့်မည်များအတွက်, မိမိအနို့စို့အရွယ်ကနေမယ်တော်အမိဝမ်းထဲကနေ. ထိုမင်းသည်ဖိလိတ္တိလူတို့လက်မှဣသရေလအမျိုးကိုပြန်လွှတ်ဖို့ကိုစတင်ရလိမ့်မည်။ "
13:6 ထိုမိန်းမသည်မိမိခင်ပွန်းမသွားပြီပြီးမှ, သူမကသူ့ကိုရန်ကဆိုသည်: "ဘုရားသခင်၏တစ်ဦးကလူကိုငါ့ဆီသို့ရောက် လာ., တစ်အိန်ဂျယ်၏မျက်နှာကိုရှိခြင်း, အလွန်အားကြောက်မက်ဘွယ်သော. ငါသည်ထိုသူကိုမေးမြန်းပြီးပြီးမှ, ရသောသူမူကားခဲ့သည်, သူကအထဲကရှိရာ, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်နာမည်ကခေါ်တော်မူခဲ့သည်, သူသည်ငါ့ကိုပြောပြရန်ဆန္ဒရှိမဟုတ်ခဲ့.
13:7 ဒါပေမယ့်သူကတုန့်ပြန်: '' ကြှနျုပျသညျ, သင်တစ်ဦး၏သားကိုပဋိသန္ဓေ ယူ. ဘွားလိမ့်မည်နှင့်. သငျသညျကိုစပျစ်ရည်သို့မဟုတ်သေရည်သေရက်ကိုမသောက်ကြဘူးကြောင်းဂရုစိုက်. တဖန်သင်တို့မစင်ကြယ်သောအရာတစုံတခုလောင်လိမ့်မည်မဟုတ်. ကောင်လေးကအဘို့ဘုရားသခငျ၏နာဇရိလူသည်မိမိနို့စို့အရွယ်ကနေရကြလိမ့်မည်, မိမိအမိဝမ်းထဲကပင်, ပင်မိမိ၏သေခြင်း၏နေ့အထိပါပဲ။ "'
13:8 ဒါမာနျောထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဆုတောင်းပဌနာ, နှင့်ဟုသူကဆိုသည်, "ငါသည်သင်တို့သခင်ဘုရားတောင်းပန်ပါ၏, ဘုရားသခငျ၏လူကြောင်း, အဘယ်သူကိုသင်တို့ကိုစေလွှတ်, နောက်တဖန်မဝင်စေခြင်းငှါ, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကျနော်တို့မွေးဖွားခံရဖို့သူကောင်လေးတစ်ယောက်အကြောင်းကိုလုပ်ဖို့်၏ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးလိမ့်မည်။ "
13:9 ထိုအခါထာဝရအရှင်မာနျော၏ပဌနာလိုက်နာ, နှင့်သခင်၏အိန်ဂျယ်သူ၏ဇနီးမှတဖန်ပေါ်ထွန်းသော, လယ်၌ထိုင်. သို့သော်သူမ၏ခင်ပွန်းမာနျောသူမ၏နှင့်အတူမဟုတ်ခဲ့. ထိုမိန်းမသည်ကောင်းကင်တမန်မြင်ကြပြီးမှ,
13:10 သူမကသူမ၏ခင်ပွန်းမှအလျင်အမြန်ပြေး. ထိုမိန်းမသည်အထံတော်သို့အစီရင်ခံခဲ့သည်, ဟုဆို, "အကယ်, အဆိုပါလူသည်ငါ၌ထငျရှား, အဘယ်သူကိုငါမတိုင်မီမြင်ဘူး။ "
13:11 ထိုသူသည်လည်းထနှင့်သူ၏ဇနီးနောက်တော်သို့လိုက်. ထိုအခါလူသွား, သူ့ကိုအားဆို၏, "သင်သည်ငါ၏ဇနီးတို့အားမိန့်သောသူရှိပါသလား?"ထိုအခါသူကတုန့်ပြန်, "ကျွန်မဖြစ်၏။ "
13:12 ထိုအမာနျောကလညျး: "သင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုမပြည့်စုံရလိမ့်မည်သည့်အခါ. သငျသညျကောင်လေးကဘာလုပ်ရမှန်းချင်ကြဘူး? သို့မဟုတ်သူသညျမိမိကိုစောင့်ရမည်သောအရာကိုအနေဖြင့်?"
13:13 ထိုအခါထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်မာနျောအားဆို၏: "ငါသည်သင်တို့၏ဇနီးပြောပြီရသောအကြောင်းကိုအလုံးစုံအရာတို့ကိုရည်မှတ်, သူသည်ကိုယ်ကိုရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်.
13:14 နှင့်သူမ၏စပျစ်နွယ်ပင်ကနေဘာမျှမစားပါစေ. သူမသည်စပျစ်ရည်ကိုသို့မဟုတ်သေရည်သေရက်ကိုမသောက်ရစေခြင်းငှါ. သူမသည်မစင်ကြယ်သောအဘယ်အရာကိုမျှမလောင်ပါစေခြင်းငှါ. နှင့်သူမ၏စောငျ့ရှောကျနဲ့ကျွန်မသူမ၏ရန်ညွှန်ကြားထားအရာကိုစောင့်ရှောက်ပါစေ။ "
13:15 ထိုအမာနျောထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်ကလည်း,, "ကျွန်မရဲ့အသနားခံစာရန်သဘောတူရန်သင့်အားတောင်းပန်, ငါတို့ကိုဆိတ်နေတဲ့ဆိတ်သငယ်ကိုပွငျဆငျစေလော့။ "
13:16 ထိုအခါအိန်ဂျယ်ကလညျး: "သင်ငါ့ကိုအတင်းအကျပ်ရင်တောင်, ငါသည်သင်တို့၏မုန့်ကိုစားမည်မဟုတ်. သင်တို့မူကားတစ်ဦးမီးရှို့ပူဇော်ဖို့ဆန္ဒရှိလျှင်, ။ ထာဝရဘုရားအားပူဇော် "ထိုအခါမာနျောထာဝရဘုရား၏လက်တော်တစ်ခုအိန်ဂျယ်ခဲ့ကြောင်းမသိခဲ့ပါ.
13:17 သူသညျအထံတော်ကပြောပါတယ်, "မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ, သောကြောင့်, သင့်ရဲ့စကားလုံးမပြည့်စုံလျှင်, အကြှနျုပျတို့သညျကိုဂုဏ်ပြုတဲ့စေခြင်းငှါ?"
13:18 ထိုမင်းသည်ကလညျး, "အဘယ်ကြောင့်သင်တို့သည်ငါ၏နာမကိုအမှီမမေးကြဘူး, အံ့ဘွယ်သောအရာဖြစ်ပါသည်?"
13:19 ဆိုတော့, မာနျောနှငျ့ဆိတျဆိတျကိုယူ, နှင့်ရေစက်သွန်း, သူတစ်ဦးသည်ကျောက်ပေါ်မှာသူတို့ကိုနေရာချ, ထာဝရဘုရားအားပူဇော်သက္ကာအဖြစ်, အဘယ်သူသည်အံ့ဘွယ်သောအမှုစုံ. ထိုအခါသူနဲ့သူ့ဇနီး watched.
13:20 နှင့်ယဇ်ပလ္လင်၏အလျှံကောင်းကင်သို့တက်ကြွလာသောအခါ, ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်မီးလျှံထဲမှာတက်ပြီ. ထိုအမာနျောနဲ့သူ့ဇနီးကဒီရူပါရုံကိုမြင်သောအခါ, သူတို့ကမြေပြင်ပေါ်မှာကျရောက်နေတဲ့ကျဆင်း.
13:21 ထိုအခါထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်မရှိတော့သညျထငျရှား. ထိုခဏ, မာနျောသူ့ကိုသခင်ဘုရား၏တစ်ခုအိန်ဂျယ်ဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်.
13:22 မိမိဇနီးမှကပြောပါတယ်, "ကျနော်တို့ကသေချာပေါက်သေရလိမ့်မည်, ကတည်းကငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏မြင်ကြပြီ။ "
13:23 နှင့်သူ၏ဇနီးကလညျး, "သခင်ကျွန်တော်တို့ကိုသတ်အံ့သောငှါအလိုရှိခဲ့လျှင်, သူမီးရှို့ခြင်းနှင့်ငါတို့လက်ကနေရေစက်သွန်းလက်ခံခဲ့သည်မဟုတ်ဘူး. သူကကျွန်တော်တို့ကိုဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုထင်ရှားမဟုတ်ဘူး, မဟုတ်သူကိုအနာဂတ်၌နေသောအရာတို့ကိုပွောပွီလိမ့်မယ်။ "
13:24 ဒါကြောင့်သူမသားယောက်ျားကိုဘွားမြင်, သူမကသူ၏နာမကိုခေါ်ရှံဆုန်သည်. ထိုအခါကောင်လေးကကြီးပြင်းလာ, နှင့်သခင်ကသူ့ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာ.
13:25 ထိုအခါထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်ဒန်တပ်၌သူနှင့်အတူဖြစ်စတင်, Zo'rah နှင့် Eshtaol အကြား.
14:1 ထိုအခါရှံဆုန်သည်တိမနတ်ဆင်းသက်. ဖိလိတ္တိလူတို့သည်၏သမီးထံမှရှိအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုမြင်လျှင်,
14:2 သူတက်သွားလေ၏, မိမိဖခင်နှင့်သူ့မိခင်ကိုပြောပါတယ်, ဟုဆို: "ငါသည်ဖိလိတ္တိသမီးများအနေဖြင့်တိမနတ်အတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုငါမြင်၏. ငါသည်သင်တို့ဇနီးအဖြစ်ငါ့ကိုမှသူမ၏ယူကြောင်းမေးကြည့်ပါ။ "
14:3 နှင့်သူ၏ဖခင်နှင့်မိခင်ကလညျး, "သင်၏ညီအစ်ကိုများ၏သမီးများအကြားအမျိုးသမီးတစ်ဦးမျှမရှိ Is, သို့မဟုတ်အားလုံးကိုငါ၏လူတို့တွင်, သငျသညျဖိလိတ်တိလူထံမှမယားကိုယူဖို့ဆန္ဒရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်, ရေဖျားလှီးခြင်းကိုနေသော?"ထိုအခါရှံဆုန်သည်မိမိအဘအားဆို၏: "ငါ့ကိုရန်ဤမိန်းမယူပါ. သူမသည်ငါ့မျက်စိအလိုရှိတော်မူပြီ။ "
14:4 ယခုသူ၏မိဘများဒီကိစ္စကိုသခင်ဘုရားကိုပြုလေ၏မသိ, သူသည်ဖိလိတ္တိလူတို့တဘက်၌တစ်ဦးအခါသမယရှာသော. အဲဒီအခြိနျမှာအများအတွက်, ဖိလိတ္တိလူတို့သည်ဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်စိုးခဲ့.
14:5 ဆိုတော့, ရှံဆုန်သည်တိမနတ်အားမိမိဖခင်နှင့်မိခင်နှင့်အတူဆင်း သက်.. ထိုသူတို့ကမြို့၏စပျစ်ဥယျာဉ်မှာရောက်ရှိသောအခါ, သူကခြင်္သေ့ပျိုကိုမြင်လျှင်, Savage နှင့်ဟောက်, ထိုသို့သူ့ကိုတွေ့ဆုံခဲ့.
14:6 ထိုအခါထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ရှံဆုန်အပေါ်မှာသက်ရောက်တဟုန်တည်းပြေး, သူသည်ခြင်္သေ့ကိုဆွဲဆုတ်, ဆိတ်သငယ်ကိုအပိုငျးပိုငျးသို့ကိုက်ခံရနဲ့တူ, သူ၏လက်၌အဘယ်အရာကိုမျှရှိခြင်း. ထိုမင်းသည်ခမည်းတော်နှင့်မယ်တော်ဤထုတ်ဖေါ်ဖို့ဆန္ဒရှိမဟုတ်ခဲ့.
14:7 ထိုမင်းသည်ဆင်း သွား. , သူ၏မျက်စိသည်နှစ်သက်ခဲ့သောမိန်းမအားပြောသော.
14:8 ထိုအခါအချို့ရက်အကြာမှာ, သူမ၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားပြန်, သူကခြင်္သေ့သည်အသေကောင်ကိုကြည့်ရှုအံ့သောငှါထိုအတူသူသည်လမ်းလွဲ. ထိုအခါ, ခြင်္သေ့၏ခံတွင်း၌ပျားတစ် swarm ရှိခဲ့, တစ်ပျားလပို့ကိုအတူ.
14:9 ထိုမင်းသည်မိမိလက်၌ယူပြီးမှ, သူကလမ်းတစ်လျှောက်စား. နှင့်သူ၏ဖခင်နှင့်မိခင်မှရောက်ရှိလာ, သူကသူတို့ကိုတစ်ဦးအဘို့ကိုပေး၏, သူတို့လည်းစား. သို့သျောလညျးသူကခြင်္သေ့၏ခန္ဓာကိုယ်မှပျားရည်ကိုယူဖူးသောသူတို့အားထုတ်ဖေါ်ဖို့ဆန္ဒရှိမဟုတ်ခဲ့.
14:10 ဒီတော့သူ့အဘမိန်းမအားဆင်းသွားလေ၏, သူသည်မိမိသားရှံဆုန်ဘို့ပွဲလုပ်လေ၏. ဒီတော့လုလင်လုပ်ဖို့လေ့ကြ၏.
14:11 ထိုအရပျ၌နိုင်ငံသားများသူ့ကိုမြင်သောအခါ, သူတို့သခင်ဘုရားနှင့်အတူဖြစ်ဖို့သူ့ကိုမှသုံးဆယ်အပေါင်းအဘော်ပေးအပ်.
14:12 ထိုအရှံဆုန်သည်ထိုသူတို့အားပြောဆို: "ငါသည်သင်တို့ဆီသို့ပြဿနာတစ်ခုအဆိုပြုပါလိမ့်မယ်, အရာ, သငျသညျပှဲခုနစ်ရက်အတွင်းအကြှနျုပျအဘို့ပြုလုပ်ဖြေရှင်းနိုင်လျှင်, ငါသည်သင်တို့ကိုသုံးဆယ်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်အင်္ကျီများကို၏တူညီသောအရေအတွက်အားငါပေးမည်.
14:13 ဒါပေမယ့်သင်ကဖြေရှင်းပေးနိုင်မဟုတျပါလျှင်, သငျသညျ။ ငါ့ကိုသုံးဆယ်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်အင်္ကျီများကို၏တူညီသောအရေအတွက်အားပေးရမည် "ထိုသူတို့ကလညျး, "ပြဿနာကိုအဆိုပြုရန်, ကျွန်တော်နားမထောင်စေခြင်းငှါဤမျှ။ "
14:14 ထိုသူတို့အားဆို၏, "စားနပ်ရိက္ခာသောစားမှထွက် သွား., နှင့်ချို။ တန်ခိုးကြီးသောအရာမှထွက် သွား. "ထိုသူတို့ကသုံးရက်များအတွက်အဆိုပြုဖြေရှင်းဖို့နိုင်ခဲ့.
14:15 ထိုအခါသတ္တမနေ့၌ရောက်ရှိသောအခါ, သူတို့ရှံဆုန်၏မယားတို့အားဆို၏: "သင်၏ခင်ပွန်းဟများထံသွားရောက်ကာ, နှင့်အဆိုပြုဆိုလိုတယ်သင်သည်အဘယ်သို့မှထုတ်ဖေါ်ဖို့သူ့ကိုစည်းရုံး. သင်တို့မူကား, အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိနေကြသည်မဟုတ်ပါလျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်သင်တို့၏အဘ၏အိမျတျောကိုမီးရှို့မည်. နိုင်ရန်အတွက်သို့မဟုတ်သင်ကျွန်တော်တို့ကိုလုယူရန်အတွက်မင်္ဂလာဆောင်မှကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပြီ?"
14:16 ထိုမိန်းမသည်ရှံဆုန်သည်ရှေ့တော်၌မျက်ရည်, သူမညည်းညူ, ဟုဆို: "သင်ငါ့ကိုမုန်း, သငျတို့သညျငါ့ကိုခစျြကြဘူး. သငျသညျအကြှနျုပျကိုမှပြဿနာကိုရှင်းပြချင်ကြပါဘူးဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, သငျသညျ။ ငါ၏လူတို့၏သားမှအဆိုပြုထားကြပါပြီ "ဒါပေမယ့်သူကတုန့်ပြန်ရာ: "ငါသည်ငါ့ခမည်းတော်နှင့်မယ်တော်ကထုတ်ဖေါ်ဖို့ဆန္ဒရှိမဟုတ်ခဲ့. ဆိုတော့, ဘယ်လိုငါအမှနျကထုတ်ဖော်ပြောကြားနိုင်သည်?"
14:17 ထို့ကြောင့်, သူမပွဲခံရာခုနစ်ရက်ပတ်လုံးစဉ်အတွင်းသူ့ရှေ့မှာငိုကွှေးလကျြ. နှင့်အရှည်မှာ, ခုနစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌, သူမကသူ့ကိုနှောက်ယှက်ခဲ့ကတည်းက, သူကရှင်းပြခဲ့. ထိုခဏသူမကသူမ၏နိုင်ငံသားကထုတ်ဖော်ပြသ.
14:18 ထိုသူတို့က, ခုနစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌, နေရောင်ကိုငြင်းဆိုခဲ့သည်မတိုင်မီ, သူ့ကိုကပြောပါတယ်: "ဘာပျားရည်ထက်ချိုဖြစ်ပါသည်? ထိုအခါခြင်္သေ့ထက်အဘယ်အရာသန်စွမ်း?"ထိုသူတို့အားဆို၏, "သင်ငါ့နွားမပျိုနှင့်အတူမထွန်လျှင်, သငျသညျအကြှနျုပျ၏အဆိုပြုအဝတ်မခြုံဘဲမလိမ့်မယ်။ "
14:19 ဒီတော့သခင်ဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့တဟုန်တည်းပြေး, သူအာရှကေလုန်မြို့မှဆင်းသက်, နှင့်အရပ်ကိုသူသုံးဆယ်ယောက်ျားဒဏ်ခတ်. ထိုသူတို့၏အဝတျကိုကွာတာ, သူကပြဿနာကိုဖြေရှင်းခဲ့တဲ့သူတွေကိုအားပေး၏. အလွန်အမျက်ထွက်ဖြစ်ခြင်း, သူသည်မိမိအဘ၏အိမျသို့တက်.
15:1 ထိုအခါ, တချို့အချိန်ပြီးနောက်, ဂျုံစပါးရိတ်ရာကာလ၏ရက်ပေါင်းအနီးသောအခါ, ရှံဆုန်ရောက်ရှိလာခဲ့, သူ၏ဇနီးသွားရောက်ရည်ရွယ်, သူသူမကိုဆိတ်နေတဲ့ဆိတ်သငယ်ကိုဆောင်ခဲ့. ထိုမင်းသည်သူမ၏အိပ်ခန်းထဲသို့ဝင်ခြင်းငှါအလိုရှိသောအခါ, ထုံးစံအတိုင်း, သူမ၏ဖခင်ကသူ့ကိုတားမြစ်သည်, ဟုဆို:
15:2 "ငါသည်သင်တို့ကိုသူမ၏မုန်းမယ်လို့ထင်, ထို့ကြောင့်ငါသည်သင်တို့၏မိတ်ဆွေသူမ၏ပေးခဲ့တယ်. သို့သော်သူမတစ်ဦးအစ်မရှိပါတယ်, သူကိုသူမထက်အသက်ငယ်ပြီးပိုလှပ. ထိုမိန်းမသည်သင်တို့အဘို့မယားကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ, သူမ၏အစား။ "
15:3 ထိုအရှံဆုန်ကလညျး: "ဒီနေ့ကမှစ, ဖိလိတ္တိလူတို့တဘက်၌ငါ့အဘို့အဘယ်အပြစ်ကိုမျှရှိလိမ့်မည်. ငါသည်သင်တို့ကိုလူအပေါင်းတို့အားအန္တရာယ်ပြုလိမ့်မည်။ "
15:4 ထိုမင်းသည် ထွက်. သုံးရာမွခှေးဖမ်းမိ. ထိုမင်းသည်အမြီးသူတို့ကိုအမြီးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး. သူသည်ထိုအအမြီးအကြားမီးချည်ထား.
15:5 မီးပေါ်ဤအကြောင်း setting, သူကသူတို့ကိုပြန်လွှတ်ပေး, သူတို့နေရာအရပ်မှရပျမှအဆောတလျင်အံ့သောငှါဒါ. ထိုခဏသူတို့ဖိလိတ္တိစပါးလယ်ကွင်းသို့သွားလေ၏, မီးပေါ်ဤအကြောင်း setting, ပြီးသားတင်ဆောင်ဘို့ခညျြနှောငျခဲ့ကွောငျးစပါးနှစ်ဦးစလုံး, နှင့်နေဆဲအညှာပျေါအဘယျရပ်နေ၏. ဤရွေ့ကားလုံးဝတက်ကိုမီးရှို့ခံခဲ့ရ, မီးလျှံလည်းပင်စပျစ်ဥယျာဉ်နှင့်သံလွင်အာရှရပင်ဤမျှလောက်စားသုံးနိုင်အောင်.
15:6 ဖိလိတ္တိလူတို့သည်ဆိုပါတယ်, "အဘယ်သူသည်ဤအမှုကိုပြုတော်မူပြီ?"ထိုသို့ပြောဆို: "ရှံဆုန်, သားအ-In-ဥပဒေ Timnite ၏, သူကသူ့ဇနီးပယ်ရှင်းပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, တယောက်သောသူအားသူမ၏ပေးခဲ့တယ်. သူ။ ကဤအမှုတို့ကိုပြုထားပါတယ် "ထိုဖိလိတ္တိလူတက်သွားလေ၏နှင့်မိန်းမကိုအဖြစ်သူမ၏ဖခင်ကိုမီးရှို့.
15:7 ထိုအရှံဆုန်သည်ထိုသူတို့အားပြောဆို, "သင်သည်ဤအမှုကိုပြုသောသော်လည်း, ငါနေဆဲသင်တို့တဘက်၌အမျက်တော်ကိုဖြေဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မယ်, ပြီးတော့ငါငွိမျလိမျ့မညျ။ "
15:8 ထိုမင်းသည်တစ်ဦးကြီးမားတဲ့လုပ်ကြံခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုလုပ်ကြံ, ဒါကြောင့်ဤမျှလောက်, မိန်းမောတွေဝေထဲက, သူတို့ပခုံးပေါ်မှာခြေထောက်၏နွားသငယ်ကိုတငျပွီးလြှငျ. ထိုအဆင်း, သူ Etam မှာကျောက်ဂူတှငျနထေိုငျ.
15:9 ဒါဖိလိတ္တိလူ, ယုဒပြည်သို့ကွှ, နောက်ပိုင်းမှာလီဟိုင်းကိုခေါ်ခံခဲ့ရသည်သောအရပ်မှာစခန်းကိုဖန်ဆင်း, ကြောင်း, အဆိုပါ Jawbone, သူတို့ရဲ့စစ်တပ်ကထွက်ပျံ့နှံ့ဘယ်မှာ.
15:10 ထိုအခါယုဒခရိုင်ထဲကအချို့သောသူတို့ကိုဆိုပါတယ်, "သင်အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဆန့်ကျင်တက်ပြီပါပြီ?"ထိုသူတို့ကတုန့်ပြန်, "ကျနော်တို့ကရှံဆုန်ခညျြနှောငျခွငျးငှါလာကြပါပြီ, သူကျွန်တော်တို့ကိုပြုတော်မူပြီအရာကိုသူ့ကိုပြန်ဆပ်ဖို့။ "
15:11 ထိုအခါယုဒသုံးထောင်ယောက်ျား Etam မှာကျောက်ဂူမှဆင်းသက်. ထိုသူတို့ကရှံဆုန်အားဆို၏: "သင်သည်ဖိလိတ္တိအကျွန်ုပ်တို့ကိုအုပ်စိုးမသိကြ? သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဤသို့ပြုလို?"ထိုသူတို့အားဆို၏, "သူတို့ငါ့အားပြုကြပြီအမျှ, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုငါပြုပြီ။ "
15:12 ထိုသူတို့သညျအထံတျောကပြောပါတယ်, "ကျနော်တို့ကသငျသညျခညျြနှောငျခွငျးငှါလာကြပါပြီ, ဖိလိတ္တိလူတို့လက်သို့အပ်ရန်။ "ထိုအခါရှံဆုန်သည်ထိုသူတို့အားပြောဆို, "သင်ငါ့ကိုသတ်မည်မဟုတ်ကြောင်းငါ့ထံသို့ကြိနျဆိုခြင်းနှင့်ကတိပေး။ "
15:13 သူတို့ကဆိုပါတယ်: "ကျနော်တို့ကိုသင်မသတ်ပါလိမ့်မယ်. ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့။ ချည်ထားသောသငျသညျအပျတျောမူလိမျ့မညျ "ဟုထိုသူတို့နှစ်ဦးကိုအသစ်ကကြိုးများနှင့်အတူသူ့ကိုခညျြနှောငျ. ထိုသူတို့က Etam မှာကျောက်ထဲကသူ့ကို ယူ..
15:14 သူသည်ထိုအ Jawbone ၏နေရာတွင်ရောက်ရှိသောအခါ, ဖိလိတ္တိလူ, ကျယ်လောင်စွာအော်ဟစ်, သူ့ကိုတွေ့ခဲ့တဲ့, သခင်ဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့တဟုန်တည်းပြေး. နှင့်ပိုက်ဆန်များသောအားဖြင့်မီးတစ်အရိပ်အမြွက်အားဖြင့်စားသုံးသကဲ့သို့, ဒါကြောင့်သူကကျိုးခညျြနှောငျဖြန့်ချိခဲ့သည့်အတူဆက်ဆံရေးခဲ့ကြသည်.
15:15 ထိုအရပ်၌တင်သောခဲ့သည့်တစ်ဦးမေးရိုးရှာတွေ့, ကြောင်း, မြည်း၏မေးရိုး, ကတက်ထဲမှဆယ်နှုတ်, သူသည်သေဖို့ကနှင့်အတူလူတထောငျထား.
15:16 နှင့်ဟုသူကဆိုသည်, "မြည်း၏မေးရိုးနှင့်အတူ, မြည်း၏မြည်း၏မေးရိုးနှင့်အတူ, သူတို့ကိုငါဖျက်ဆီးပြီ, ငါလူတထောငျဒဏ်ခတ်ပြီ။ "
15:17 ထိုမင်းသည်ဟောပြောသောဤစကားကိုပြီးစီးပြီးမှ, သီချင်းဆိုခြင်း, သူသည်မိမိလက်ကိုမှအမေးရိုးပစ်ချ. ထိုအရပျကိုရာမတ်-လီဟိုင်း၏နာမတော်ကိုခေါ်, အရာအဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသောဖြစ်ပါတယ် 'အမေးရိုး၏မြင့်။ '
15:18 အလွန်ရေငတ်ဖြစ်ခြင်း, ထာဝရဘုရား၏လက်တော်အားအော်ဟစ်, နှင့်ဟုသူကဆိုသည်: "သင်ပေးပြီ, ကိုယ်တော်ကျွန်၏လက်မှ, ဤသည်အလွန်ကြီးစွာသောကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုနှင့်အောင်မြင်ခြင်း. သို့သော်လည်းငါသည်ရေငတ်၏သေဆုံးနေသူဖြစ်ကြောင်းကိုတွေ့မြင်, ဒါငါရေဖျားလှီးခြင်းကို၏လက်တော်သို့ကျလိမ့်မည်။ "
15:19 ဒီတော့သခင်ဘုရားကိုမြည်းများ၏မေးရိုးတစ်ကြီးမားသွားဖွင့်လှစ်, နှင့်ရေကြောင့်ထံမှထွက် သွား.. ထိုသို့သောက်တော်မူပြီးမှ, သူ၏ဝိညာဉ်ပြန်လည်ခဲ့သည်, မိမိအစွမ်းသတ္တိကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်. ဒီအတွက်ကြောင့်, ထိုအရပျ၏အမည်နွေဦးဟာမေးရိုးထဲကထွက်ကိုခေါ် '' ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်,'' ပင်ပစ္စုပ္ပန်နေ့.
15:20 ထိုမင်းသည်ဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်စိုး, ဖိလိတ္တိလူတို့လက်ထက်၌, နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်.
16:1 ထို့အပြင်သူသည်ဂါဇာသို့သွားလေ၏. ထိုအရပ်၌သူကပြည်တန်ဆာအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုငါမြင်၏, သူမိန်းမငယ်အားထဲသို့ဝင်.
16:2 ဖိလိတ္တိလူတို့သည်ဤအမှုကြားလျှင်, ထိုသို့သူတို့နှင့်ရောနှောလူသိများဖြစ်လာခဲ့သည်, ရှံဆုန်သည်မြို့ထဲသို့ဝင်ခဲ့ကွောငျး, သူတို့ကသူ့ကိုဝိုင်းရံ, မြို့တံခါးဝမှာစောင့်အားမရ. ထိုအရပ်၌သူတို့တိတ်ဆိတ်စွာညဉ့်လုံးလက်ပတ်နာရီကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့ကြ, သောကြောင့်, မနက်ခင်းမှာ, သူထွက်ခဲ့သည်အဖြစ်သူတို့ကသူ့ကိုသတ်ပစ်စေခြင်းငှါ,.
16:3 သို့သော်ရှံဆုန်သည်ညဉ့်၏အလယ်တွင်သည်အထိအိပ်ပျော်, နှင့်ထိုအရပ်မှထ, သူတံခါးဝကနေနှစ်ဦးစလုံးတံခါးများကိုယူ, သူတို့ရဲ့ရေးသားချက်များနှင့်ဘားနှင့်အတူ. နှင့်သူ၏ပခုံးပေါ်မှာသူတို့ကိုတင်သော, သူရှိရာဟေဗြုန်မျက်နှာသောတောင်ထိပ်ကသူတို့ကိုသယ်ဆောင်.
16:4 ဤအရာတို့ကိုပြီးနောက်, သူ Sorek ၏ချိုင့်၌နထေိုငျသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုခစျြ. ထိုမိန်းမသည်ဒေလိလဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်.
16:5 ဖိလိတ္တိလူတို့သည်များ၏ခေါင်းဆောင်များသူမ၏ထံသို့ ဝင်., ထိုသူတို့ကပြောပါတယ်: "သူ့ကိုလှည့်စား, မိမိအကြီးစွာသောခွန်အားဗလတည်ရှိသည်ကျသောနှင့်သူ့ထံမှသင်ယူ, ငါတို့သည်အဘယ်သို့သူ့ကိုကျော်လွှားရန်နှင့်သူ့ကိုထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစည်းကြပ်နိုင်မည်အကြောင်း. ထိုအသင်ဤပြုကြလိမ့်မည်ဆိုပါက, ကျွန်တော်တို့တစ်ဦးချင်းစီတဦးတည်းသင်တဦးတည်းတထောင်တရာ, ငွေဒင်္ဂါးပြားကိုငါပေးမည်။ "
16:6 ထို့ကြောင့်, ဒေလိလရှံဆုန်အားဆို၏, "ကျွန်တော့်ကိုပြောပါ, တောင်းပန်ပါတယ်, သောကသင်၏အလွန်ကြီးစွာသောခွန်အားဗလတည်ရှိသည်, သငျတို့သခညျြနှောငျစေခြင်းငှါအဘယျသို့နှင့်အတူ, သငျသညျအခမဲ့မချိုးနိုင်အောင်?"
16:7 ထိုအရှံဆုန်သည်သူမ၏ဖြေကြား, "ငါသည်ခုနစ်ခုကွိုးနှငျ့ခညျြနှောငျပါလိမ့်မည်ဆိုပါက, အကြောများ၏လုပ်မပေးသေးခြောက်သွေ့တဲ့, သို့သော် damp, ငါကအခြားလူကဲ့သို့အားနည်းဖြစ်လိမ့်မည်။ "
16:8 ထိုအခါဖိလိတ္တိမင်းတို့သည်သူမ၏ခုနစ်ခုကြိုးမှယူဆောင်, သူကဖော်ပြထားခဲ့သည်ကဲ့သို့သော. ထိုမိန်းမသည်ထိုအနှငျ့အတူသူ့ကိုခညျြနှောငျ.
16:9 ဆိုတော့, သူမ၏နှင့်အတူကင်းထိုးပုန်းအောင်းရှိသူများ, အိပ်ခန်းထဲမှာ, ဒီကိစ္စကို၏အဆုံးကိုမျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်. ထိုမိန်းမသည်သူ့ကိုအားအော်ဟစ်, "ဖိလိတ္တိလူတို့သည်သင်တို့အပေါ်သို့များမှာ, ရှံဆုန်!"သူသည်ထိုအကြိုးဖဲ့, တဦးတည်းပိုက်ဆန်တစ်ချည်မျှင်ကိုချိုးဖျက်လိမ့်မယ်အဖြစ်, ဖြတ်တောက်ခြင်းအဘို့အလိမ်များနှင့်မီးဖြင့် singed. သူ၏ခွန်အားကို တင်. ကျသောဒါကြောင့်မသိခဲ့သည်.
16:10 ဒေလိလကလညျး: "အကယ်, သငျသညျအကြှနျုပျကိုမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံကြပါပြီ, သငျတို့သတဲ့မုသာပြောပြီ. ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးအားယခု, သငျသညျခညျြနှောငျခံရနိုငျသောအရာကိုနှင့်ငါ့ကိုပြောပြပါ။ "
16:11 ထိုမင်းသည်သူမ၏ဖြေကြား, "ကျွန်မအသစ်ကကြိုးနှင့်ချည်နှောင်ခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ် အကယ်., အရာအသုံးပြုခဲ့ဖူးဘူး, ငါအားနည်းနေနှင့်အခြားလူကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ "
16:12 နောက်တဖန်အ, ဒေလိလသည်ဤအတူသူ့ကိုချည်ထား, သူမအော်ဟစ်, "ဖိလိတ္တိလူတို့သည်သင်တို့အပေါ်သို့များမှာ, ရှံဆုန်!"တစ်ဦးကင်းထိုးသည်အိပ်ခန်းထဲမှာကိုပြင်ဆင်ခဲ့. ဒါပေမယ့်သူတစ်ဦးကို web ၏နန်းကြိုးအမျှင်လေးများကဲ့သို့ခညျြနှောငျဖဲ့.
16:13 ဒေလိလသည်နောက်တဖန်သူ့ကိုနှုတ်ဆက်: "သင်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးငါ့ကိုမလှည့်ဖြားခြင်းနှင့်ငါ့ကိုအမှားကိုအမှန်ပြောပြလိမ့်မယ်? ။ သင်သည်အဘယ်သို့ချည်နှောင်လျက်ခံရဖို့်၏နှင့်အတူထုတ်ဖေါ် "ထိုအခါရှံဆုန်သည်သူမ၏တုန့်ပြန်, "သင်တစ်ဦးရက်ကန်းစင်နဲ့ငါ့ဦးခေါင်းခုနစ်လုံးကိုသော့ခလောက်မျိုးကိုရက်ပါလျှင်, သငျတို့သတဲ့ဆူးန်းကျင်ကဤချည်နှောင်ခြင်းနှင့်မြေပြင်က fix လျှင်, ငါအားနည်းနေလိမ့်မည်။ "
16:14 ဒေလိလသည်ဤအမှုကိုပြုသောအခါ,, သူမကသူ့ကိုရန်ကဆိုသည်, "ဖိလိတ္တိလူတို့သည်သင်တို့အပေါ်သို့များမှာ, ရှံဆုန်သည်။ "ထိုအအိပ်ပျော်ရာမှပေါ်ထွက်လာသော, သူဆံပင်နှင့်ယက်လုပ်ခြင်းနှင့်အတူဆူးနုတ်ထွက်.
16:15 ဒေလိလကလညျး: "သင်ငါ့ကိုချစ်သောဘယ်လိုပြောနိုင်, သင်တို့၏ဝိညာဉ်သည်ငါနှင့်အတူမပါသောအခါ? သငျသညျသုံးကွိမျပေါ်မှာငါ့ကိုလိမ်ညာခဲ့ကြ, နှင့်သင်သည်သင်၏အလွန်ကြီးစွာသောခွန်အားဗလတည်ရှိသည်ကျသောထုတ်ဖေါ်ဖို့ဆန္ဒရှိနေကြသည်မဟုတ်။ "
16:16 ထိုမိန်းမသည်သူ့ကိုအလွန်ဒုက္ခခဲ့ပြီးမှ, နှင့်နေ့ရက်များစွာကျော်အစဉ်မပြတ်အနီးအနားမှာတည်းခိုခဲ့, သူ့ကိုငြိမ်ဝပ်စွာနေရန်အချိန်မပေးခြင်း, မိမိစိတ်ဝိညာဉ်မောခဲ့, သူငြီးငွေ့ခဲ့, သေခံသည်တိုင်အောင်.
16:17 ထိုအခါကိစ္စ၏အမှန်တရားထုတ်ဖော်, သူမကလည်း,: "သံငါ့ဦးခေါင်းဖြတ်ပြီးရေးဆွဲဖူး, ငါနာဇရိလူဖွစျပါ၏, ကြောင်း, ငါသည်ငါ့မိခင်ရဲ့အမိဝမ်းထဲ မှစ. ကိုဘုရားသခင်အားသန့်ရှင်းစေပြီ. ငါ့ဦးခေါင်းရိတ်ကြလိမ့်မည်ဆိုပါက, ငါ့ခွန်အားငါ့ထံမှထွက်သွားပါလိမ့်မယ်, ငါမောကြလိမ့်မည်နှင့်အခြားလူကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ "
16:18 ထိုအခါ, သူကသူမ၏မိမိလူအပေါင်းတို့စိတ်ဝိညာဉ်၌ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းကိုမြင်လျှင်, သူမသည်ဖိလိတ္တိခေါင်းဆောင်များထံသို့စေလွှတ်ခြင်းနှင့်အမိန့်ထုတ်: "ကိုယ့်ကိုတစ်ကြိမ်ထက်ပိုတက်လာကြ. ယခုသူသည်။ ငါ့ထံသို့သူ၏စိတ်နှလုံးဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ် "ထိုသူတို့ကတက်သွားလေ၏, သူတို့နှင့်အတူသူတို့ကတိထားတော်ဖူးသောငွေကိုယူပြီး.
16:19 သို့သော်သူမသူ့ကိုသူမ၏ဒူးပျေါမှာအိပျပျြောလုပ်, နှင့်သူမ၏ရငျခှငျပျေါမှာသူ၏ဦးခေါင်းကိုလျောင်း. ထိုမိန်းမသည်တစ်ဦးဆံကိုခေါ်, သူဆံပင်သူ၏ခုနစ်ခုသော့ခလောက်ရိတ်. ထိုမိနျးမကွာသူ့ကိုတွန်းဖို့စတင်, နှင့်မိမိကိုယ်ကိုထံမှသူ့ကိုတွန်းလှန်ရန်. သူ့ထံမှထွက်သွားကြချက်ချင်းသူ၏ခွန်အားကိုများအတွက်.
16:20 ထိုမိန်းမကပြောပါတယ်, "ဖိလိတ္တိလူတို့သည်သင်တို့အပေါ်သို့များမှာ, ရှံဆုန်!"ထိုအခါနိုး, သူသည်မိမိစိတ်တွင်ကပြောပါတယ်, "ငါသည်ဝေးကိုချိုးဖျက်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှုပ်ခါပါလိမ့်မယ်, ပဲငါမတိုင်မီပြုသကဲ့သို့။ "ဟုသူကသခင်ဘုရားထံတော်ကဆုတ်ခွာခဲ့ကွောငျးမသိခဲ့ပါသည်.
16:21 ဖိလိတ္တိလူတို့သည်ဘမ်းဆီးပြီးမှ, သူတို့ကချက်ချင်းသူ့မျက်စိထဲကနှုတ်သောထင်း. ထိုသူတို့ကသူ့ကိုဦးဆောင်, ချည်နှောင်ခညျြနှောငျ, ဂါဇာမှ. ထိုအခါထောင်ထဲမှာသူ့ကို enclosing, သူတို့ကသူ့ကိုကြိတ်ဆုံကျောက်အလုပ်လုပ်လုပ်.
16:23 ဖိလိတ္တိလူတို့သည်များ၏ခေါင်းဆောင်များတစ်ဦးအဖြစ်ခေါ်ယူ, သူတို့ဒဂုံမှကြီးမြတ်ပူဇော်သောယဇ်ကိုပူဇော်စေခြင်းငှါဒါ, သူတို့ရဲ့ဘုရား. ထိုသူတို့က feasted, ဟုဆို, "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူလက်သို့အပ်လိုက်ပါတယ်, ရှံဆုန်, ကိုငါတို့လက်သို့။ "
16:24 ထိုအခါ, လွန်း, လူအ, ဒီကိုမြင်လျှင်, သူတို့ရဲ့ဘုရားဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်း, သူတို့အတူတူကပြောပါတယ်, "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားကိုငါတို့လက်သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ဘက်ပြုသောသူတို့ကိုအပ်လိုက်ပါတယ်: ငါတို့မြေကိုဖကျြဆီးသူအလွန်များစွာသောဦးသေဆုံးခဲ့သူတဦး။ "
16:25 ထိုသူတို့၏အခမ်းအနားအတွက်ဝမ်းမြောက်, ယခုအစားအစာ ယူ., သူတို့ရှံဆုန်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရကြောင်းညွှန်ကြား, သူသူတို့ရှေ့မှာမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံစေခြင်း. ထိုအကဉျြးထောငျကနေယူဆောင်ခဲ့ဘဲလျက်, သူကသူတို့ရှေ့မှာမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံခဲ့သည်. ထိုသူတို့ကသူ့ကိုတိုင်နှစ်တိုင်အကြားမတ်တပ်ရပ်စေ.
16:26 မိမိခြေလှမ်းများလမ်းပြခဲ့တဲ့ကောင်လေးကပြောဆို၏, "တိုင်ကိုထိကျပါရစေ, တစ်ခုလုံးကိုအိမ်သူအိမ်သားကိုထောက်ပံ့ပေးသော, သူတို့ကိုဆန့်ကျင်အမှီရန်, ကျွန်မအနည်းငယ်ငြိမ်ဝပ်စွာနေစေခြင်းငှါဤမျှ။ "
16:27 အခုတော့အိမျတျောကိုယောက်ျားမိန်းမတို့နှင့်အပြည့်ခဲ့. ဖိလိတ္တိလူတို့သည်အပေါငျးတို့သခေါင်းဆောင်များရှိခဲ့သည်, အဖြစ်သုံးထောင်လောက်ပုဂ္ဂိုလ်များ, နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်း၏, ခေါင်မိုးပေါ်နှင့်မင်းမျိုး၏အထက်အဆင့်အတွက်, ရှံဆုန်မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံလျက်ရှိကြည့်ရှုသူ.
16:28 ထိုအခါ, သခင်ဘုရားအပျေါမှာတောင်းဆို, ဟုသူကပြောသည်, "အိုထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ငါ့ကိုအောက်မေ့, ယခုအခါငါ့ထံသို့ငါ့အကိုယခင်အစွမ်းသတ္တိကို restore, အိုအကြှနျုပျ၏ဘုရားသခငျ, ငါသည်ငါ၏ရန်သူများကိုဆန့်ကျင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်စားချေစေခြင်းငှါဒါ, နှင့်သို့မှသာငါသည်ငါ့မျက်စိနှစ်ဘက်၏ဆင်းရဲချို့တဲ့ဘို့တမျက်တော်ပြေခြင်းခံယူနိုငျသညျ။ "
16:29 ထိုအခါတိုင်နှစ်ဦးစလုံးကိုကိုင်ယူပြီး, အိမ်သူအိမ်သားအိပ်ပျော်ရာပေါ်, နှင့်သူ၏လက်ဝဲဘက်နှင့်အတူမိမိလက်ျာလက်နှင့်တသားတနှင့်အခြားကိုင်ပြီး,
16:30 ဟုသူကပြောသည်, "ငါ့ဘဝဖိလိတ္တိလူနှင့်အတူအသေခံနိုင်ပါစေ။ " ထိုအခါသူကပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုင်လှုပ်ပြီးမှ, အိမ်သူအိမ်သားအပေါငျးတို့သခေါင်းဆောင်များအပေါ်သို့သက် ရောက်., အဲဒီမှာသူလူအစုအဝေး၏ကျန်. သူသည်မိမိအသက်တာ၌မတိုင်မီအသတ်ခံရဖူးထက်မိမိသည်သေခြင်း၌များစွာသောပိုပြီးဦးသေဆုံး.
16:31 ထိုအခါမိမိညီအစ်ကိုတို့နှင့်သူ၏ဆွေမျိုးသားချင်းများ, မဆင်း, သူ့ခန္ဓာကိုယ်ယူ, သူတို့ဇောရာမြို့နှင့် Eshtaol အကြားသင်ျဂွိုဟျ, မိမိအဘ၏သင်ျဂွိုဟျရပျ၌, မာနျော. ထိုမင်းသည်နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်စိုး.
17:1 အဲ့အချိန်မှာ, လူတယောက်ရှိ၏, ဧဖရိမ်တောင်ပေါ်ကနေ, မိက္ခာအမည်ရှိ.
17:2 ထိုမင်းသည်မိမိအမိကလည်း,, "ဒီတစျထောငျတရာ, ငွေဒင်္ဂါးပြား, ရာသငျသညျကိုယျအဘို့ကွဲကွာခဲ့ကြ, နှင့်ရသောအကြောင်းသင့်ကိုငါကြားကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခဲ့သည်, ကှ္ဂျကှ္ဂျ, သူတို့ကိုငါရှိတယ်, သူတို့။ ငါနှင့်အတူ "ထိုမိန်းမသည်သူ့ကိုပြန်ပြောသည်, "ငါ့သား, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ "
17:3 ထို့ကြောင့်, သူကသူ့မိခင်မှသူတို့ကိုပွနျလညျထူထောငျ. ထိုမိနျးမကလညျး: "ငါသည်သန့်ရှင်းစေနှင့်သခင်ဤငွေအကတိပြုကြပါပြီ, ငါ၏အသားကိုငါ့လက်မှခံယူမယ်လို့ဒါ, နှင့်သွန်းသောရုပ်တုနှင့်တစ်ဦးရုပ်တုကိုလုပ်လိမ့်မယ်. ယခုမှာသင်တို့ကိုငါကကယ်နှုတ်တော်မူ။ "
17:4 ထိုမင်းသည်မိမိအမိအားဤပွနျလညျထူထောငျရသောအခါ, သူမကငွေဒင်္ဂါးပြား၏နှစ်ရာယူ, သူငှကအားပေး၏, သူကသူတို့ထံမှတစ်သွန်းသောရုပ်တုနှင့်တစ်ဦးရုပ်တုကိုလုပ်စေခြင်းငှါ, ဒါ. ထိုသို့မိက္ခာ၏အိမျတျော၌ရှိ၏.
17:5 သူသညျလညျးအထဲတွင်ဘုရားအဘို့အအနည်းငယ်ကိုနတ်ကွန်းကွဲကွာ. ထိုမင်းသည်သင်တိုင်းနှင့် theraphim လုပ်, ကြောင်း, တစ်ယဇ်ပုရောဟိတ်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများနှင့်ရုပ်တု. ထိုမင်းသည်သူ့သားတဦးတည်း၏လက်ဖြည့်, မိမိယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်လာခဲ့သည်.
17:6 ထိုနေ့ရက်ကာလ၌, ဣသရေလအမျိုး၌ရှင်ဘုရင်မရှိ. အဲဒီအစား, အသီးအသီးမိမိကိုမိမိမှလက်ျာဘက်သလိုပဲအမှုကိုပြု.
17:7 လည်း, အခြားနုပျိုတယောက်ရှိ၏, ယုဒအမျိုးသည်ဗက်လင်မြို့ကနေ, မိမိဆွေမျိုးများ၏တဦးတည်း. ထိုမင်းသည်မိမိကိုမိမိတစ်ဦးဝေိခဲ့သည်, သူအဲဒီမှာနေထိုင်နေခဲ့ပါသည်.
17:8 ထိုအခါ, ဗက်လင်မြို့ကနေထွက်ခွာ, သူကမိမိကိုယျကိုကအကျိုးရှိရှာတွေ့မယ်လို့နေရာတိုင်းမှာတည်းခိုစေလိုကြောင်း. ထိုမင်းသည်ဧဖရိမ်တောင်ပေါ်မှာရောက်ရှိသောအခါ, ခရီးအောင်နေစဉ်, သူလည်းမိက္ခာ၏အိမျတျောမှခဏလွှဲ.
17:9 သူကမှလာရှိရာထိုမင်းသည်သူ့ကိုမေးခဲ့သည်. ထိုမင်းသည်တုန့်ပြန်: "ငါသည်ယုဒအမျိုးသည်ဗက်လင်မြို့ကနေတစ်ဦးဝေိဖြစ်ကြောင်းကို. ငါတတ်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်မှာငါအသက်ရှင်စေခြင်းငှါဒါထိုအခါငါခရီးသွားနေပါတယ်, ငါကငါ့ထံသို့အသုံးဝင်သောဖြစ်ရိပ်မိလျှင်။ "
17:10 မိက္ခာကပြောပါတယ်: "ကိုယ်နဲ့နေပါ. တဖန်သင်တို့မိဘတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးယဇ်ပုရောဟိတ်များကဲ့သို့ငါ့အားဖွစျလိမျ့မညျ. ထိုအခါငါသည်သင်အားငါပေးမည်, နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း, တဆယ်, ငွေဒင်္ဂါးပြား, တစ်ဦးကို double-အလွှာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်း, သမျှပြဋ္ဌာန်းချက်လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။ "
17:11 သူကသဘောတူ, သူသည်ယောက်ျားနှင့်တည်းခို. ထိုမင်းသည်သူ့သားတဦးတည်းကဲ့သို့သူ့ကိုဖို့ဖြစ်တယ်.
17:12 မိက္ခာသည်မိမိလက်ကိုဖြည့်, မိမိယဇ်ပုရောဟိတ်သကဲ့သို့သူနှင့်လုလင်ခဲ့,
17:13 ဟုဆို: "အခုဆိုရင်ကျွန်မဘုရားသခင်သည်ငါ့ကိုကောင်းဖြစ်မည်ဟုငါသိ၏, ငါလေဝိသားတို့စတော့ရှယ်ယာထဲကနေယဇ်ပုရောဟိတ်များကတည်းက။ "
18:1 ထိုနေ့ရက်ကာလ၌, ဣသရေလအမျိုး၌ရှင်ဘုရင်မရှိ. ဒန်အမျိုးကိုမိမိတို့အဘို့အပိုင်ရှာသောအခါ, သူတို့အထဲတွင်အသက်ရှင်စေခြင်းငှါဒါ. ပင်ထိုနေ့ရက်သည်အ, သူတို့ကတခြားအမျိုးအနွယ်တို့တွင်မိမိအများကြီးလက်ခံရရှိခဲ့.
18:2 ထို့ကြောင့်, ဒန်၏သားငါးအလွန်အားကောင်းတဲ့လူကိုစေလွှတ်, သူတို့ရဲ့စတော့ရှယ်ယာနှင့်မိသားစု၏, ဇောရာမြို့နှင့် Eshtaol ထံမှ, သူတို့သည်တပြည်လုံးကိုစူးစမ်းခြင်းနှင့်စေ့စေ့ကြောင့်စစ်ဆေးခြင်းအံ့သောငှါဒါ. ထိုသူတို့ကလညျး, "Go ကို, မြေနှင့်စဉ်းစားပါ။ "ထိုအခါခရီးသွားပြီးနောက်, သူတို့ဧဖရိမ်တောင်ပေါ်မှာရောက်ရှိ, သူတို့မိက္ခာ၏အိမျတျောသို့ဝငျ. အဲဒီမှာသူတို့ကငြိမ်ဝပ်စွာနေ.
18:3 ထိုသူတို့ကတစ်ဦးဝေိခဲ့သူလူငယ်၏မိန့်ခွန်းအသိအမှတ်ပြု. သူနှင့်အတူတစ်တည်းခိုခန်း၏အသုံးချနေစဉ်, သူတို့ကသူ့ကိုအားဆို၏: "အဘယ်သူသည်ဤအရပ်၌သင်တို့ကိုယူဆောင်? မင်းဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲ? အဘယ်အရာကိုအကြောင်းပြချက်များအတွက်သင်ဒီမှာလာချင်ခဲ့ဘူး?"
18:4 ထိုမင်းသည်သူတို့ကိုဖြေကြား, "မိက္ခာငါ့ကိုတဦးတည်းအရာနှင့်အခြားကမ်းလှမ်းထား, သူငါ့ကိုလုပ်ခလစာပေးချေထားပြီး, ငါသည်သူ၏ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်စေခြင်းငှါဤမျှ။ "
18:5 ထိုအခါသူတို့ကသခင်ဘုရားနှင့်တိုင်ပင်ဖို့သူ့ကိုတောင်းပန်, သူတို့ဆောင်ရွက်ခရီးသာယာဝပြောတဲ့လိမ့်မယ်ရှိမရှိသိရန်တတ်နိုင်ဖြစ်အံ့သောငှါဒါ, နှင့်ကိစ္စအောင်မြင်မှုရှိသည်မယ်လို့ရှိမရှိ.
18:6 ထိုမင်းသည်ထိုသူတို့အားတုံ့ပြန်, "ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် Go. ထာဝရဘုရားသည်သင်၏လမ်းကြောင်းကိုအပေါ်မျက်နှာသာနှင့်အတူကြည့်ရှု, သငျတို့သဆောင်ရွက်ဘူးသောခရီးပေါ်မှာ။ "
18:7 ဒါငါးပါးယောက်ျား, အပေါ်သွား, လဲရှမှာရောက်ရှိ. ထိုသူတို့ကလူကိုမြင်လျှင်, ကိုမဆိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲအထဲတွင်အသကျရှငျ, ဇိဒုန်ထုံးစံအတိုငျး, လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ငြိမ်းချမ်းသော, သူတို့ကိုဆန့်ကျင်ဖို့ခဲမည်သူမဆိုရှိခြင်း, တို့နှင့်ကြီးသောစည်းစိမ်နှင့်, နှင့်သီးခြားစီနေထိုင်နေကြ, ဝေးဇိဒုန်မြို့နှင့်လူအပေါင်းတို့ကနေ.
18:8 ထိုသူတို့ကဇောရာမြို့နှင့် Eshtaol မှာသူတို့ရဲ့ညီအစျကိုပြန်ရောက်, သူတို့သည်ပြုသမျှသောအရာကိုအဖြစ်သူတို့ကိုမေးခွန်းထုတ်. ထိုသူတို့ကတုန့်ပြန်:
18:9 "ထလော့. ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့အဖို့တက်ကြစို့. ကျနော်တို့ကမြေယာအလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝနှင့်အသီးအနှံများကြောင်းကိုငါသိမြင်သည် ဖြစ်.. နှောင့်နှေးမနေပါနဲ့; ရှောင်ကြဉ်ကြဘူး. ကျွန်တော်တို့ကိုထွက်သွားကြကုန်အံ့နှင့်ဝင်စား. အဘယ်သူမျှမအခက်အခဲရှိလိမ့်မည်.
18:10 ကျနော်တို့လုံလုံခြုံခြုံနေသောသူတို့ကိုမှမဝင်ရကြဟု, အလွန်ကျယ်ပြန့်ဒေသအတွက်, နှင့်သခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအရပျကိုကယ်နှုတ်မည်, မြေကြီးပေါ်မှာပေါက်သောဘာမှ၏ဆင်းရဲခြင်းမရှိသည့်အတွက်နေရာတစ်နေရာ။ "
18:11 ဆိုတော့, ဒန်အာဗွဟံ၏ရှိသူများထွက်မသတ်မှတ်, ကြောင်း, ဇောရာမြို့နှင့် Eshtaol ထံမှလူခြောက်ရာ, စစ်ဆင်ရေး၏လက်နက်များနှင့်ပြည့်စုံလျက်.
18:12 ထိုအတက်, သူတို့သည်ယုဒနာမတော်ကိုအမှီမှာတည်းခို. ဒါတင်ရာအရပ်ကို, ထိုကာလကနေ, ဒန်စခန်းနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. လက်ခံရရှိ, ထိုသို့နာမတော်ကိုအမှီ၏နောက်ကျောနောက်ကွယ်မှဖြစ်ပါသည်.
18:13 ထိုအရပ်မှ, သူတို့ဧဖရိမ်သည် mount မှကူး. ထိုသူတို့ကမိက္ခာ၏အိမျတျောမှာရောက်ရှိသောအခါ,
18:14 ငါးယောက်ျား, ရှေ့တော်၌လဲရှ၏မြေယာစဉ်းစားရန်ကိုစေလွှတ်ခဲ့သော, သူတို့ညီအစ်ကို၏ကျန်ဖို့ကဆိုပါတယ်: "သင်ကဤအိမ်များတွင်တစ်ခုသင်တိုင်းနှင့် theraphim ရှိကွောငျးကိုသိ, နှင့်သွန်းသောရုပ်တုနှင့်တစ်ဦးရုပ်တု. ထိုသို့ပြုမှသငျသညျနှစ်သက်စေခြင်းငှါအဘယျသို့စဉ်းစားပါ။ "
18:15 ထိုသူတို့ကအနည်းငယ်လွှဲပြီးမှ, သူတို့ကဝေိလူငယ်၏အိမ်တော်သို့ ဝင်., မိက္ခာ၏အိမျ၌အဘယ်သူသည်ခဲ့တယ်. ထိုသူတို့ကငြိမ်းချမ်းစွာစကားနှင့်သူ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီး.
18:16 အခုတော့လူခြောက်ရာ, သူအပေါင်းတို့သည်လက်နက်ခဲ့ကြသည်, တံခါးရှေ့၌ရပ်နေကြ၏.
18:17 ဒါပေမယ့်လူငယ်၏အိမျတျောသို့ဝငျခဲ့သူတို့သည်ရုပ်တုကိုပယ်ရှားဖို့ကွိုး, နှင့်သင်တိုင်း, နှင့် theraphim, နှင့်သွန်းသောရုပ်တုကို. သို့သော်ယဇ်ပုရောဟိတ်တံခါးကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌ရပ်နေ၏, ခြောက်ရာအလွန်အားကောင်းတဲ့လူတို့သညျမနီးမဝေးကွာစောင့်ဆိုင်းနှင့်အတူ.
18:18 ဆိုတော့, သို့ ဝင်. ခဲ့သောသူတို့သည်ရုပ်တုကိုပယ်ရှင်းပြီ, သင်တိုင်း, နှင့် theraphim, နှင့်သွန်းသောရုပ်တုကို. ထိုအခါယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ပြောဆို, "မင်းဘာလုပ်နေလဲ?"
18:19 ထိုသူတို့ကသူ့ကိုတုန့်ပြန်: "အသံတိတ် Be နှင့်သင့်ပါးစပ်ကျော်လက်ချောင်းနေရာ. ထိုအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူလာ, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ဖခင်တစ်ဦးအဖြစ်ယဇ်ပုရောဟိတ်သကဲ့သို့သင်တို့ရှိစေခြင်းငှါ. သင်တို့အဘို့ သာ. ကောင်း၏ရာများအတွက်: တယောက်သောသူ၏အိမျ၌ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်, သို့မဟုတ်ခရိုင်တခရိုင်နှင့်မိသားစုအတွက်ဣသရေလအမျိုး၌?"
18:20 ထိုမင်းသည်ထိုစကားကိုကြားပြီးမှ, သူကသူတို့စကားသဘောတူညီခဲ့. သူသည်ထိုအသင်တိုင်းကိုယူ, နှင့်ရုပ်တုတို့ကို, နှင့်ရုပ်တု, သူသူတို့နှင့်အတူထွက် set.
18:21 ထိုအစဉ်ခရီးသွားလာ, သူတို့လညျးအမြိုးသားအကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်, နှင့်တိရစ္ဆာန်များ, လူအပေါင်းတို့ကြောင်းရှေ့ဆက်သူတို့ထဲကသွားကြဖို့အဖိုးတန်ခဲ့.
18:22 ထိုသူတို့ကမိက္ခာ၏အိမ်သူအိမ်ဝေးခဲ့ကြရသောအခါ, မိက္ခာ၏အိမ်များတွင်နေထိုင်နေသောသူတို့သညျ, အတူတူအော်ဟစ်, သူတို့နောက်သို့လိုက်.
18:23 ထိုသူတို့ကသူတို့၏ကျောနောက်ကွယ်မှအော်စတင်. ထိုသူတို့ကပြန်ကြည့်ရှုမိသည့်အခါ, သူတို့ခာကပြောပါတယ်: "သင်ဘာလိုချင်ပါသလဲ? သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်အော်ဟစ်နေကြတယ်?"
18:24 ထိုမင်းသည်တုန့်ပြန်: "သင်ငါ၏ဘုရားတို့ကိုပယ်ရှားပြီ, အရာကိုယ်အဘို့ငါဖန်ဆင်း, ယဇ်ပုရောဟိတ်, ငါရှိသမြှသော. တဖန်သင်တို့ဆိုကြ, '' ကသင်လိုချင်ဘာလဲ?"'
18:25 ဒန်၏သားကလညျး, "သင်တို့သည်နောက်တဖန်အကြှနျုပျတို့အားပွောသောဂရုစိုက်ပါ, မဟုတ်ရင်အကြမ်းဖက်မှုများများအတွက်စိတ်ကိုအတူယောက်ျားသင်သည်လွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါ, နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်အားလုံးသင့်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားနှင့်တကွပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရလိမ့်မည်။ "
18:26 ဆိုတော့, ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အစတင်နေပြီဖူးသောခရီးကိုဆက်လက်. သို့သော်မိက္ခာ, သူတို့ကသူထက်ပိုမိုအားကောင်းခဲ့ကြသည်ကိုသိမြင်လျှင်, မိမိအိမ်သို့ပြန်ရောက်.
18:27 အခုတော့လူခြောက်ရာယဇ်ပုရောဟိတ်ကိုယူ, ကျနော်တို့အထက်တွင်ဖော်ပြထားမှုအရာတို့ကို, သူတို့လဲရှမြို့သို့သွား၏, တိတ်ဆိတ်ခြင်းနှင့်လုံခြုံတဲ့လူတွေကို, သူတို့ထားအစွန်းသူတို့နှင့်အတူဒဏ်ခတ်. ထိုသူတို့ကမီးနှင့်မြို့သူမြို့သားကိုမီးရှို့.
18:28 အားလုံးကိုစေလွှတ်စစ်ကူမှာအဘယ်သူမျှမများအတွက်, သူတို့သည်လည်းဝေးဇိဒုန်မြို့ကနေနေထိုင်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, သူတို့တစုံတယောက်သောသူသည်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမအသင်းအဖွဲ့သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခဲ့. အခုတော့တမြို့လုံးရဟောဘ၏ဒေသတွင်း၌တည်ရှိပြီးခဲ့သည်. တဖန်ကြောင့်တည်ဆောက်ခြင်း, သူတို့ကနေထိုင်ခဲ့,
18:29 တမြို့ဒန်၏အမည်ကိုခေါ်ဆို, သူတို့ရဲ့ဖခင်၏နာမတော်သည်နှင့်အညီ, ဣသရေလအမျိုး၏မွေးဖွားခဲ့သော, ဒါကြောင့်လဲရှဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်မတိုင်မီသော်လည်း.
18:30 ထိုသူတို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့များအတွက်ရုပ်တုကိုထူထောင်. နှင့်ယောနသန်, ဂေရရှုံ၏သား, မောရှေ၏သား, သူ၏သားတို့နှင့်အတူ, ဒန်အမျိုးသားများတွင်ယဇ်ပုရောဟိတ်, ပင်၎င်းတို့၏သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောနေ့ရက်တိုင်အောင်.
18:31 မိက္ခာ၏ရုပ်တုကိုဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ရှိလောမြို့၌ခဲ့ကွောငျးတစျခုလုံးကိုအချိန်ကာလအတွင်းသူတို့နှင့်အတူကျန်ရစ်. ထိုနေ့ရက်ကာလ၌, ဣသရေလအမျိုး၌ရှင်ဘုရင်မရှိ.
19:1 တယောက်ကရှိခဲ့သည်, လေဝိ, ဧဖရိမ်တောင်ပေါ်ဘေးမှာနေထိုင်နေကြ, သောယုဒသည်ဗက်လင်မြို့ကနေဇနီးယူ.
19:2 သူမသည်သူ့ကိုထွက်ခွာ, သူသည်ဗက်လင်မြို့အတွက်သူမ၏အဘ၏အိမျသို့ပြန်ရောက်. ထိုမိန်းမသည်လေးလအဘို့ကိုယျတျောနှငျ့တည်းခို.
19:3 နှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းနောက်တော်သို့လိုက်, သူနှင့်အတူ ပြန်. ခံရဖို့လို, နှင့်သူမ၏မှကြင်နာစွာစကားပြောဆိုရန်, သူနှင့်အတူသူမ၏နောက်ကျောဦးဆောင်လမ်းပြရန်. ထိုမင်းသည်ထိုသခင်နှင့်အတူကျွန်နှစ်ယောက်မြည်းခဲ့. ထိုမိန်းမသည်သူ့ကိုလက်ခံရရှိ, နှင့်သူမ၏အဘ၏အိမျသို့ထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏. သူ၏အဘ-In-ဥပဒဤအကြောင်းကိုကြားလျှင်, သူ့ကိုမြင်ဘူး, ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်သူ့ကိုတွေ့ဆုံခဲ့.
19:4 ထိုမင်းသည်လူကိုနှုတ်ဆက်ပြီး. ထိုအခါသား-In-ဥပဒသုံးရက်ကသူ့ဖခင်-In-ပညတ်တရား၏အိမျတျော၌တည်းခို, အစာစားခြင်းနှင့်ဖော်ရွေထုံးစံ၌ကိုယ်တော်နှင့်အတူသောက်သုံးခြင်း.
19:5 ဒါပေမယ့်စတုတ္ထနေ့၌, ညဉ့်အခါပေါ်ထွက်လာသော, သူထွက်တင်ထားရန်ရည်ရွယ်. သို့သော်သူ၏ဖခင်-In-ဥပဒအထံတော်၌ကိုင်, သူကသူ့ကိုအားဆို၏, "ပထမဦးစွာအနည်းငယ်မုန့်အရသာ, နှင့်သင့်အစာအိမ်အားကောင်းလာစေရန်, ပြီးနောက်သင်ထွက်ထားရမည်။ "
19:6 ထိုသူတို့ကအတူတူထိုင်, သူတို့စားသောက်. ထိုအခါမိန်းမငယ်၏အဘသည်မိမိသား-In-ဥပဒေကဆိုပါတယ်, "ငါသည်ဤအရပ်၌ယနေ့ဆက်လက်တည်ရှိရန်သင့်ကိုမေး, ကျနော်တို့အတူတကွရာ၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်စေခြင်းငှါဤမျှ။ "
19:7 ဒါပေမဲ့တက်လာပြီ, သူကအထဲက set ကိုစတင်ရည်ရွယ်. သို့သော်လက်ထက်, သူ့ဖခင်-In-ဥပဒအရသူ့ကိုဖိအားပေး, သူ့ကိုသူနှင့်အတူဆက်ရှိနေလုပ်.
19:8 သို့သော်နံနက်လာသောအခါအ, လေဝိသည်မိမိခရီးအတွက်ပြင်ဆင်နေခဲ့သည်. သူ၏အဘ-In-ဥပဒသည်နောက်တဖန်သူ့ကိုပြောဆို၏, "ငါသည်အနည်းငယ်အစားအသောက်ယူရန်သင့်အားတောင်းပန်, နှင့်ခိုင်ခံ့စေ၏ခံရဖို့, အဆိုပါနေ့တိုးသည်အထိ, ထိုနောကျမှ, သငျသညျအထဲကသတ်မှတ်ထားကြလိမ့်မည်။ "ထို့ကြောင့်, သူတို့အတူတူစားရကြ၏.
19:9 ထိုအခါလုလင်ကိုထ, သူကသူ့ဇနီးနှင့်ကျွန်သည်နှင့်အတူသွားလာအံ့သောငှါဒါ. သူ၏အဘ-In-ဥပဒသည်နောက်တဖန်သူ့ကိုအားမိန့်: "ဟုအဆိုပါနေ့ကျဆင်းနေကြောင်းကိုစဉ်းစားပါ, နှင့်ညဦးယံ၌ဆီသို့ချဉ်းကပ်. ငါ့ကိုလည်းနှင့်အတူယနေ့ဆက်လက်တည်ရှိ, ရွှင်လန်းခြင်းအတွက်တစ်ရက်ဖြုန်း. နှင့်မနက်ဖြန်ကိုသင်ထွက်ထားရမည်, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်သို့သွားစေခြင်းငှါဤမျှ။ "
19:10 သူ့သား-In-ဥပဒသည်သူ၏စကားကိုသဘောတူရန်ဆန္ဒရှိမဟုတ်ခဲ့. အဲဒီအစား, သူချက်ချင်းအပေါ်ဆက်လက်, သူချေါဆန့်ကျင်ဘက်ရောက်ရှိလာခဲ့, အခြားသောနာမဖြင့်ယေရုရှလင်မြို့ဟုခေါ်သည်, ဝန်တင်ဆောင်ယျတျောနှငျ့အတူဦးဆောင်နှစ်ခုမြည်း, နှင့်သူ၏အိမ်ထောင်ဖက်.
19:11 ယခုမှာသူတို့ချေါနီးလျက်ရှိသော, ဒါပေမယ့်နေ့ကညဥ့်သို့လှည့်ခဲ့သည်. ထိုအခါကျွန်သည်မိမိသခင်အားဆို၏, "လာ, တောင်းပန်ပါတယ်, ကိုယေဗုသိလူ၏မြို့မှလွှဲပါစေ, ကျနော်တို့အထဲတွင်တည်းခိုခန်းရှာတွေ့စေခြင်းငှါဤမျှ။ "
19:12 မိမိသခင်ထံတော်သို့တုန့်ပြန်: "ငါသည်တကျွန်းတနိုင်ငံ၌လူဦးမြို့တံခါးအထဲသို့ဝင်မည်မဟုတ်, ဣသရလေအမြိုးသားမဟုတ်သော. အဲဒီအစား, ကျွန်မအဖြစ်ဝေးဂိဗာမြို့အဖြစ်ကူးပါလိမ့်မယ်.
19:13 ထိုအခါငါအဲဒီမှာရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါပြီမည်သည့်အခါ, ကျွန်တော်ထိုအရပျ၌အအိပ်ပါလိမ့်မယ်, သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးရာမမြို့၌တည်၏။ "
19:14 ထို့ကြောင့်, သူတို့ချေါခွငျးအားဖွငျ့လွန်, နှင့်အပေါ်ဆက်လက်, သူတို့ခရီးစတငျခဲ့. သူတို့နေရာဂိဗာမြို့အနီးသောအခါဒါပေမယ့်နေရောင်သူတို့အပေါ်မှာကျသို့သှား၏, ဗင်္ယာမိန်အမျိုး၏အရာဖြစ်ပါသည်.
19:15 ဒီတော့သူတို့ကလမ်းကြောင်းပြောင်း, သူတို့အဲဒီမှာအိပ်စေခြင်းငှါဒါ. ထိုသူတို့ကဝင်ကြ၏ပြီးမှ, သူတို့ကမြို့တော်လမ်းမ၌ထိုင်ခဲ့ကြ. အဘယ်သူမျှမအဘို့ထိုသူတို့ဧညျ့ပေးဖို့ဆန္ဒရှိခဲ့တာ.
19:16 ထိုအခါ, သူတို့အနေနဲ့လူဟောင်းကိုမွငျလြှငျ, အဆိုပါလယ်ပြင်နှင့်ညဦးယံ၌မိမိလုပ်ရာမှပြန်လာ, သူဧဖရိမ်တောင်ပေါ်ကနေလည်းဖြစ်ခဲ့သည်, သူဂိဗာမြို့၌တကျွန်းတအဖြစ်နေထိုင်နေတယ်. ကြောင်းဒေသ၏လူတို့သညျဗင်ျယာမိ၏သားဖြစ်ကြ၏.
19:17 ထိုအခါလူဟောင်းကို, သူ့မျက်စိချီ, လူသည်မြို့တော်လမ်းမ၌သူ၏အထုပ်နှင့်အတူထိုင်လျက်ကိုမြင်လျှင်. သူသညျအထံတော်ကပြောပါတယ်: "သင်ဘယ်အရပ်ကလာကြပါပြီ? ထိုအသင်ဘယ်မှာသွားကြသည်?"
19:18 သူကသူ့ကိုပြန်ပြော: "ကျနော်တို့ကယုဒအမျိုးသည်ဗက်လင်မြို့ကနေထွက်မသတ်မှတ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရပ်မှခရီးသွားနေကြတယ်, ဧဖရိမ်တောင်ပေါ်အနားမှာအရာဖြစ်ပါသည်. ထိုအရပ်မှကျနော်တို့ဗက်လင်မြို့သို့သွား၏, ယခုအခါငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်သို့သွားကြ. ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမကသူ၏အိမ်ခေါင်မိုးအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလက်ခံရရှိရန်ဆန္ဒရှိ.
19:19 ကျနော်တို့မြည်းဘို့စာကျွေးခြင်းအဖြစ်ကောက်ရိုးများနှင့်မြက်ပင်များ, ကျနော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်မုန့်နှင့်စပျစ်ရည်ကိုများ, နှင့်သင့်ကျွန်မ၏ငါနှင့်အတူသူသည်ကျွန်အဘို့အ. ကျနော်တို့တည်းခိုခန်း မှလွဲ. ဘာမျှမကင်းမဲ့နေသည်။ "
19:20 ထိုအခါလူဟောင်းကိုအထံတော်သို့တုန့်ပြန်: "ငွိမျးခမျြးသငျနှငျ့အတူဖြစ်. ငါလိုအပ်သမျှသောသူတို့ပေးသွားမှာပါ. သာ, တောင်းပန်ပါတယ်, လမ်းပေါ်မှာနေပါဘူး။ "
19:21 မိမိအိမျသို့သူ့ကိုဦးဆောင်, မိမိမြည်းဖို့ကြှေးလေ၏. ထိုသူတို့ကသူတို့၏ခြေကိုဆေးပြီးမှ, သူဟာပွဲသို့သူတို့နှင့်အတူလက်ခံရရှိ.
19:22 ထိုသူတို့ကစားသောက်ခဲ့ကြစဉ်, နှင့်ခရီး၏လုပ်အားပြီးနောက်အစားအစာနှင့်သောက်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အလောင်းများကိုလန်းဆန်းခဲ့ကြသည်, မွို့သားတို့သညျ, အဓမ္မ၏သား (ကြောင်း, ထမ်းဘိုးကိုထမ်းခြင်းမရှိဘဲ), လူဟောင်း၏အိမ်တော်သညျ လာ. ဝိုင်းရံ. ထိုသူတို့ကတံခါးနားမှာခေါက်စတင်, အိမ်တော်သည်အရှင်ထွက်ခေါ်ဆို, ဟု, "သင်၏အိမ်သူအိမ်သားထဲသို့ဝင်သောသူသည်အထဲကယူခဲ့, ငါတို့သည်သူ့ကိုအလှဲသုံးစားစေခြင်းငှါဤမျှ။ "
19:23 ထိုအခါအဘိုးကြီးကသူတို့ကိုမှထွက် သွား., နှင့်ဟုသူကဆိုသည်: "ကိုရွေးချယ်မထားပါနဲ့, ကိုညီအစျ, ဤဆိုးသောအလုပျဖို့ရွေးချယ်ကြဘူး. ဤသူသညျအကြှနျုပျ၏ဧညျ့မှထဲသို့ဝင်တော်မူပြီ. ထိုအသင်ဤမရှိသောငြိမ်းရမယ်.
19:24 ကျွန်မသတို့သမီးကညာများ, နှင့်ဤသူသည်အိမ်ထောင်ဖက်ရှိပါတယ်. ငါသည်သင်တို့သူတို့ကိုထွက်ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်, သူတို့ကိုသင် debase ဖြစ်နိုင်သည်နှင့်သင့်တပ်မက်သောစိတ်ကျေနပ်အောင်စေခြင်းငှါဒါ. သာ, တောင်းပန်ပါတယ်, ထိုလူအပေါ်သဘောသဘာဝဆန့်ကျင်ကဒီရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ကြဘူး။ "
19:25 ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူ၏စကားကိုသဘောတူရန်ဆန္ဒရှိကြဘူး. ဒါကြောင့်လူကို, ဒီပိုင်းခြား, သူတို့ကိုအားမိမိအိမ်ထောင်ဖက်ကထွက်ဦးဆောင်, သူကသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုမှသူမ၏လက်သို့အပ်. ထိုသူတို့ကတစ်ခုလုံးကိုညသူမ၏စော်ကားပြီးမှ, သူတို့နံနက်ယံ၌သူမ၏ဖြန့်ချိ.
19:26 သို့သော်ထိုမိန်းမသည်, မှောင်မိုက်ကိုနောက်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ခံခဲ့ရသည်အဖြစ်, အိမ်၏အိမ်တံခါးဆီသို့ရောက် လာ. ,, သူမ၏သခင်အရှင်တည်းခိုခဲ့သည်ဘယ်မှာ, အဲဒီမှာသူမပြပ်ဝပ်.
19:27 နံနက်ရောက်လာသောအခါ, ထိုလူသည်ထ, သူတံခါးကိုဖွင့်လှစ်, သူကစတင်ခဲ့ကွောငျးခရီးဖြည့်စွက်စေခြင်းငှါဒါ. ထိုအခါ, မိမိအအိမ်ထောင်ဖက်တံခါးရှေ့၌မုသာစကားကိုခဲ့သည်, သူမ၏လက်ခုံမှထုတ်သို့ရောက်ရှိနှင့်အတူ.
19:28 ထိုမင်းသည်, သူမအနားယူခဲ့စဉ်းစား, သူမ၏ဖို့ပြောပါတယ်, "ထတော့, သူမမျှမတုန့်ပြန်ပေးခဲ့တယ်ကတည်းက။ ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းလျှောက်ကြကုန်အံ့ "ဒါပေမယ့်, သူမသေကြောင်းကိုသဘောပေါက်, သူကသူမ၏ချီ, မိမိမြည်းပေါ်မှာသူမ၏တင်ကြ၏, မိမိအိမျသို့ပွနျသှား.
19:29 ထိုမင်းသည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမှ, သူကဓားချီ, သူသည်အပိုင်းပိုင်းသို့သူ့ဇနီး၏အသေကောင်ကိုဖြတ်, သူမ၏သေအရိုးတို့နှင့်, တကျိပ်နှစ်ပါးသောအရပ်သို့. ထိုမင်းသည်ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အစိတ်အပိုင်းများသို့အပိုင်းပိုင်းကိုစလှေတျ.
19:30 ထိုအသီးအသီးကဤရူပါရုံကိုမြင်သောအခါ, သူတို့အတူတူအော်ဟစ်ခဲ့ကြ, "ထိုသို့သောအမှုကိုဣသရေလအမျိုး၌ပြုသောအမှုထားပြီးဘယ်တော့မှမ, ငါတို့ဘိုးဘေးများကိုအဲဂုတ္တုကနေတက်ပြီသော နေ့မှစ., ပင်ပစ္စုပ္ပန်အချိန်. ဝါကျယူဆောင်ပါစေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုသင့်၏အဘယ်အရာကိုဘုံထဲမှာဆုံးဖြတ်ပါစေ။ "
20:1 ဒါသည်ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်တယောက်သောသူကဲ့သို့အထွက် သွား., ဒန်ထံမှဗေရရှေဘမှ, ဂိလဒ်ပြည်မှနှင့်အတူ, သူတို့မှာစုဝေး, ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌, မိဇပါမြို့မှာ.
20:2 လူများအပေါင်းတို့နှင့်တကွဗိုလ်တို့သည်, ဣသရေလအမျိုး၏နှင့်တမျိုး, ဘုရားသခင်၏လူတို့၏အစည်းဝေးပွဲအဖြစ်ခေါ်ယူ, စစ်တိုက်ခြင်းငှါလေးသိန်းခြေလျင်စစ်သား.
20:3 (သို့သော်ထိုသို့ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်မိဇပါမြို့တက်ပြီခဲ့ကွောငျးဗင်္ယာမိန်အမျိုး၏သားထံမှဝှက်ထားမခံခဲ့ရပါဘူး။) ထိုအခါလေဝိလူ, အသတ်ခံရသောအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ခင်ပွန်း, ကြီးမြတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ပုံကိုဒါကြောင့်မေးခွန်းထုတ်ခံရ,
20:4 တုန့်ပြန်: "ငါသည်ဗင်္ယာမိန်အမျိုးဂိဗာမွို့သို့သှားကွ၏, ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်အတူ, ငါအရပျမှလမ်းကြောင်းပြောင်း.
20:5 ထိုအခါ, မွို့သားတို့သညျ, ညမှာ, ငါတည်းခိုခဲ့သည့်အတွက်အိမျကိုဝိုငျး, ငါ့ကိုသတ်အံ့သောငှါရည်ရွယ်. ထိုသူတို့ကအဆုံး၌သူမသေသောတပ်မက်ခြင်း၏ထိုကဲ့သို့သောတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဒေါသအမျက်နှင့်ငါ၏အဇနီးစော်ကား.
20:6 နှင့်သူမ၏တက်တာ, ငါသည်အပိုင်းပိုင်းသို့သူမ၏ဖြတ်, ငါသည်လည်းသင်တို့၏အပိုင်အပေါငျးတို့သနယ်နိမိတ်ထဲသို့အစိတ်အပိုင်းများကိုစလှေတျ. ဘယ်တော့မှမှီထိုကဲ့သို့သော nefarious ရာဇဝတ်မှုခဲ့သည်, နှင့်ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောအပြစ်ဖြေ, ဣသရေလအမျိုး၌ကျူးလွန်ခဲ့သော.
20:7 သင်ဒီမှာအားလုံးပစ္စုပ္ပန်များမှာ, ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်. သင်သည်အဘယ်သို့ပြုရမည််၏ပိုင်းခြား။ "
20:8 လူအပေါင်းတို့နှင့်, ရပ်တည်မှု, တယောက်သောသူ၏စကားလုံးနှင့်အတူလျှင်အဖြစ်တုန့်ပြန်: "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရွက်ဖျင်တဲသို့ပြန်လာရမည်မဟုတ်, မဟုတ်သလိုမည်သူမဆိုမိမိအိမျသို့ဝငျရကြလိမ့်မည်.
20:10 ဣသရေလအမျိုးအနွယ်အပေါင်းတို့ထဲကနေတရာထဲကလူတကျိပ်ကို select ရကြလိမ့်မည်, တစျထောငျထဲကတရာ, တသောင်းထဲကတစျထောငျ, သူတို့ကစစ်တပ်အဘို့အထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများသယ်ယူပို့ဆောင်စေခြင်းငှါဒါ, ကျနော်တို့ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားနေရာဂိဗာမြို့ကိုတိုက်နိုင်ပါလိမ့်မည်သို့မှသာ, ထိုသို့ထိုက်အဖြစ်က၎င်း၏ရာဇဝတ်မှုများအတွက်ကပြန်ဆပ်ဖို့။ "
20:11 နှင့်ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်မြို့ဆန့်ကျင်ခေါ်ယူ, တယောက်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်, တဦးတည်းစိတ်နှင့်တဦးတည်းအကွံဉာဏျနှင့်အတူ.
20:12 ထိုသူတို့ကဗင်္ယာမိန်အမျိုးတစ်ခုလုံးကိုအနွယ်ထံသို့သံတမန်ကိုစေလွှတ်, အဘယ်သူသည်ဟုဆိုသည်: "အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောဒုစရိုက်အပြစ်သည်သင်တို့တွင်ရှာတွေ့ထားပြီ?
20:13 ဂိဗာမွို့သားတို့သညျအပျတျောမူ, ဒီ deplorable လုပ်ရပ်ကျူးလွန်ကြသူ, သူတို့အသေခံစေခြင်းငှါဒါ, ဒါဆိုးယုတ်။ ကွာဣသရေလအမျိုးမှယူစေခြင်းငှါ "ထိုသူတို့ကမိမိတို့၏ညီအစျကို၏အမိန့်ကိုနားထောင်ဖို့ဆန္ဒရှိကြဘူးကြောင်း, ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်.
20:14 အဲဒီအစား, သူတို့ရဲ့တွေအများကြီးပါသောသူအပေါင်းတို့မြို့ကြီးများထဲက, သူတို့နေရာဂိဗာမြို့မှာကျင်းပ, သူတို့အကူအညီဆောင်ကြဉ်းအံ့သောငှါဒါ, ဒါသူတို့ကဣသရေလအမျိုး၏တစ်ခုလုံးကိုလူတို့တဘက်၌ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုအံ့သောငှါ.
20:15 နှင့်ဗင်္ယာမိန်လူနှစ်သောင်းငါးထောင်ထားဘေးသို့ဆွဲငင်သောသူထံမှရှိတွေ့ရှိခဲ့သည်, ဘေးဖယ်ဂိဗာမြို့သားအနေဖြင့်,
20:16 ခုနစ်ရာအလွန်အားကောင်းတဲ့လူတို့သညျသူမြားခဲ့ကြသည်, လက်ဝဲလက်နှင့်တိုက်ပွဲအဖြစ်လက်ျာလက်တော်နှင့်အတူ, နှင့်တစ်ဦးလောက်လွှဲထဲကနေကျောက်ခဲတို့ကို ချ. ဒါတိကျစွာသူတို့ပင်ဆံပင်ဒဏ်ခတ်ပေးနိုင်ခဲ့, နှင့်ကျောက်လမ်းကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမအားဖွငျ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှလက်လွတ်မယ်လို့.
20:17 ထိုအခါလွန်း, ဗင်္ယာမိန်အမျိုး၏သားနှင့်ကင်းဣသရေလအမျိုး၏လူတို့တွင်, အဲဒီမှာဓားကိုဆွဲငင်နှင့်သူလေးသိန်းစစ်တိုက်ဘို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်တွေ့ရှိခဲ့သည်.
20:18 ထိုသူတို့ကထညျဘုရားသခငျ၏အိမျသို့သှား, ကြောင်း, ရှိလောရွာမှ. ထိုသူတို့သညျဘုရားသခငျတိုင်ပင်, ထိုသူတို့ကပြောပါတယ်, "သူကားအဘယ်သူဖြစ်ကြလိမ့်မည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်တပ်တွင်, ဗင်္ယာမိန်အမျိုး၏သားဆန့်ကျင်ဆန့်ကျင်ဘက်ရန်ပထမဦးဆုံး?"ထိုအခါထာဝရအရှင်သူတို့ကိုတုံ့ပြန်, "ယုဒအမျိုးသည်သင်၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါစေ။ "
20:19 ဣသရေလအမျိုး၏ထိုခဏခြင်းတွင်အမြိုးသားတို့, နံနက်ယံ၌ထ, ဂိဗာမြို့အနီးကိုဖန်ဆင်းစခန်း.
20:20 ထိုအရပ်၌ထံမှထွက် setting ဗင်္ယာမိန်တိုက်, သူတို့သည်မြို့ကိုမချေမှုန်းရေးစတင်.
20:21 ဗင်္ယာမိန်အမျိုးနှင့်အမြိုးသားတို့, ဂိဗာမြို့ကနေထွက်ခွာ, ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်အနေဖြင့်ကွပ်မျက်နှစ်သောင်းနှစ်ထောင်ယောက်ျား, ထိုနေ့.
20:22 ဣသရေလအမျိုး၏တစျဖနျအမြိုးသားတို့, အစွမ်းသတ္တိနှင့်အရေအတွက်ကနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ယုံကြည်ကိုးစား, နိုင်ရန်အတွက်၎င်းတို့၏တပ်များသတ်မှတ်ထား, သူတို့မရောက်မီဆန့်ကျင်ဘက်ရာနေရာတစ်ခုတည်း.
20:23 ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးသူတို့လည်းတက်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ငိုကြွေးကြ၏, ပင်သည်ညဦးတိုင်အောင်. ထိုသူတို့ကသူ့ကိုတိုင်ပင်ဟု, "ငါသည်ထွက် သွား. ဆက်လက်သင့်သ, ဗင်္ယာမိန်အမျိုး၏သားဆန့်ကျင်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသကဲ့သို့, ငါ့ညီအစ်ကိုတို့, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ပါ?"ထိုသူတို့အားတုံ့ပြန်, "သူတို့တဘက်၌ Ascend, နှင့်ရုန်းကန်ဆောင်ရွက်ရန်။ "
20:25 ဗင်္ယာမိန်အမျိုး၏သားဂိဗာမြို့တံခါးမှထွက်ကွဲ. ထိုအခါသူတို့ကိုတွေ့ဆုံ, ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အထားဘေးသို့ဆွဲငင်သူကိုလူတသောင်းရှစ်ထောင်ယောက်ျားကဆင်းရိုက်သောသူတို့တဘက်၌ထိုကဲ့သို့သောပျော်ပါးသေသတ်ခြင်းငှါဖန်ဆင်းတော်မူသော.
20:26 ရလဒ်အနေဖြင့်, ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်သားတို့သညျဘုရားသခငျ၏အိမျသို့သှား, နှင့်ထိုင်, သူတို့ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ငိုကြွေးကြ၏. ထိုသူတို့သည်ညဦးတိုင်အောင်ထိုနေ့ရက်သည်အစာရှောင်, သူတို့အထံတော်သို့ဿဟာယယဇ်၏မီးရှို့ခြင်းနှင့်သားကောင်များကိုကမ်းလှမ်း.
20:27 ထိုသူတို့ကသူတို့ရဲ့ပြည်နယ်အကြောင်းကိုမေးလြှောကျလြှငျ,. ထိုအချိန်မှာ, သခင်ဘုရား၏ပဋိညာဉ်သေတ္တာတော်အရပျ၌ရှိ၏.
20:28 နှင့်ဖိနဟတ်, ဧလာဇာ၏သား, အာရုန်၏သား, အိမ်သူအိမ်သား၏ပထမဦးဆုံးကိုအစိုးရသောမင်းခဲ့သည်. ဆိုတော့, ထိုသူတို့သည်သခင်ဘုရားနှင့်တိုင်ပင်, ထိုသူတို့ကပြောပါတယ်, "ကျနော်တို့ဗင်္ယာမိန်အမျိုး၏သားဆန့်ကျင်စစ်တိုက်ရာတွင်ထွက်သွားဆက်လက်သင့်သ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီအစ်ကိုတွေကို, သို့မဟုတ်ကျွန်တော်ငြိမ်းသင့်တယ်?"ထိုအခါထာဝရအရှင်ကလညျး: "Ascend. မနက်ဖြန်အတွက်, ငါသည်သင်တို့၏လက်သို့သူတို့ကိုငါအပ်မည်။ "
20:30 ထိုသူတို့ကဗင်္ယာမိန်အမျိုးတဘက်၌တတိယအကြိမ်၎င်းတို့၏စစ်တပ်နှုတ်ဆောင်ခဲ့, သူတို့ကပထမနှင့်ဒုတိယအကြိမ်အပေါ်ပြုသမျှအတိုင်း.
20:31 သို့သော်ဗင်္ယာမိန်အမျိုး၏သားကိုထပ်မြို့မှရဲရငျ့စှာထှကျပြင်းစွာတိုက်. ထိုသူတို့၏ရန်သူများကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြပြီးကတည်းက, သူတို့တစ်ဦးရှည်လျားသောလမ်းကို လိုက်., သူတို့ထိုသူအချို့တို့သည်အနာသို့မဟုတ်ကိုသတ်အံ့သောငှါဒါ, သူတို့ကပထမနှင့်ဒုတိယရက်ပြုသမျှအတိုင်း. ထိုသူတို့နှစ်ဦးကိုလမ်းခရီးတစ်လျှောက်သူတို့ရဲ့ကျောခိုင်း, ဗေသလမြို့ဆီသို့သူတို့ကိုဆောင်ခဲ့တဦးတည်း, ဂိဗာမြို့ဆီသို့အခြား. ထိုသူတို့ကသုံးဆယ်ခန့်ယောက်ျားဒဏ်ခတ်.
20:32 အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်မိမိတို့မတိုင်မီပြုသမျှအတိုင်းသူတို့ပြန်ကျသွားခဲ့ထင်. သို့သော်မယ့်အစား, ကျွမ်းကျင်စွာပျံသန်း feigning, သူတို့သည်မြို့ကနေသူတို့ကိုပယ်ဆွဲရန်အစီအစဉ်တစ်ခုဆောင်ရွက်, နှင့်ထွက်ပြေးပုံအားဖြင့်, အထက်ပါဖော်ပြထားလမ်းကြောင်းတလျှောက်ကသူတို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြရန်.
20:33 ဒါသည်ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့, သူတို့ရဲ့ရာထူးကနေထ, နိုင်ရန်အတွက်၎င်းတို့၏တပ်များသတ်မှတ်ထား, Baaltamar ဟုခေါ်ဝေါ်သောအရပ်၌ရှိ. အလားတူပဲ, တမြို့လုံးဝိုင်းရံသောကင်းတပ်စတင်ခဲ့သည်, နည်းနည်းချင်းစီ, မိမိတို့ကိုယ်ကိုထုတ်ဖေါ်ဖို့,
20:34 နှင့်မြို့၏အနောက်ဘက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်သို့တိုးရန်. ထို့အပြင်, ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်မှအခြားလူတသောင်းမြို့သူမြို့သားတို့နှင့်အတူတစ်ပဋိပက္ခလှုံ့ဆျောခဲ့ကြ. ထိုအခါစစ်ဗင်္ယာမိန်အမျိုး၏သားဆန့်ကျင်မိုးသည်းထန်စွာကြီးပြင်း. ထိုသူတို့ကသဘောပေါက်ခဲ့ပါဘူး, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်နှစ်ဖက်ပေါ်, အသေခံအံ့ဆဲဆဲခဲ့.
20:35 ထိုအခါထာဝရအရှင်ဣသရလေအမြိုးသားတို့၏ရှေ့တော်၌သူတို့အားဒဏ်ခတ်, သူတို့အသေသတ်ခြင်းကို, ထိုနေ့, နှစ်ဆယ်ငါးထောငျသူတို့ထဲက, တရာယောက်ျားနှင့်အတူ, အားလုံးစစ်သူရဲတို့နှင့်ဓားကိုဆွဲငင်သောသူတို့အား.
20:36 သို့သော်ဗင်္ယာမိန်အမျိုး၏သား, သူတို့ကဆီးအတားမရှိစေခြင်းငှါမိမိကိုယ်ကိုမြင်ကြပြီးမှ, ထွက်ပြေးဖို့စတင်ခဲ့သည်. ဣသရလေအမြိုးသားတို့ကဒီပိုင်းခြား, သူတို့ကိုမပြေးဖို့အခန်းတစ်ခန်းကိုပေး၏, သူတို့ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်သောကင်းတပ်ရောက်ရှိအံ့သောငှါဒါ, အရာသူတို့သည်မြို့အနီးနေရာယူထားခဲ့သည်.
20:37 ထိုသူတို့ပုန်းခိုရာမှရုတ်တရက်ထပြီးမှ, ဗင်္ယာမိန်အမျိုး၏သူတွေကိုသူတို့ကိုခုတ်လှဲသောသူတို့အား၎င်းတို့၏ကျောလှည့်ခဲ့, သူတို့သည်မြို့ထဲသို့ဝင်, သူတို့ထားအစွန်းနှင့်အတူကလှုပ်ခတ်.
20:38 အခုတော့ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်သူတို့ကင်းထိုးတပ်စွဲတော်မူသောသူတို့အားနိမိတ်လက္ခဏာကိုပေးထားခဲ့, သောကြောင့်, သူတို့သည်မြို့သိမ်းဆည်းရမိပြီးမှ, သူတို့တစ်တွေမီးထွန်းညှိမယ်လို့, နှင့်မီးခိုးများကမြင့်မားတဲ့အပေါ်, သူတို့သည်မြို့ကိုမသိမ်းပိုက်ခဲ့ကွောငျးကိုပြသမယ်လို့.
20:39 ပြီးနောက်, ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်စစ်တိုက်ခြင်းငှါကာလအတွင်းကဒီနိမိတ်လက္ခဏာကိုသိရှိ (ဗင်္ယာမိန်အမျိုး၏သားကိုသူတို့ပြေးကြောင်းထင်ခဲ့မှုအတွက်, သူတို့အခိုငျအမာသူတို့ကိုလိုက်, သူတို့ရဲ့စစ်တပ်ကနေသုံးဆယ်ယောက်ျားခုတ်).
20:40 ထိုသူတို့ကဤမြို့မှမီးခိုးတစ်မှတ်တိုင်တူတစ်ခုခုကိုမြင်လျှင်. အလားတူပဲ, ဗင်္ယာမိန်ခရိုင်, ပြန်ရှာဖွေနေ, တမြို့သိမ်းပိုက်ခဲ့သတိပြု, မီးတောက်သည်မြင့်သောသယ်ဆောင်လျက်ရှိကြ၏.
20:41 ရှေ့တော်မှပြေးဟန်ဆောင်ခဲ့သောထို, သူတို့မျက်နှာလှည့်, ပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်သူတို့ကိုတား. ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားတို့သညျဤရူပါရုံကိုမြင်သောအခါ, သူတို့လေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက်၎င်းတို့၏ကျောလှည့်,
20:42 သူတို့သဲကန္တာရ၏လမ်းဆီသို့သွားကြဖို့စတင်, ရန်သူကိုလည်းထိုအရပျမှသူတို့ကိုလိုက်ရှာနှင့်အတူ. ထို့အပြင်, တမြို့လုံးကိုမီးရှို့ခဲ့ပြီးတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး.
20:43 ဒါကြောင့်သူတို့ကရန်သူများကိုသဖြင့်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ခုတ်လှဲခဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့, မသေဘို့ကိုမဆိုသက်သာရှိခဲ့. သူတို့ဟာနေရာဂိဗာမြို့၏မြို့အရှေ့ပိုင်းအခြမ်းအပေါ်ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ခတ်ခဲ့သည်.
20:44 ယခုနေရာတစ်ခုတည်းအသေသတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်တဲ့သူတွေကိုလူတသောင်းရှစ်ထောင်လူဖြစ်ကြ၏, အားလုံးအလွန်အားကောင်းတဲ့တိုက်လေယာဉ်များ.
20:45 ဗင်္ယာမိန်အမျိုးကျန်ရစ်တဲ့သူတွေကိုမြင်ဖူးကြသောအခါ, သူတို့သည်တောသို့ပြေး. ထိုသူတို့ကရိမ္မုန်အမည်ရှိသောကျောက်ကိုမျက်နှာသို့ခရီးသွားလာခဲ့ကြသည်. ကြောင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက်လည်း, ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းညွန်အတွက်ကြဲခဲ့ကြသူတို့တွင်, သူတို့ငါးထောင်တို့ကိုသတ်. ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ပိုမိုအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားသော်လည်း, သူတို့ကိုလိုက်ဆက်လက်, ပြီးတော့သူတို့ကအသေခံရန်နောက်ထပ်နှစ်ထောင်ထား.
20:46 ဒါကြောင့်သူတို့အပေါငျးတို့သဗင်္ယာမိန်ခရိုင်ထဲကနေအသေခံလေပြီခဲ့ကြသည်သောဖြစ်ပျက်, အရပ်ရပ်တို့၌, နှစ်ဆယ်ငါးထောင်တိုက်လေယာဉ်များဖြစ်ကြသည်, စစ်တိုက်သွားရန်အလွန်ဆန္ဒရှိ.
20:47 ဒီတော့အဲဒီမှာမှလွတ်မြောက်ရန်လျက်တောသို့ပြေးနိုင်ခဲ့ကြတယ်သူကိုဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားလူခြောက်ရာ၏တစ်ခုလုံးကိုအရေအတွက်ကိုကနေရှိနေဆဲ. ထိုသူတို့ကရိမ္မုန်၏ကျောက်နားမှာအခြေချ, လေးလကြာ.
20:48 သို့သော်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်, ပြန်လာ, ကိုထားနှင့်မွို့၌ကနျြရစျသောသူအပေါင်းတို့ကိုဒဏ်ခတ်ခဲ့, လူတို့သညျ မှစ. တိရစ္ဆာန်များမှ. ဗင်္ယာမိန်အမျိုးမြို့ရှိသမျှနှင့်ကျေးရွာများလောင်မီးလျှံနှင့်အတူစားသုံးခဲ့ကြ.
21:1 ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်မိဇပါမြို့ကိုမှာကျိန်ဆိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်, ထိုသူတို့ကပြောပါတယ်, "ကျွန်တော်တို့ကိုအဘယ်သူမျှဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားတစ်ဦးဇနီးအဖြစ်သူ၏သမီးကိုပေးရမည်။ "
21:2 ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ရှိလောမြို့၌ဘုရားသခင်၏အိမျသို့သှား. ညဦးတိုင်အောင်သူ့မျက်မှောက်၌ထိုင်လျက်, သူတို့အသံကို, သူတို့ငိုစတင်ခဲ့သည်, အလွန်ကြီးစွာသောမြည်တမ်းနှင့်အတူ, ဟုဆို,
21:3 "အဘယ်ကြောင့်, အိုထာဝရဘုရား, ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်, ဤဆိုးသောကိုယ်တော်၏လူတို့တှငျအဖြစ်ပျက်ခဲ့, ဒါကြောင့်ဤနေ့ခရိုင်တခရိုင်ကွာငါတို့မှခေါ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း?"
21:4 ထိုအခါ, နက်ဖြန်နေ့၌ပထမဦးဆုံးအလင်းမှာမြင့်တက်, သူတို့အဘို့ယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်လေ၏. ထိုသူတို့ကအဲဒီမှာဿဟာယယဇ်၏မီးရှို့ခြင်းနှင့်သားကောင်များကိုကမ်းလှမ်း, ထိုသူတို့ကပြောပါတယ်,
21:5 "အဘယ်သူသည်, ဣသရေလအမျိုး၏အနွယ်အပေါင်းတို့ထဲက, သခင်ဘုရား၏ဗိုလ်ခြေနှင့်အတူတက်ခဲ့ဘူး?"သူတို့တစ်တွေကြီးစွာသောကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုနှင့်ကိုယ်ကိုခညျြနှောငျခဲ့သည်, သူတို့မိဇပါမြို့မှာသောအခါ, အကြင်သူသည်ပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်ခဲ့ကွပ်မျက်မည်ဖြစ်ကြောင်း.
21:6 ဣသရေလအမျိုး၏ထိုအမြိုးသားတို့သ, သူတို့ရဲ့ညီဗင်္ယာမိန်ကျော်နောင်တတရားမှဦးဆောင်ခံတော်မူပြီးမှ, ပြောစတင်ခဲ့သည်: "တစျခုအနွယ်ကွာဣသရေလအမျိုးမှယူထားပါတယ်.
21:7 ဘယ်အရပ်ကသူတို့မယားတို့ကိုခံရကြလိမ့်မည်? ငါတို့ရှိသမျှသည်ကျွန်တော်သူတို့ကိုငါတို့သည်ကိုယ်သမီးကိုမပေးမညျဖွစျကွောငျးဘုံကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပြီ။ "
21:8 ဒီအတွက်ကြောင့်, သူတို့ကဆိုပါတယ်, "အဲ့ဒီ့မှာဘယ်သူရှိလဲ, ဣသရေလအမျိုး၏အနွယ်အပေါင်းတို့ထဲက, ကြောင်းမိဇပါမြို့မှာထာဝရဘုရားအားတက်ဘူး?"ထိုအခါ, ယာဗက်-ဂိလဒ်ပြည်သားတို့ကိုကြောင်းတပ်မတော်အကြားဖြစ်ရပြီမဟုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်.
21:9 (အလားတူပဲ, သူတို့ရှိလောမြို့၌ခဲ့သည့်အခါကာလ၌, မဟုတ်တဦးတည်းသူတို့ထဲကရှိတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။)
21:10 ဒါကြောင့်သူတို့ကတသောင်းအလွန်အားကောင်းတဲ့လူကိုစေလွှတ်, သူတို့ညွှန်ကြား, ဟုဆို, "ထားအစွန်းနှင့်အတူယာဗက်-ဂိလဒ်ပြည်သားတို့ကိုသွားပြီးဒဏ်ခတ်, သူတို့ရဲ့ဇနီးနှင့်သူငယ်များအပါအဝင်။ "
21:11 ဤရွေ့ကား, သင်သည်အဘယ်သို့ပြုရမည််၏ဖြစ်ရလိမ့်မည်: အထီးကျား၏ "လူတိုင်း, အဖြစ်လူတို့သညျသိသောသူအပေါင်းတို့သည်မိန်းမများ, အသေသတ်ခြင်းကိုခံရမည်. သင်တို့မူကားရန်ရယူထားရမည်ပျိုကညာ။ "
21:12 လေးရာရှိအပျိုကညာ, တစ်ဦးယောက်ျား၏အိပ်ရာကိုမသိရခဲ့သူ, ယာဗက်-ဂိလဒ်ပြည်ရာမှတွေ့ရှိခဲ့သည်. ထိုသူတို့ကရှိလောမြို့၌တပ်သူတို့ကိုပို့ဆောင်, ခါနာန်ပြည်၌.
21:13 ထိုသူတို့ကဗင်္ယာမိန်အမျိုး၏သားထံသို့သံတမန်ကိုစေလွှတ်, ရိမ္မုန်၏ကျောက်နားမှာသူကိုခဲ့ကြသည်, သူတို့ညွှန်ကြား, သူတို့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်သူတို့ကိုလက်ခံရယူမယ်လို့ဒါ.
21:14 ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားတို့သညျသှား, ထိုအချိန်မှာ, နှင့်မယားများကိုပြည်ယာဗက်သည်ဂိလဒ်၏သမီးထံမှသူတို့ကိုပေးခဲ့. ဒါပေမယ့်အခြားသူတွေမတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်, သူတို့တစ်တွေဆင်တူထုံးစံ၌တောင်းခြင်းငှါအဘယ်သူကို.
21:15 ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်အလွန်ဝမျးနညျးခဲ့, သူတို့သည်ဣသရေလအမျိုးထဲကတစျခုအနွယ်ကိုဖျက်ဆီးဘို့ penance လုပ်ခဲ့တယ်.
21:16 ထိုအမွေးဖွားများကသူတို့အား သာ. ကြီးမြတ်ကပြောသည်: "ကျနော်တို့ကျန်ရှိသောနှငျ့အဘယျသို့ပွုရပါမညျ, မယားတို့ကိုလက်ခံရရှိပြီမဟုတ်တဲ့သူတွေကို? ဗင်္ယာမိန်ခရိုင်၌ရှိသမျှသောအမြိုးသမီးတို့ကိုခုတ်လှဲခဲ့ပြီ,
21:17 ကျနော်တို့ကြီးမြတ်ဂရုစိုက်ရမယ်, နှင့်အလွန်ကြီးသောလုံ့လဝီရိယနှင့်အတူပြဌာန်းချက်ပါစေ, ဒါကြောင့်တဦးတည်းအနွယ်ကွာဣသရေလအမျိုးမှသုတ်မရစေခြင်းငှါ,.
21:18 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သမီးတို့အဘို့အဖြစ်, ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုပေးရမတတျနိုငျများမှာ, ကျိန်ဆိုပြီးကျိန်စာအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ခံရ, သောအခါကြှနျုပျတို့ကပြောပါတယ်, '' ခံရသောသူတိုင်းကျိန်ဇနီးအဖြစ်ဗင်္ယာမိန်ခရိုင်မှသူ၏သမီးမဆိုကိုပေးမည်သူမူကားဖြစ်ပါတယ်။ " '
21:19 ထိုသူတို့ကတိုင်ပင်ပြီး, ထိုသူတို့ကပြောပါတယ်, "အကယ်, ရှိလောမြို့၌ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တစ်ဦးကိုနှစ်စဉ်ပွဲခံလည်းမရှိ, ဗေသလမြို့မြောက်ဘက်မှတည်ရှိပြီးသော, တဗေသလမြို့ကနေကြာသောလမ်း၏အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင်ရာ၌ချီးမြှောက်ခြင်း, နှင့် Lebonah မြို့၏တောင်ဘက်မှ။ "
21:20 ထိုသူတို့ကဗင်္ယာမိန်အမျိုး၏သားညွှန်ကြား, ထိုသူတို့ကပြောပါတယ်: "Go ကို, နှင့်စပျစ်ဥယျာဉ်ထဲမှာဖုံးကွယ်.
21:21 တဖန်သင်တို့ရှိလောမြို့၌သမီးတို့ကခုန်ထွက်ဦးဆောင်လျက်ရှိမြင်ကြပြီမည်သည့်အခါ, ထုံးစံအတိုငျး, စပျစ်ဥယျာဉ်ထဲကနေရုတ်တရက်ထွက်သွား, အသီးအသီးတစျထိုသူတို့အထဲမှတဦးတည်းဇနီးပျောက်ပါစေ, နှင့်ဗင်္ယာမိန်ပြည်သို့ခရီး.
21:22 ထိုသူတို့၏ဘိုးဘေးတို့နှငျ့ညီရောက်လာသည့်အခါ, သူတို့သင်တို့တဘက်၌တိုင်ကြားဖို့နဲ့ငြင်းခုန်ရန်စတင်, ငါတို့သည်သူတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာဦးမည်: '' သူတို့ကိုသနားယူပါ. သူတို့စစ်သို့မဟုတ်သိမျးပိုကျ၏ညာဘက်အားဖြင့်သူတို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိကြပြီမဟုတ်များအတွက်. အဲဒီအစား, သူတို့ကိုလကျခံဖို့တောင်းစား, သငျသညျသူတို့အားမပေးစားခဲ့ဘူး, ဒါအပြစ်ဖြေသင့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်ခဲ့သည်။ ' "
21:23 ဒါဗင်ျယာမိ၏သားကိုသူတို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့ကြောင်းနည်းတူပြုကြ၏. ထိုသူတို့၏အရေအတွက်အတိုင်း, သူတို့ကိုယ်တိုင်ဘို့တဇနီးတစ်ဦးချင်းစီသိမ်းဆည်းရမိ, ကခုန်ထွက်ဦးဆောင်ခဲ့ကြသည်သောသူတို့၏အမျိုးအထွက်. ထိုသူတို့ကသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အပိုင်သို့သွားလေ၏, သူတို့မြို့ကြီးများအထိတည်ဆောက်ခဲ့, သူတို့တှငျနထေိုငျ.
21:24 ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်လည်းပြန်ရောက်, သူတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်များနှင့်မိသားစုများအညီ, မိမိတို့နေရာသို့ပြန်သွား. ထိုနေ့ရက်ကာလ၌, ဣသရေလအမျိုး၌ရှင်ဘုရင်မရှိ. အဲဒီအစား, အသီးအသီးမိမိကိုမိမိမှလက်ျာဘက်သလိုပဲအမှုကိုပြု.